Aan Ooyee Albaabka ii Xidha | buug.ga
08/05/2018 Maxamed Xirsi Guuleed "Cabdi-Bashiir"Aan Ooyee Albaabka ii Xidhamaamul
AAN OOYEE ALBAABKA II XIDHA Daabacaaddii 1aad Maxamed Xirsi Guuleed (Cabdi-Bashiir) NALA SOO XIDHIIDH Qofkii dalbanaya buuggan ama haya wax talo ama tusaale ah oo ku saabsan, wuxuu nagala soo xidhiidhi karaa cinwaanada hoos ku qoran: abdibashir@hotmail.com www.somalibooks.org Xuquuqda buuggan oo dhan waxay u dhawran tahay qoraaga, lama daabacan karo idan la’aan. ©Abdibashir Stockholm, Sweden 2012 somalibooks.org publications ISBN: 978-91-976661-5-7 TUSMADA BUUGGA GOGOLDHIG MAHADNAQ AFEEF MUSIIBADII GUMAYSIGA SIDEE LOO MAAREEYEY DEECAAMINTA BUUGGA SHEEKH AXMED WACDIYOW (GABYOW) Raajulka kaafur ah Soomali ayaan u dagaallamaynaa MAWQIFKII SAYIDKA IYO MEESHII UU KU DAMBEEYEY (1898-1920) Nin Aqdaamo Faranji ah (Masafo) Wallee Saamax Baan Jirin (Gabay) Hoga-tusaalayntii bulsho ee Sayidka DARDAARANKII SAYIDKA (GABAY) Muxuu Rabay Sayidku? MURUGTEY LAABTIIYE (Faarax Cismaan Kowte) WAA DUNI LA KALA IIBSADAY (Faarax Nuur 1920-naadkii) HABAAR TALYAANI (Guuleed Jucfe Warsame 1920-nadii) QOONSADA HALKAA (Xad-beenaadka) DALKAYAGA ILAAH KAA KEXEE (Talyaani 1940) MAR KU ROGA (Cabdi-Dhukane) MAXAA IIGA GIDHIISH AH (M. Nuur-Laangadhe) RAQDII SHEEKH BASHIIR (X. A. Afqallooc 1948) SULDAD XABASHIYEED (Ma Hadho) GUUBAABADII YUUSUF XAAJI AADAN QABILLE Dagaal nimuu haysto meel halisa Hub samayso Soomaaliyeey Gobannimo intay laalan tahay WAAN IRDHAYS-NAHAY (Gabaygii Fiinta) TAA MIYAAN LA ARKAYN? (Cali Xuseen Xirsi) MAANYARIDU SOOMAALI WAA ISTAAGEERID LAGA WAA (Keenadiid) AAN OOYEE ALBAABKA II XIDHA (Barkhadcas) AFGARAN-WAAGU WAA GUMAYSIGA Geesiga Madow (Timacadde) Nidarray Xaylow (Timacadde) INGIRIIS RAGGUU LAAYEY (Ibraahim-Gadhle) GALANGAL (Hadraawi) GABADH MADOW (Hadraawi) YABOOHIN HALYEY IYO HIMILOOYIN FOG QAYBSHEYAAL IYO MIDEEYEYAAL TIXRAACYO GOGOLDHIG Inta aanan u gudagelin nuxurka buugga aan ka hor mariyo dhowr hadal oo lagama maarmaan ah. MAHAD NAQ Mahad dhammaanteed waxay u sugnaatay, una suubbatay Allaha Weyn. Alle dabadii waxan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay buuggan aad akhriyeyso hadda. Waxa ka mid ah dadkaas: kuwa qoray buugaagta aan tixraacay, kuwa duubay cajaladaha aan wax ka soo guuriyey, kuwa qoray bogagga internetka ee aan wax badan ka faa’iday iyo dabcan dad badan oo siyaabo kala geddisan gacan ii siiyey, ha noqdo qof igu taageeray suugaan, mid iga saxay higgaad, mid ila macneeyey ereyo adag iyo mid i siiyey talo kale oo ku saabsan hirgelinta buuggan. Waxaan si gaar ah u xusayaa Dktr Saadiq Enow, Maxamed Baashe Xaaji Xasan iyo Abwaan Axmed Aw Geeddi. AFEEF Waxan ka afeefanayaa in aanan halkan ku soo wada gudbin suugaantii laga tiriyey gumaysiga, xilligii gumaystayaashu joogeen. Waxan rumaysnahay oo aan hubaa in ay marar badan ku laba jibbaarmayso suugaanta iga maqani, tan aan halkan ku ururiyey. Intani waa iga dadaal oo waxba iskama aan hagran. Laakiin haddii aad taqaanno ama wax suugaan ah ka hayso abwaan aanan halkan ku xusin oo kula diriray suugaantiisa gumaystayaashii, waxan kaa codsanayaa in aad i soo gaadhsiiso. Waxa kale oo aan ka afeefanayaa in aanan halkan ku wada xusi karin dadkii si uun gacan ii siiyey ee faraha badnaa. Waxan leeyahay Alle ha idinka abaal mariyo wixii aad samo i tarteen. Maxamed Xirsi Guuleed (Cabdi-Bashiir) HORDHAC Akhristaha sharafta lehow, waxad gacanta ku haysa buugyare isugu jira taariikh, suugaan, luqad iyo siyaasad. Kolba sidii aad u akhrido ayuu kuu noqon karaa. Xagga suugaanta waa buug lagu ururiyey maansooyin la tiriyey wakhtiyo kala duwan, oo ay kala tiriyeen abwaanno kala duwan oo ka soo kala jeeday deegaanno kala duwan. Ka soo bilow Sheekh Axmed Gabyow (Wacdiyow) oo dhammaadkii 1800-ladii ku noolaa gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, ilaa aad ka soo gaadhayso Maxamed lsmaaciil Baasarce (Barkhadcas) oo 1960kii wax yar ka hor ciil la hoos fadhiyey dhirta caleenta badan ee magaalada Hargeysa. Labadaa dhexdoodana waxa quban magacyo ku xeeldheeraa farshaxanka suugaanta oo haddii aan laga wada aqoon geyiga dhan, si weyn looga yaqaannay deegaannada qaarkood. Tusaale waxa inoo noqon kara Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo ka caansan in laguu tilmaamo, Xaaji Aadan Afqallooc, Muxumed Aw Cabdi Xaashi, Cali Xuseen Xirsi, Faarax Cismaan Kowte, Cismaan Yuusuf Keenadiid, Yuusuf Xaaji Aadan, Cabdi-Dhukane, Cali-Tuur, Cabdillaahi Suldaan Timacadde, Guuleed Jucfe, Maxamed Nuur-Laangadhe, Ibraahin Gadhle iyo qaar kale oo badan. Xagga taariikh ahaanta haddii la fiiriyo, wuxu buuggu isku koobayaa wakhti cayiman duruufihii jiray iyo wixii suugaanyahanku ka yidhaahdeen. Waa muddadii reer-Yurub iyo xulafadoodu ay gumaysanayeen umadda Soomaaliyeed ee Ilaahay dhulka u waasiciyey. Ka soo bilow markii la qabsaday bogcaddii ugu horraysay oo ku beegnayd dhammaadkii 1880 iyo markii ay xorowday meeshii xorriyad qaadata ee ugu dambaysay oo Jabuuti ah 1977. Waa muddo 90 sano ah qiyaastii. Dabcan qaybo badan oo dhulkii Soomaalida ah ayaan weli helin xorriyad buuxda oo aan looga sarrayn aayo ka talintooda. Gumaystayaashu waxay Soomaalida u kala qaybsadeen shan qaybood oo kala ahaa Jabbuuti (French Somaliland), Soomaalilaan (British Somaliland), Koonfur (Italian Somaliland), En.Ef.Dhii (Kenyan Somaliland oo Ingiriis gumaysanayey) iyo Soomaali Galbeed (Hawdka, Reserved Area iyo Ogaadeen). Sida kuu muuqata waxa kala qaybsaday saddex dal oo reer-Yurub ah iyo Itoobiya oo la siiyey qaybtii ugu ballaadhnayd dhulka Soomaalida. Dhulka Soomaali Galbeed qaybtiisa Ogaadeen, waxay Ingiriiska iyo Itoobiya kala saxeexdeen 1897. Waxayna jeexeen xuduudka 1931. Laakiin heshiisyo badan oo dhacay wixii ka dambeeyey 1941 ilaa 1954 ayaa xitaa Hawd iyo Reserved Area loogu wareejiyey Itoobiya. Qaybtii Faransiisku waxa ay xorowday 1977, qaybtii Waqooyi Galbeed ee uu Ingiriisku haystayna waxay xorowday 26 Juun 1960, qaybtii Talyaanigu haystay waxay xorowday 1 Luulyo 1960, qaybtii Itoobiya weli waxay ku hoos jirtaa xukunka Itoobiya, qaybtii En.Ef.Dhii-na waxaa la hoos geeyey dawladda Keenya oo adduunka ku soo biirtay isticmaarkii kadib. Taas macneheedu waxa weeye in shantii qaybood ee dhulka Soomaalida loo qaybiyey ay xorriyad heleen saddex qaybood halka labo ay weli ku hoos jiraan xukun shisheeye oo aanay weli ikhtiyaar buuxa u lahayn aayo ka talintooda qusaysa wixii aanay rabin umadaha ay ku hoos jiraan. Saddexdii qaybood ee xoroobay, laba ayaa bilowgiiba midoobay oo la baxay magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana saldhig u ahaa midnimadaas in saddexda qaybood ee kalena la xoreeyo oo lagu soo biiriyo midnimo Soomaaliyeed oo buuxda. Laakiin iska daa in la gaadho riyadii midnimada Soomaali Weyn ee, labadii is raacday ayaa markiiba kala booday. Qaybtii saddexaad ee Jabuuti ayadu gaar ayey isu taagtay ayada oo aan waddan magac Soomaalinimo balse ah, dal madax bannaan oo aan u gaar ahayn Soomaali ee ah mid jinsiyado badan oo lagaga hadlo ilaa afar luqadood oo siman. Haddaba wuxuu buuggu xoogga saarayaa wixii ka dambeeyey muddada gumaysigu yimid, dhibkii yimid iyo sida abwaannadu u cabbireen dhibkaas iyo weliba sidii ay xalka u arkayeen. Waxa si weyn loo xusayaa dadkii ka gilgilshay gumaysiga iyo kuwii jaalka la noqday si ay manaafacaad yar u helaan. Dhammaan abwaannada aan xusi doonaa waxay u soo joogeen Soomaali idilkeed oo la gumaysto, waanay wada dhinteen. Laakiin hal abwaan oo ka mid ah ayaa intii gumaysigu tegay, suugaantiisu hana qaadday ilaa haddana weli nool. Laakiin qiimo gaar ah oo ay suugaantiisu leedahay darteed ayaan ugu daray suugaanyahankii hore. Abwaankaasi waa Maxamed Ibraahin Warsame (Hadraawi) oo aan u aqoonsanahay shakhsi dadkii hore qiimaha badnaa inagala jooga. Xagga luqad ahaanta, waxa halkan ku urursan maansooyin kala nooc ah, gabayo, geeraarro, heello, masafo iyo jiiftooyin kala duwan. Maansadu waa marjaca ama tixraaca ugu muhiimsan ee luqadda Soomaaliga. Maansooyinkan waxa la tiriyey xilli aannu weli fasaqmin afka Soomaaligu. Markaa waxa buuggan loo isticmaali karaa tixraac xagga ereyada ah iyo aqoon-afeedka noocyadiisa kaleba. Xagga siyaasad ahaanta, waxa la odhan karaa maansooyinku dhammaantood waxay ku saabsan yihiin siyaasad ka turjumaysa madaxbannaani u-dood, gumaysi-diid, guubaabo iyo tusaalaynta jidka toosan, ka-digidda shirqoollada shisheeyaha, ceebaynta dabadhilifka iyo dabadhilifnimada. MUSIIBADII GUMAYSIGA SIDEE LOO MAAREEYEY Gumaysashadii Soomaalida iyo kala-qaybsigii dhulkoodu ma ahayn mid ayaga lagala tashaday iyo mid lagu saleeyey danahooda toona. Dabcan taas waxaa la qabay dhammaan waddamada Afrika oo loogu tashaday shir ka dhacay magaalada Barliin ee carriga Jarmalka 1884-1885, halkaas oo lagu sameeyey xuduudaha Afrika oo sida xaqiiqda ah ahaa xuduudo ay kala dhigteen waddamadii reer-Yurub ee qaybsanayey qaaradda Afrika.
Waxba yaan lala tashan Soomaalida laakiin gumaystayaashu waxay iska soo hor mariyeen sahan ay ku ogaanayaan dhaqanka Soomaalida, meelaha ay ka jilicsan yihiin, baahidooda, meelaha ay isku khilaafsan yihiin iyo waxyaalaha midayn kara. Markii ay fahmeen goljilicdii umadda Soomaaliyeed ayey soo galeen. Gumaystayaashu waxa ay ka sinnaayeen in ay kala xadaan dadka. Waxay adeegsan jireen dad ay u madax-buuxiyaan oo badiyaaba ah kuwa bulshadu qaddariso sida oday-dhaqameedyo iyo culimaa’udiin. Waxa kale oo ay aad u adeegsan jireen farsamada loo yaqaan “qaybi oo xukun.” Oday-dhaqameedyada waxay dadku ku aamminsanaayeen dhinaca masaalixda adduunyo, halka culimada lagu aamminay masaalixdii dhinaca aakhiro. Arrintaas waa ay fahmeen gumaystayaashu, mana ay la hadli jirin cid ilaa ay iska horraysiiyaan culimo iyo odayaal. Taasi bilawgii iyo mar dambeba wax weyn ayey u sahashay gumaystayaasha. Hase ahaatee bulsho weynta marna kamay dhaadhicin inay gumaystayaashu maslaxo Soomaaliyeed iyo mid Islaam toona wadi karaan. Waatii uu Faarax Nuur lahaa isaga oo abhinaya odayaasha u dan qumminaya gumaystaha: Nimanyahow bal daya xaajada, lala aguugaayo Odayaashan loo yeedhay ee, la anfac siinaayo Asaxaabihii bayna yidhi, gaal ha aaminine Haddaad niman Islaamiyo tihiin, Aadan faraciisa Oo aydaan Ilaahay ka go’in, hayna oodina’e – Faarax Nuur Sidoo kale waxa culimadii leexatay la hadlay abwaanno badan, sida Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo yidhi: Awgii Siyaarada lahaa, selel hadduu qaaday Oo ay sahwiday culimadii, saxal-mariikhowday Saxariirka aakhiro hadday sax u ogaan wayday Saqiir iyo kabiir waxa la geyn, Saqara naareede Xaaji Aadan Afqalloocna waatii uu lahaa: Af-dalleela iyo baad shubtaan diin la iibsado. Dhinaca kale Muxumed Aw Cabdi Xaashi ayaa meel fog ka saadaalinayey cawaaqib xumada ka dhalan karta falalka gumaystaha. Waxa aan caad yari ka saarnayn haddii laba cadow ka tashadaan aayahaaga in aanay nasteexo ka soo socon. Wuxuu yidhi isaga oo ka qiiraysan markii xuduudka la samaynayey: Qoof weeye laba gaal hadday, talo qorsheeyaane Qoonsada halkaa waxa ku jira, qabar laxaad weyne – Muxumed Aw Cabdi Xaashi Waxa sidaa si la mid ah u hadlay Faarax Nuur oo la yaabbanaa siday shisheeyuhu isugu dirirsan yihiin kala qaybsiga dhulka Soomaalida iyo sida qaarkeen ugu kala beretamayaan u hawl-fududaynta cadowga, ayaga oo u xilanaya dheefo yaryar. Wuxuu yidhi: Ingiriis Axmaariyo Talyaani, wey akeekimiye Arligaa la kala boobayaa, nin u itaal roone Anse ila ah aakhiru sabaan, iligyadiisiiye – Faarax Nuur Dib aynu u yara noqonno ee, waxa judhii horeba bilaabmay kacdoono gumaysi-diid ah oo midabo diineed lahaa. Dhammaan gobolladii gumaystayaashu yimaaddeen waa lagula diriray. Waxaana loola diriray hab diini ah oo jihaad ku sifaysnaa. Wax iska caabbintii Jubbada Hoose, culimadii beesha Biyamaal, xertii Sheekh Axmed Gabyow (Wacdiyow), Daraawiishtii Sayidka, Kacdoonkii Sheekh Xasan Barsame iyo jihaadkii Sheekh Bashiir ee beryo dambe oogmay ayaa la xusi karaa. Laakiin dhammaan kacdoonadii diiniga ahaa ee umadda Soomaaliyeed ka dhex abaabulmay si xun ayaa loo burburiyey. Maxaa yeelay ujeedooyinka gumaysigu u yimid waxa ka mid ahaa in la curyaamiyo diinta Islaamka. Waxa beryahaas dardar ku socday qorshihii lagu burburinayey Khilaafadii Islaamka ee gabaabsiga sii ahayd. Qorshayaasha gumaystayaasha ee burburinta Islaamka waxa ka mid ahaa: 1. In aan la aqbalin adduunkana laga ilaaliyo nadaam meel ka jira oo shareecada Islaamka ku shaqeeya 2. In aan la aqbalin, adduunkana laga ilaaliyo ciidan leh hab-dhaqan iyo yoolal Islaami ah 3. In la kala qaybqaybiyo Muslimiinta oo inay midoobaan iska daaye lagu dadaalo sii qurbidda kuwa kala qaybsan 4. In dharabta lagu khaarajiyo cid kasta oo u dhaqdhaqaaqda soo-noolaynta Khilaafadii Islaamka, kuwaasi ha ahaadeen ashkhaas ama ururo ee. Qorshayaashaas oo jiray ayey wadaaddo Soomaaliyeed oo aan isku xidhnayni ka abaabuleen meelo badan dagaallo lagaga hortagayey gumaystayaasha. Dabadeed si arxan darro ah ayaa meel walba loogula dagaallamay, ilaa kacdoon walba la dhiciseeyey. Kacdoonka ugu cimriga dheeraa wuxu ahaa kii Daraawiishta ee uu hoggaaminayey Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo 25 sano socday. Isagiina si aan naxariis lahayn ayaa looga adkaaday, ayada oo loo adeegsaday dayaarado dagaal oo ah kuwii ugu horreeyey ee lagu duqeeyo meel Afrika ka mid ah. Malleeshiyaad Soomaali ah oo siyaabo kala geddisan lagu dagaal geliyey laakiin garab iyo gaashanba u ahaa gumaystayaasha, ayaa iyaguna dhabarka ka wareemay. Culimo iyo oday-dhaqameedyo gumaystuhu xannaanayn jiray ayaa iyaguna ka caawinayey dhinaca diyaacadda iyo sumcad dilka. Taas macneheedu ma aha in aan leeyahay Sayidka iyo Daraawiishtu waxay ahaayeen ceeb ka saliim aan khaladaad lahayn. Jabkaa Daraawiishta gaadhay, waxa ka horreeyey jab ruuxeed oo Soomaali oo dhan gaadhay. Soomaalidu waa ay is wada nacday waagaas. Arrintaasna waxa ka shaqeeyey gumaysteyaasha. Jabkii Sayidka badiyaaba lagama nixin, maxaa yeelay dadka waxa la gaadhsiiyay heer loo tusay in cadowgooda koowaad yahay nin Soomaali ah. Waxay dad badani nasteex u arkayeen gumaystayaashii. Laakiin markii Daraawiishtu jabtay ee la waayey wax Soomaali ah oo cadowga cabsi geliya, ayuu cadaadiskii ugu badnaa ku bilawday Soomaali oo dhan, xitaa kuwii la shaqayn jiray gumaysteyaasha. Kadeedkii waa la xammili waayey laakiin waxa wadno loo waayey laba arrimood oo kala ah: dagaal hub loo qaato iyo magac diineed oo lagula diriro gumaystayaashii iyaguba gaalaysiinta ka waday geyiga. Maxaa yeelay, waxa dhegaha dadka ka sii qaylinayey dhirbaaxooyinkii kul-kululaa ee kacdoomadii culimada ee kala danbeeyey gaadhay. Markaas waxa bilawday dhaqdhaqaaq gobannimo-doon ah oo ay badiyaaba horseed ka ahaayeen ardaydii uu gumaystuhu wax baray. Halbeegoodu wuxuu ahaa Soomaalinimo iyo xorriyad. Laakiin magac diineed kuma ay hawl-gelin, waxaanad mooddaa in ay fahmeen in aanu cadowgu u tudhi doonin haddii laga dareemo Islaam u-dirirnimo. Markii hore ash-khaas ayaa halganka astaan u ahaa, markii dambe se waxa samaysmay ururo gobannimo u-dirir ah oo la jaan qaadayey dabaylihii xorriyad doonka ee adduunka kale ka jiray. Dhaqdhaqaaqyadaasi waxay abuureen dareen xooggan oo qowmi ah, kuna salaysnaa in Soomaalida oo dhami xorowdo oo dawlad mid ah dhisato. Gumaystayaashu may rabin dareenkaa qoomiyadeed ee xoogaysanayey. Markaa waxay ka shaqeeyeen gumaysteyaashu sidii xorriyadda la dalbayo looga ilaalin lahaa Islaamiyiin iyo waddaniyiin dhab ah. Waxa si tartiib tartiib ah xilka loogu diyaariyey karraaniyaashii iyo waardiyeyaashii gumaystaha. Qaar ka mid ah indheer garadka Soomaaliyeed waa ay fahansanaayeen luggooyada meesha ka soo socota. Yuusuf Cismaan Keenadiid ayaa 1956 cabbiray sida xaalku ula muuqday. Wuxuu yidhi: Tafaraaruqa kuwaas inagu ridey, toodi suubsade’e Taws aan baxayn iyo bugtey, nagu tallaaleene Tubtii innaga leexshiyo jidkii, inagu toosnaaye Tashigiiba sida loo gafaan, weli tebaayaaye Towfiiq ma noqon wiilashii, taajka loo suraye Tacaddi aan yareyn baa ka dhacay, tey ku kacayeene Ninkii tira-yar maalkiisa waa, laga takooraaye Mareekaanka nagu taagan baa, taabey jahadiiye Amxaarana tahdiid iyo waxay, tiri naloo sheegye Cadowga soo tartamayiyo cabsida, loo tawaley ruuxa Laye tamashle uun bey hayaan, tiilka madaxdiiye Dawladnimo tabtaa lagu dhaqaa, tacaddi sow maaha. – Cismaan Yuusuf Keenadiid Aakhirkii waxa si nasiib ah xorriyad loo siiyey gobolladii Ingiriisku gumaysan jiray iyo kuwii Talyaanigu gumaysan jiray. Si halhaleel ah ayey u midoobeen, uguna hawlgaleen sidii loo heli lahaa shanta Soomaaliyeed oo wada xorooba, dabadeedna midooba. Isla wakhtiyadaas waxa bilawday dadaallo caalami ah oo lagu beenaynayo riyada Soomaali Weyn ilaa aakhirkii lagu guulaystay in xitaa qaybihii nasiibka ku xoroobay loo celiyo qabaa’il is neceb oo cadowgooda koowaad u yaqaanna nin Soomaali ah. Fashilka ugu weyn ee ku yimid gobannimadii la helay, waa ayada oo u gacan-gashay dadkii uu soo tabobartay gumaystuhu oo siyaasadda ka yaqaannay sida loo maamulo ummad la gumaysanayo. Farxaddii iyo raynrayntii lagu soo dhaweeyey xorriyadda, markiiba way gaagaxday. Waxa taas sida qorraxda u caddaynaya suugaantii la tiriyey sannadadii ka dambeeyey 1960kii. Bal u fiirso Guhaad Cabdi-Gahayr oo markiiba fahmay in aan meesha xorriyad la heline, ay is bedeleen uun nin cad iyo nin madow, laakiin fikirka iyo dhaqanku isku midkii uun yahay weli: Good iyo abees bays bedelay, garanna maysaane Goraygii ilmii buu ka tegay, guumiska ahaaye Gocondhooyin baa aasan iyo, mid gabaarrey Karal kaama guurine halkanuu guud madow yahay. – Guhaad Cabdi-Gahayr, 1960 Waxa sidaas si la mid ah u cabbiray Abwaan Qaasim oo isagu markii hore u damaashaaday xorriyad la-mooddii la helay. Wuxuu yidhi: Dambi ku hadli maayee ma arag, dawladdaan rabaye Isma doorin gaalkaan diriyo, daarta kii galaye Dusha midabka Soomaali baad, dugulka moodaaye Misna laguma diirsade qalbigu, waa dirkii Karal e Meeshaan dad aan urursho iyo, darar ka eegaynay Iyaba waa darxumo ii hor lehe, dacar miyaan leefay? Ma darraato raadkaan dhigaan, dib ugu soo laabtay? Sidii aan dayaysnahay miyaan, dawgii ka habaabay? – Axmed Ismaadil Diiriye (Qaasim) Cabdillaahi Suldaan Timacadde ayaa isaguna saadaal ka bixiyey dhibta kasoo socota kusii-xidhnaanta iyo jaal la-noqoshada gumaystayaasha isaga oo caddeeyey in aanay wax horumar ah la rabin dadka Afrikaanka ah. Wuxuu yidhi: Geesiga madow uma ogola, guusha reer-Yurube Geerida Lamuumbaa wadnuhu, noo gig leeyahaye Geyigiisa goortuu qabtee, gees isugu leexshay Iga guura galabtuu yidhaa, geeddan loo xidhaye Godka waxa u qoday Haamarshool1, waa gedduu rabaye Maantaba hadday gawraceen, way gam’ahayaane Meeshuu galaba doollaarku waa, uu gembiyayaaye Ninkii dunida kala gaabiyaa, garabsanaysaane Raggan gacanta haystoow wallee, saad-dambaad garane Qudheennani intaynaan geb odhan, yeyna kala gaadha Haddii kale se goor aan fogayn, gawda bal aan eegno – Cabdillaahi Suldaan Timacadde, 1961 Maxamed Nuur-Laangadhe oo ah abwaanka tiriyey geerarka la magac baxay Maxaa Iiga Gidhiisha, ayaa isaguna ka cabanaya sida uu ugu hungoobay calanka la belay. Wuxuu yidhi: Calanyahow dhib baa igaga timi dhalashadaadiiye Dheef baa lagaa eegayee, dhiig sidaad tahaye. – Maxamed Nuur-Laangadhe, 1963
Hamarshool: Waa Dag Hammarskjold ahaa nin Iswiidhish ah oo xukumayey UN-ka (Qaramada Midoobey) min 1953 ilaa markii la khaarajiyey oo ahayd 1961. Wuxuu Timacadde qabaa in uu lug ku lahaa dilkii foosha xumaa ee Batriis Lumumba.
Mar kale waxa xus mudan Guhaad Cabdi-Gahayr oo rajo ka qabay in hoggaan fiican oo wadani ah la helo, oo markii Aadan-Cadde la bedelay, arkay in aan waxba is-bedelin. Wuxuu yidhi: Kanna aragte kii horena waad, wada ogeydeene Miyaan madax Ilaahay taqaan, nooba imanaynin? – Guhaad Cabdi-Gahayr, 1967 Intaasi waa garooc yar oo ku saabsan dareenkii abwaannadu ka muujiyeen xorriyaddii dhicisowday ee Soomaalidu ka heshay cadowgii siddeetanka sano gumaysanayey. Xorriyaddaas dhicisowday iyo halgankii dheeraa ee loo galay heliddeeda iyo xanuunkii laga mutay gumaysiga waxaad igala dheehataan buuggan. Weliba si aydaan ugu hafan badweynta soo socota ila sii deecaamiya googoosyo ka mid ah suugaanta aad kula kulmi doontaan gudaha buugga. DEECAAMINTA BUUGGA (1) Bal Oggow Isticmaarku Abidkii Irridkuu Marinaayo Awr Raran Irbad buu Ku Dayaa Ayaanta Horee Raggaan Arkayee U Abasaxayow Ninowna Ha Odhan Soomaalaan Ahee Ordoo Magacana Ka Iibsada. – Barkhadcas, 1958 (2) Gambadii dumarkaa la ii guntiyoo Gabbal baa iigu dhacay gasiirad cidloo Gabaahiiri waa gumaysiga – Barkhadcas (3) Rajulka kaafur ah ee rugtaan yimid Sidii rasuul Rabbi nooma soo dirin. Mana rabnoo naga reed bax waa niri Haddaadse ruux la dagaasho kaa roon Reerkaad u kaashan laheydne raagaan Ragoow haddee qalbi waa rafaadaa. – Sheekh Axmed Gabyow, 1891 (4) Waa duni la kala iibsadoon, nala ogeysiine Waa duni akhyaartii go’dayoo, aaran soo hadhaye Waa duni ninkaad aamintaa, kuu abees yahaye Anse ila ah aakhiro sabaan, iligyadiisiiye – Faarax Nuur, 1920naadkii (5) Ingiriis ragguu laayey baan, cidi illaaweyne Axmad-Gura unuunkay jareen, ehel ha waayaane Oomaarna waad wada ogtihiin, uubtii loo qodaye Sayidkii addoonsiga nebcaa, aakhiro u tabiye Waa kuwii Cadhoolana2 ajalay, calankan awgiiye Halyeygii Bashiir bay dharaar, adhaxda gooyeene. – Ibraahin Gadhle (6) Doodna waxaan u leeyahay, da’kastaba ha noqotee Kuwii diinta qariyow, idinkays dilaayoo Nin dalkiisii iibsaday, dulli buu ku waariye Ninkii gaalka dabagala darxumow dambaynoo Naftu hadday ka duushana, dalku waysu diidiye. – Sayid Maxamed Cabdille Xasan, bilowgii 1900
Cadhoole: Waa Cabdiraxmaan Cadhoole oo kamid ahaa halgamayaashii aqoonyahanka ahaa ee loo unuun-jaray gobannimo doonka, gaar ahaan dhinaca Jabuuti. Si naxariis darro ah oo cadaawad miidhan ah ayey gumaysiga Faransiisku u dileen Cabdiraxmaan Cadhoole. Arrintaasi waxay ku reebtay shacabka reer-Jabuuti uur-kutaallo iyo halgan adag oo ay u sii galaan xorriyaddooda. Fiiri qormada Cabdalla Xaaji ee halgankii Jabuuti.
(7) Dawo lagama helo gaal haddaad, daawo dhigataane Dabin buu idiin qoolayaa, way din dagayaaye Dirhamkuu idiin quba-hayaad, dib u go’aysaane Marka hore dabkuu idinka dhigi, dumar sidiisiiye Marka xiga dushuu idinka rari, sida dameeraaye Marka xiga dalkuu idinku odhan duunyo dhaafsada e Marka xigana daabaqad ayuu, idin dareensiine Maxaad igaga digataan berruu siin3 la soo degiye. – Sayid Maxamed Cabdille Xasan (8) Waxay tidhi “Inkaar buu ku go’ay, odagi Soomaale Awlaaddi uu dhalayna waa, sida adoogoode Hadday ul iyo diirkeed yihiin, rag iska eegaaya Afrikadan ma joogeen nimaan, aabbe ku lahayne. – Cali Xuseen Xirsi, 1950naadkii (9) Siduu abeeso dilaayo, ragguu laayey Abeelle4 ce la dhacaayey Alwaaxa ce Afka dhiiggu da’aayiyo agoontii yaryaraydee aabbihii korinaayey uu ka gooyey unuunkan Miyaan taa la arkaynin? – Cali Xuseen Xirsi Siin: Waa qalabka war-isgaadhsiinta ama war lalinta qaarkood. Abeelle: Waa magac nin Talyaani ahaa oo gumayste ahaa. (10) Gobannimo mid weeyee hadduu, meero xariggeedu Misbaaxiyo haddey kaa demaan, muunaddiyo nuurku Gacmo maran mugdaa kuu xigiyo, meel xilliyo hooge Dawladnimo nimaan maalahayn, laga mid roonaaye Mulki iyo awood iyo waqii, malaha maamuuse Mucsir weeye maalmaha adduun, magan ha loo yaabo – Faarax Cismaan Kowte, 1920naadkii (11) Dunjiga Aadan ubadkuu dhalaad, ugu dambaysane Wixii aad ku dacafteen, qalbigu saw iskama daayo Dib maxaa idiin celinayoo, hore idiin diiday Mar uun maad ku dayataan khalqiga, libinta doonaaya. – Xaaji Aadan Afqallooc (12) Gobanimo dalleel lagama helo, daar adoo gala’e Haddaad doono leedahay naftaa, diiq la geliyaaye Waa mur iyo deebaaq waxaad, dib ugu aydaane Marse haddaan waxaan doonayiyo, dawladnimo waayey Dantay weeye inan aamusaa, eegga dabadeede Dulligaa ku jira noloshu waa, idinku deelqaafe. – Xaaji Aadan Afqallooc, 1940naadkii (13) Kun baa subax disheen aamin ah, oo seexdey oo kacay Saddex boqol ka badan culimadii, suuqa Harar tiille Iyaga oo salaad jamac galaad, seefku mariseene Saqda laylka dhaxe waxaad gasheen soolkii Dhagax-buur e Samada iyo dhulkaba ciidankii, riday sawaariiqda Kama seydhin ruux keliya oo, joogay subaxaase. – Xaaji Aadan Afqallooc (14) Samir iyo Allow maleh sidaad, noola dhaqanteene Waa ma hadho saanqaadka kora, lala sugaayaaye Dhiig saafiyaa loogu qoray, saan biciid adage Duq kastaaba sabiguu dhaluu, saa ogow yidhiye Gartayadu xuduud kuma sinna iyo, soohdin iyo jaare Waa saamigaad qaadateen, sabankii Baarliine. – Xaaji Aadan Afqallooc (15) Qoof weeye laba gaal hadday, talo qorsheeyaane Hindigay qafaasheen beryey, qaran ahaayeene Qarni malaha Yawguba markuu, qaatay keenada e Waa tii Suweys uu qabsaysay, qamac dharaareede Waxa horteen sidaa loo qarribay boqol quruumoode Qoonsada halkaa waxa ku jira qabar laxaad weyne. – Muxumed Aw Cabdi Xaashi, 1920-30kii (16) Waagaan dhawaaqaayey een dhego la’ii yeelan Dharaartii hadday ila gartaan lama dhaqaajeene Maantooy dhanaanaatay bay dhabanka haystaane Dhammaantiin Soomaalaay hadday, dholo’di joogtaaye In Qiyaamihii soo dhawyahoon, dhegiba noolaanin Iyo gaalka inaan dhoofinoo, dhidibka loo saaro Labadaas mid uumbay u dhici dhaaxa lala yaabye. – Muxumed Aw Cabdi Xaashi (17) Talyanoow sidii duur belbelay, dab isu kaa dhaafye Degelladu ku wada naaqusoo, dugum lagaa yeelye Dekedaha wax kugu qayliyaa, kaaga soo dego ee Duufaan Ilaahay ku geli, sida dabayleede. – Abwaan Cali-Tuur (18) Haddii Ciise Muusaha majnuun, lagu malaynaayo Waa muusannaw xaajadaa, nagu maqleyseene Intaan marantideenniyo hablaha, madaxa loo xiirin Mar ku roga mareeg-diidka waa, laga macaashaaye. – Abwaan Cabdi-Dhukane (19) Dadkey madaxdu ka xumaato way, marin habaabaane Kuwa muqaddimada looga dhigey, waa manfaco doone Mar maxaad cuntaa keliya buu, yahay muraadkoode Nin mushaharo eexeyn-hayaa, waa miskiin dhabahe Muddeec waxa ka dhigay waa inuu, maarmi-waa yahaye Muddaafacana seeg iyo in uu, maya yiraahdaaye Culimadana damac baa melgoo, mooyi sey tahaye Milladdiyo shareecada bar baa, maal ku iibsada’e Marsiin iyo fudeyd buu ku dhacay, magane diinkiiye. – Cismaan Yuusuf Keenadiid (20) UN-ada taarka loo direy, waxba nama taraayee Waxay taawin badidood, si laynoo taxaabto e Waa la takhantakhayn jiray, ninkii tabar-yar weligiye Tiirridatan gaalo ah, jinnaa inagu taagaye Waa niman takoormayoo, towxiidka diidaye Towreed iyo Injiil iyo teennaba ka beyre e Tawaani keen isuma hayso, isku towna maahine Ninkii haatan taabacayna, tubta kheyrka seegyaye Togaggii Firdowsaad, tegi-maayo weligiye – Cismaan Yuusuf Keenadiid, masafo (21) Ingiriis Hargeysuu degiyo, hilinnadeediiye Wax Talyaani weli haybiyaa, hoosadii Xamare Faransiis Jabuutuu hurdaa, idinku hiifaaye Wax Maraykan hawdka u maraa, waa horseed yimiye Waakaas dhulkeenii hantiyey, hooliflow Xabashe Hub samayso Soomaaliyeey, lagu hareereeye. – Yuusuf Xaaji Aadan Qabille (22) Qaramadan gadaal-kacay qarbigu, waa geddiyayaaye Gobannimada lama doonayaan, gadasho mooyaane Wiilkii garaad lagu tuhmaba way ka gurayaane. – Cabdillaahi Suldaan Timacadde (23) Nasaqnimo Cagoolow Rabbaa, naaska kuu sudhaye Ogaadeenku waa nala niyoo, nuurki wada gaadhye Nafarkiyo aday kugu hodeen noolka Xabashaade Nacabkaaga weeyaan waxaad, nugusta haysaaye Kuwii Nebiyadii caasiyaa, Naashka kuu dhigaye Naxlina kuu gal Soomaalidaad, Naafi leedahaye. – Cabdillaahi Suldaan Timacadde (24) Goldalooladay jecel yihiin, ciday galaaftaane Gelin qudha ma daayaan ninkay, gaatir ku arkaane Gacma-hoorsi kaagama tagaan, kumana guuraane Geesaa bay yeeshaan haddaan, waranku giirrayne Dhegahay gufeystaan haddaan, geesiyaal heline Garta ay dhagaystaanba waa, gumuc rasaaseede! Gujaduu ku maalaa ninkii, geda-yaqaanaaye. – Hadraawi (25) Hub wixii galaabaxay haddaan, meelna lagu gaadhin Ninkiinnii gurguurtiyo intii, naafo gabargaashey Ninkii gurungurcoodkuu dhaliyo, gacaladiis waayey Nin goblamay nimaan gaban u hadhin, gaar nin keligiisa Gallad qubatay xooliyo dadiyo, garangar duugowday Gocoshiyo xanuun ma leh wixii, guud ahaan lumaye Gobanimada waa loo dhintaa, gooriyo ayaane Ummad gadata mooyee nin kale, waa ka garannuuge Ma gabloosho beertii xabiyo, dhiig ku goraraaye Damalkii la gooyaba mid baa, soo gadaal baxa e Guri laga baroortaba aroos, gaafan baa xiga e. – Hadraawi (26) Maxaa guul darraystiyo godadliyo hinaasiyo Gocor igu habayseen Giiba sow nin ma ahayn? Geeskayga bari yimi Maxaad gacan ku dhiigliyo gibil kala tabooriyo garma-qaate dhegaliyo garac igu abuurteen? Maxaad good mariidliyo gungumiyo abeesiyo goodaaddo jidhifliyo garangoorri socotiyo inta bahal gurguurtiyo belo igaga guurteen. – Hadraawi (27) Gudaha ceelka Hargeysa Weligay gees uma dhaafin e Bal maxaan laba gaal oo Abtirsiimo gudboon Midkood guusha u siin Midna aan u gumeyn Maxaa iiga gidhiisha? – Maxamed Nuur-Laangadhe, 1943 SHEEKH AXMED WACDIYOW (GABYOW), 1891 Sheekh Axmed Sheekh Abiikar Xasan Sheekh Axmed Wacdiyow (Gabyow) oo ku noolaan jiray gobolka Shabeellada Dhexe, wuxuu ahaa nin caalim ah isla markaana suugaan-aqoon ah. Wuxuu had iyo jeer bulshada ku wacyi-gelin jiray suugaan kala duwan oo ay ugu caansanayd nooca maansada loo yaqaan masafo. Xitaa dacwada iyo diin-fidinta wuxuu u-adeegsan jiray maansooyin kala duwan oo si dadban caqiidada u tiimbinaya dadka. Haddaba markii uu gumaystaha Talyaanigu qabsaday dhulka Soomaaliyeed, wuxuu Sheekh Axmed-Gabyow kala hor-tegay dagaal jihaad ah. Wuxuu abaabulay dadkii, wuxuuna ku guubaabiyey suugaan. Sida u caadada ah dadka aan meel fog wax ka eegin, qaar badan ayaa Talyaaniga gacan ka siinayey danihiisa gurracan. Bulshada badankeeduna uma ay dhega-nuglayn Sheekha iyo dadka la midka ah ee ku dhiirrinaya in gumaystaha la iska qabto inta goori goor tahay. Waxaa ka mid ah suugaantii uu dadka wax ku fahansiinayey masafooyinka soo socda. Raajulka kaafur ah Rajulka kaafur ah ee rugtaan yimid Sidii rasuul Rabbi nooma soo dirin Mana rabnoo naga reed bax waa niri Haddaadse ruux la dagaasho kaa roon Reerkaad u kaashan laheydne raagaan Ragoow haddee qalbi waa rafaadaa. Soomali ayaan u dagaallamaynaa Markii Talyaanigu yimid degmada Cadale sanadkii 1891, wuxuu Talyaanigu dhinaca Muqdisho kasoo diray odayaal Soomaali ah si ay Sheekh Axmed-Gabyow uga joojiyaan suugaanta uu dadka ku kicinaayo ee uu kaga soo hor jeedo gumaysiga Talyaaniga. Markaa wuxuu Sheekh Axmed-Gabyow ugu jawaabay odayaashii uu soo adeegsaday Talyaanigu: Soomaali aan u dagaalamaynaa, Dalkaan balaaran u daafacaynaa, Kufriga soo degay diida leenahay. Kuwa dulmaaya la dood gelaynaa, Dantiinii duul kale dhowri-maayee Ha daalinoo u dulqaata leenahay Dabeysha mowdku intuu i daadayn, Hilibka duud cunin, oonan deebna noqon, Dadka tus aan danahiisa leeyahay Duruyaddaada dab looma aasee, Kuwa dambaan u dariiq falaynaa. MAWQIFKII SAYIDKA IYO MEESHII UU KU DAMBEEYEY, 1898-1920 Sayid Maxamed Cabdille Xasan wuxuu ahaa wadaad asal-raac ah oo ay haysay qiiro Islaamnimo iyo mid waddaniyadeed oo cabsi gelisay gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida iyo xitaa Faransiiska oo dhammaantood ku shuraakoobay boobkii dhulkii Soomaalida. Wuxuu kusoo beegmay xilligii reer-Galbeedku kala qaybsadeen dhulkii Soomaalida iyo qaaradda Afrika badankeeda iyo weliba guud ahaan caalamka aan caddaanka ahayn. Boobka dhulka Soomaalida waxa reer-Galbeedka ku wehelinayey dawladdii Xabashida ee xulafada la ahayd. Dawladda Ingiriisku waxay qoondaysatay oo degtay dhulkii markii dambe loo bixiyey Soomaalilaan. Dano dhaqaale, qaar istiraatiijiyadeed iyo kuwo diineedba way lahaayeen gumaystayaasha reer-Galbeed. Haddaba Sayidku wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee dagaal abaabulan ka bilaaba dhulkii Ingiriisku gumaysan jiray. Hase ahaatee waxa dhiciseeyey halgankiisii gumaystayaashii saddex-geesoodka ahaa: Ingiriis, Talyaani iyo Xabashi, hoggaamiye dhaqameedyo gacan-saar la lahaa gumaystaha iyo culimo gacan-saar la yeeshay gumaystaha iyo dabadhilifka gumaystaha. Culimadu xagga diinta ayey ka wareemeen oo waxay dadkii ka dhaadhiciyeen in aanu ninkani diin sax ah haysan ee uu lunsan yahay. Hoggaamiyeyaashii qabiilkuna waxay dadkii uga dhigeen nin qabaa’ilkooda dabargoynaya oo aan u jeedin la dagaallan gaalo. Marka ay dadka ku carinayeen goldaloolooyinka Sayidka iyo Daraawiishta, marna ma aanay ka hadlahayn sidii gumaystaha la isaga kicin lahaa iyo waajibnimada arrintaas. Marka la xasuusiyo xumaanta gumaystaha, waxay xujadoodu ahayd, “Kuwani waa cadow gaalo ah oo xumaantoodu way iska caddahay, laakiin xikmad ayaa loo baahan yahay.” Sayidku dhinaciisa wuxuu olole ugu jiray inuu helo taageerada bulshada. Wuxuu si walba ugu dadaalay kasbashada culimada iyo odayaal dhaqameedka beelaha. Wuxuu qabay fikir ah in ay waajib diineed tahay la-dagaallanka gumaystayaasha. Ciddii caawisa gumaystaha ama safkooda gashana wuxuu u qabay gaalo diinta ka riddowda oo dhiiggooda iyo maalkooduba bannaan yahay. Markii uu ka quustay dadkii hormoodka ahaa ee gumaystaha kala saftay, waxa uu ku bilaabay dagaal rogaal-celis ah oo uu xumaantooda kaga digayo. Haddaba halkan waxa aynu kusoo qaadanaynaa dhawr gabay oo muujinaya mawaaqiftii Sayidka iyo mabda’ii halgankiisa. Nin aqdaamo Faranji ah (Masafo) Sayid Maxamed Cabdille Xasan Mar wax laga waydiiyey Sayid Maxamed dadkan gumaystaha ka raacay ee haddana sheeganaya Soomaalinimo iyo Islaamnimo, ayuu masafadan tiriyey. Wuxuu sheegay in kuwaas ashahaadadoodu been tahay oo aanay sax ahayn in Islaamnimo lagula dhaqmo. Wuxuu yidhi: Nin aqdaamo5 Ferenjiya, Maantiyo abuurriin Ama aaladda u sida, ama awrtaba u rara Ama adhigaba u qala, ama laba ugaadhsada Ama uba ilaala ah, ama uurka kala jira Ashahaado beeniyo, Islaamnimo ha lagu dhaqo Ilaahayna nama odhan, Anna ma oggolaan karo! 5 Aqdaamo: Khaadin, adeege. Wallee Saamax Baan Jirin (Gabay) Mar kale waxa uu Sayid Maxamed Cabdille Xasan caddeeyey mawqifka diintu ka qabto dadka la safka noqda gumaysteyaal gaalo ah oo mullatari ahaan ku jooga dhul Islaameed. Caamada waxa jaho-wareer ku riday waagaas culimadii diinta oo warka Sayidka ku sheegayey mid aan waxba ka jirin iyo in aanay iyaga wax colaad ahiba kala dhaxaynin gaalada. Markaas ayuu mariyey gabay dheer oo aan kasoo qaatay intan yar ee uu ku leeyahay: Niman baa shareecada siroo, gaalka saacidaye Oo shalay safkii nagaga baxay, saymihii dhacaye Oo Saarashada Faranjigiyo, saajinka u xilane Awgii6 Siyaarada lahaa, selel hadduu qaaday Oo ay sahwiday culimadii, saxal-mariikhowday7 Saxariirka aakhiro hadday sax u ogaan wayday Saqiir iyo kabiir waxa la geyn, Saqara naareede Soon iyo salaad iyo sekada, sadaqaddii iidda Sawaab kama helaayaan waxay, camal samaysteene Saasna waxa uugu wacan kufriga, Saab8 la leeyahaye Saaxiibkaa wuxuu kugu furaa, soohdintuu dego e Iyaga oon ka saahidin wallee, saamax baan jirine9 Aw: Ninka diinta wax ka barta ee bulshada ugu adeega intaas uu diinta ka yaqaan. Saxal-mariikhow: Saab: Erey asalkiisu Ingiriisi yahay oo Soomaali loogu dhawaaqay “sahib” oo la macno ah sayid ama mudane. Hoga-Tusaalayntii Bulsho ee Sayidka Sayid Maxamed Cabdillaahi Xasan muddadii dheerayd ee uu dagaallamayey wuxuu la kulmay caqabado fara badan oo aakhirkii u nugleeyey warmihii gumaystaha. Laakiin isagu kama daalin in uu mar walba dadka ugu baaqo inay safka cadowga ka soo baxaan oo jihaadka la xoojiyaan isaga. Maansadan masafada ah wuxuu ku tusaalaynayaa dadkii Soomaaliyeed ee gumaystaha ku hoos jiray oo uu u qaybiyey: 1. Qabiilooyin uu sheegay in aanu jeclayn inuu dhib gaadho oo uu mid walba abaal gaar ahaaneed oo uu ku ammaanayo ku xusay 2. Dad caasi ah oo uu ula jeedo askartii iyo shaqaalihii caamada ahaa ee gumaysiga u adeegayey 3. Culimo xumaatay oo halkii ay umadda ku hoggaamin lahaayeen diinta, ayagii daba-fadhiistay rag dabadhilif u ah gumaystaha 4. Iyo dad maato ah – dumar iyo carruur – oo ay kuwaasi khaldeen. Mawqifka Sayidka waxa ka muuqata in uu aaminsanaa in ciddii la saf noqota gaalo la dagaallamaysa Muslimiin, ay ayaguna gaaloobayaan, xitaa haddii aanay ayagu afkooda ka qiranin taas. Xitaa haddii ay salaaddii tukanayaan, oo soomayaan oo sekadii bixinayaan. Taasi waa mad-habkii salafka sida ku cad kutubaha qadiimka ah. Laakiin tan iyo waagii Tataarku qabsaday caalamka Islaamka, iyo markii dambe ee gumaystuhu yimid waxa la arkay Muslimiin culimo iyo caammaba leh oo aan arrintaas gaalnimo u arkayn. Qolo walba wuu hoga-tusaalaynayaa. Marka hore wuxuu ku halqabsanayaa Xaaji Suudi Shabeelle10 oo ahaa afhayeenkii Sayidka, kana mid ahaa aasaasayaashii Daraawiishta ee khusuusiga ahaa. Waxaad mooddaa inuu Sayidku ka waaninayo Xaaji Suudi dagaal lagu qaado beelaha Soomaaliyeed qaarkood. Wuxuu yidhi Sayid Maxamed: Waar Suudoow dagaalkaba, anigu dooni maayee Dunjigiisa iidoor, duudsi baan ka yeeloo Dibindaabyo Habaryoonis, dacwi iima qabanoo Dagaal Sugulle Caynaashe11, durqunkii ka dhaartoo Danabbada Ammaan12 dhalay, daawaa naga dhaxaysoo Suudi Shabeelle: Waa Darwiish kamid ahaa afraaddii aasaastay Daraawiishta. Wuxuu ahaa afhayeenka Daraawiishta ilaa isaga oo ku loogan faltan jihaad ay Ingiriisku dagaal ku dileen sanadkii 1920. SUGULLE Caynaashe: Waa qolo ka tirsan Habaryoonis oo ah qabiilka suldaamada beeshaas asalka u lahaa. AMMAAN: Waa Suldaan Xirsi Amma Suldaan Diiriye Sugulle oo ahaa hoggaamiye Saldanada Habaryoonis kamid ahaa oo aad u xoog badnaa wakhtigiisii. Waa ninkii lagu tilmaamay gabaygii Ismaaciil Mire ‘Kibirka’ markii uu lahaa, “Kaysaha adduun Ina Ammaan koos dhan buu helaye, kolna kii asraa’ilay ma hadin kama yaabayne, Ragow kibirka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado.” Laakiin wakhtigan Sayidku noolaa waxa joogay faracii Xirsi Ammaan. Dabar hadduu ka baylaho, dubkaa ii xanuunoo Dembi igama raacoo, daacad weeye saasoo Darwiishkii Suldaan Nuur13, duudooduu ka beermee Ciidagale ma daaroo, an danqaabi maayoo Duubigay callaameen Diiriyaannu14 xididnoo Markii uunku dabagalay, waa kii doc uga leexdoo Wax kastoo loogu dawgalay, waataan la daynoo Dayax weerar jeer hore, rag baa igu dukhuulee15 SULDAAN NUUR: Waa Suldaan Nuur Axmed Suldaan Ammaan Suldaan Diiriye, waa suldaankii beesha Habaryoonis ee waagii Sayidku soo baxay. Wuxuu kamid noqday dadkii ugu horreeyey ee Daraawiishta wax ka dhisay, kana tirsanaa ilaa uu ka dhintay. Waxaa lagu tilmaamaa suldaankii ugu horreeyey ee taageeray fikirkii gumaysi-diidka ahaa ee Sayid Maxamed iyo weliba suldaanka kali ah ee Soomaaliyeed ee halgankii Daraawiishta kamid noqday. DIIRIYE: Waa Suldaan Diiriye Suldaan Xasan Suldaan Faarax Suldaan Guuleed oo ahaa suldaankii Ciidagale. Wuxuu suldaan ahaa 104 sano. Wuxuu kamid ahaa salaadiintii uu Sayidku ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan dadka la gaalaysiinayo oo ay halgankiisa ku taageeraan. Waxanu ku sigtay inuu ku biiro Sayidka haddii aanu Ingiriisku sirtaa heli lahayn. DAYAX-WEERAR: Waa geelii ugu horreeyey ee ay dhacaan ciidamadii Daraawiishta. Wuxuu ahaa geel ka badan 2000 oo halaad. Waxa laga dhacay beesha Suldaan Diiriye. Ficilladii ka dhacayey ciidamadii Daraawiishta sida in xoolo islaameed la dhaco ama beelo lagu duulo iskuma ay raacsanayn Daraawiishta lafteedu. Taas waxaad ka garan kartaa isla maansadan uu Sayidku kaga cudur-daaranayo dhicistii Dayax-weerar. Waxa kale oo kuu caddaynaya geerarka uu isla geelaa ka tiriyey Shariif Cabdulle Shariif Cumar oo ahaa nin shariif ah oo ka tirsanaa Daraawiishta. Wuxuu yidhi: Col Ashraafi wacaysiyo Caalin reero dhacaaya Cilmi geel lagu qaado Sayidkii Calmanaayow Cimri yuu ku simaayoo Cidhibteeda ogaada? Dadka Nuux Ismaaciil16, dudmo igama haysoo Reer Yoonis17 dayr hore, waa tuu diiday gaalkoo Diigaanyo xoolo ah, waa tii laga dareershoo Deyn iyo dulsaar badan, waa tii laga duduucee Markii Sayidku caddeeyey in aanu duullaan ku ahayn beelahaas uu xusay oo ahaa kuwii ku hoos noolaa gumaysigii Ingiriis, isla markaana uu caddeeyey sida uu beel walba ugu hayo wanaag hore, ayuu ku jeestay NUUX ISMAACIIL: Waa qolo ku abtirsata beesha Sacad Muuse ee Habar-Awal. Waxay u kala baxaan: Yoonis Nuux, Axmed Nuux iyo Cali Nuux. YOONIS: Waa Yoonis Nuux Ismaaciil oo ku aroora Sacad Muuse, Habar-Awal. Darwiishkii ruug caddaaga ahaa ee Xaaji Suudi Shabeelle. Waxa uu Xaajiga hoga-tusaalaynayaa sida uu dagaalku u xun yahay ee dhibaato looga dheefayo. Halkaas waxa uu ku muujinayaa inay dagaalka dantu ku qasbayso ee aanu iskii u jeclayn. Wuxuu yidhi isaga oo sii wata hadalkiisa: Awgey danafka baas daa, dirdiro ma fiicnee Nin duqaan ku moodaye, daa’imo miyaad tahay? Dacwigaan bannaanayn, maxaad uga dan leedahay? Ina Shixiri18 baa dilay, danyadiyo islaaxoo Ragguu dahabka dhaafsaday, cadhaa wada digsiisoo Door buu is moodaye, waase dooro weynee Ma ku dayatay waadigan, wax duqlaalinaayee Maxaad uga dan leedahay, duullaanka aad humi. INA SHIXIRI: Sheekh Cabdillaahi Shixiri wuxuu kamid ahaa aasaasayaashii Daraawiishta, isla markaana ahaa xidhiidhiyihii arrimaha debedda ee Daraawiishta ilaa ay is-khilaafeen Sayid Maxamed oo uu ka goostay. Sababta uu uga baxay Daraawiishta waxaa lagu sheegay ilaa saddex sharrax oo kala duwan oo kala ah: 1. Khilaaf shakhsi ah oo dhex maray isaga iyo Sayidka 2. Sheekhii Saalixiyada ee Maka oo fatwo diidmo ah kasoo saaray Sayidka 3. Iyo in Ingiriisku laaluushay sida ka muuqata masafadan. Alle ayaase xaqiiqda og. Dawo lagama helayoo, durbaa lagu halaagmiye Ninna duuli maayoo, cirka uma dafaayee Waxa dunida joogaba, dukhaan laguma ridayee Degmo haatan baan, duug laga arkaynoo Reero duunyo haystaa, caydho dulugle noqonoo Dagaaggaa wuxuu tegi, dekeddii Cadmeedoo Wiilal Deeb marsaday buu, waraabuhu duddubinoo Meyd dogob la moodaa, dugsiyada wadhnaanoo Wax la dooxo mooyee, dar kalaan jiraynoo Fardaa dininigtoodaa, dooy looga qixiyoo Dooyadaa waxay tegi, Adari daafaheedoo Wixii deeble geelaba, duhur baa la qabanoo Makhribkaa hadduu dumo, dalaad lagu arrumiyoo Iyadoo daruur u eg, ama daad masaalkiya Markii waagu daalaco, derbi waa la kicinoo Senge duubi weyn baa, hadba dooc ka geliyoo, Daliilkii Ilaah iyo, dikraa lagu kaxaynoo Dugul maraqa luli, dabadaa loogu xidhiyoo Debec lama uleeyee daaqsin bay u soconoo Kuwii Deero foofsaday, dugaaggaa la siiyoo Daabbaddiyo hubkoodii, dorraataa la helayoo Dayayadii horreetaa, rasaas lagu digsiiyoo Dawanka iyo sowdkaa, diilalyada ka kicinoo Inay soo digiigixi, dibey lagama yaaboo Ninkii Days ahaabaa, boqol loo dawariyoo Waar Daarood19 libtuu helay, dayib iima aha oo DAAROOD: Waa qabiil macruuf ah oo ka tirsan qabiilooyinka ay ka kooban tahay Soomaalidu. Waxaa la sheegaa in odayga Daarood Ismaaciil ku abtirsado jufadii Nebi Muxammed – naxariis iyo nabadgalyo Alle korkiisa ha yeelee – ee reer Banii-Haashim. Haddii arrinkaas la xaqiiqsado, waxay xubnaha qabiilkaasi noqonayaan Aalu-Beytkii Nebiga. Anigoo dariiqo ah, asagay dulmiyayoo Raggii daahirka ahaa, isagaa dulleeyoo Nasaarada direyska leh, asagaygu dirayoo Markaan diirtay Ferenjiga, ayagey duleedshoo Maandhow kuu duceeyaye, dabuubtayda maqaloo Ma duuloow wixii lumay, maanta haw damiin noqon. Markii Sayidku hoga-tusaaleeyey sida aanu dagaalka u jeclayn una fahansan yahay xumaantiisa, ayuu guda galay waano iyo wax-sheeg ku socda bulshada qaybaheeda kala duwan. Wuxuu ugu horraysiiyey dadka caasiga ah ee aan dhinaca cibaadada u jajabnayn ee nolosha adduunyo uun ka fekera. Wuxuu si gaar ah ugu danleeyahay kuwa gumaystaha u adeega sida askarta iyo adeegayaasha kale. Wuxuu yidhi isaga oo sii wata masafadiisii: Afartaa daleeyaye, ma daabacay sidaydii Ma daleeyey maansada, damiin baan aqoonine Hadal diirsimaad gala, duri waan u odhan jiray Doodna waxaan u leeyahay, kuwii diinta caasiyey Waar haddii la kala diday, sida deero iyo cawl Rabbi nama dufeeyee, Cawar maxawla deristeen? Eygii doofisha lahaa daaha maxawgu rogateen? Dumarkii idiin dhaxay dala’20 maxawga yeesheen? Doofaarkaad qalaysaan, sow kama diqootaan? Dulligiyo cadaabkii, maxaa kiin isugu daray? Durriyaddii Ibleys iyo maxaa daaduf idin qoray? Dariiqii Rasuulkiyo, dawga maxawga baydheen? Xaqa aan daboolnayn maxaa idinka soo deday? War sow darajo aakhiro, Rabbi kama damcaysaan? Xuuralcaynta diibka leh, waar maxaw dalaaqdeen? Durdurkii Fardowsana, dacni maxawga yeesheen? Dibjiryadiyo guuraha dafdaf maad u roortaan? Dacas lalama jiifee, khayrka maw dadaashaan? Dala’: Wax iska dayacan, lunsan Waar hoy deeqda Eebbiyo, janno maad ku dirirtaan? Dakharkiyo dubaaq dacar haddow malayseen Dumbuq ninkii aan lagu dilin, dan la’aanba waw dhiman Inkastaad dadaashaan, ma naf baa damcaysaan? Haddaan dunidu waarayn, miyaa daa’imaysaan? Duqyaankii Fircoon iyo, aaway daarihii Caad? Qaaruun dad iyo maal, damug baa la siiyoo Tacaddiguu Samuud falay, fa damdama ku noqoyoo Waxa loogu dawgalay, Daaq iyo Gureyoo Nebi Nuux kuwii duray, duufaan baa la tegayoo Doonniduu samaystiyo, dooshi buu ka korayoo Docogaysigii Luud, doogtiisii la aragyoo Nimankii darribi jiray, Rabbi waw darraadoo Iyagoon digniin qabin, malaa’ig buu u dirayoo Dambasyaallo culus baa dusha lagaga ridayoo Nin kastoo digniin qaba, mar uun baa la dagiyoo Dooxanaha mawdka ah, diric kama geleysaan Haddaan been dabaad ahay, aaway dawladdii Iram? Aaway doorarkiinnii, dal-la-helayda qabi jiray? Waano iyo wax-sheegga kor ku xusan ee ku wajahan dadka caasiga ah kadib, waxaa uu Sayid Maxamed u jeestay dhinaca culimadii waagaas oo halkii ay kala diriri lahaayeen gumaystayaasha u tafo-xaytay inay xagal-daaciyaan kuwii isu xilqaamay hawshaas. Culimada waxa dushooda saaran ammaano weyn oo xagga diinta ah. Waa inay xaqa caddeeyaan kuna dhaqmaan. Laakiin haddii ay xaqii ku dhaqmi waayaan, caddaynna waayaan, waxay noqonayaan sidii kuwii Alle ku tilmaamay dameero kutub xambaarsan. Fiiri suuratu-Jumuca. Haddii ay diinta sheegisteeda adduun dhaafsadaanna, waxay noqonayaan sidii ninkiii Alle ku metaalay ey haraaryoonaya. Fiiri suuratu-Acraaf. Haddaba Sayidku culimada wuu canaananayaa, wuu la doodayaa, wuu tilmaamayaa, wuu u digayaa, waanu waaninayaa, wuxuuna waydiinaya sababta ay nin lumay oo dabadhilif ah ugu dabo-fayleen ee ay ayaguba u noqon waayeen kuwo aayaha dalkooda u taliya oo aan cidna u dabo-fadhiisan. Wuxuu yidhi: Afartaa daleeyaye, ma daabacay sidaydii Ma daleeyey maansada, damiin baan aqoonine Hadal diirsimaad gala, duri waan u odhan jiray Doodna waxaan u leeyahay, culimada dafaarka ah War an idinma doocine, idinkaygu diimayee Dalkaad iibiseen baa, dacarta igu kiciyayee Shan haloo idiin daran, dannigiin ka fiirsada Mar waa inaad dayoowdeen, diirad haddaydun qabateen Dadka aydun raacdeen, isna waydin diga gubi Dillaalkii la siiyana, dunna kama helaysaan Ninkii idin darraabana, ajri iyo ducuu heli Dibna deeqda Eebbahay, dibno saari maysaan Diin nimaan lahaynini, dameer caynsan weeyee War maxaa dufulayahow, cadawga ugu daranteen? Wanka doosha wayn iyo, ma dagadaad21 u xilateen? Qandiga22 mayska duubtaan, dawarsigu ma fiicnee Aw-yaaloow ma diiddeen, jahaad maw dareertaan? Warma danana iyo seef, degta maad ku qaaddaan? Darmaan haad la qooqdiyo, Doolaab maad u fuushaan? Wiyilka diir ka qaadka ah bidixda mawgu dadabtaan Doobiga-xamaalka ah dakarka maad ka goysaan? Daacufleyda madida ah degdeg maw xabbaadhaan? Idinkaa dalkaba lehee, dawlad maad u noqotaan Illeen doqni calaf maleh, dubaax maxaa ka baylahay? Afartaa daleeyaye, ma daabacay sidaydii Dago: Seko, sadaqad Qandi: Kolay, sallad. Waa tii la yidhi, “Wadaad qiil uu ku bannaysto iyo qandi uu ku rito midna ma waayo.” Ma daleeyey maansada, damiin baan aqoonine Hadal diirsimaad gala, duri waan u odhan jiray Doodna waxaan u leeyahay, da’ kastaba ha noqotee Kuwii diinta qariyow, idinkays dilaayoo Nin dalkiisii iibsaday, dulli buu ku waariye Ninkii gaalka dabagala darxumow dambaynoo Naftu hadday ka duushana, dalku waysu diidiye Inuu haadku diirdiiri, waa sida daruurtoo Dubaaxdiisa feedhaha, dab baa lagaga shidiyoo Hadduu waayo darib cuno, waa laga dambeeyaa Ninkiise dawga dhaafaya, dawo looma helayee Digtoonaada weligiin, dunidu waari maysee. Ugu dambayntii wuxuu Sayidku la talinayaa dadka caamada ah, dumarka iyo carruurta. Wuxuu xasuusinayaa in dadkii hoggaamin lahaa ay lumeen oo meel xun ku hagayaan, inay iskaga hadhaan oo aanay baadinimadaas ku raacin ayuu ku guubaabinayaa. Wuxuu yidhi: Doodna waxaan u leeyahay, dumarkiyo caruurtoo Dadkii idinka weynaa, hadday idin dulleeyeen Dambi kama ay yaabine, cuntay idinka doorteen Duunyaa la dhaafsaday, dugsigaad galeeyseen Dameerkuna ma yeeleen, halkay talo ku daysteen Dab intay shideen bay, dalaq idinku siiyeen Doox intay qodeen bay, ciid idinku daadsheen Nin idiin damqanayaa, idinkama dambeeyoo Haddaydaan digtoonaan, daad bay idin qaadiye Duleeddada kufaartaa, dacas idinku laynoo Naf dalkaaga doonaysaa, firaash looma daadshee Dabkan aan shidaayaa, daawadiina weeyee Dariiqii Rasuulkiyo, dawga haka baydhina. DARDAARANKII SAYIDKA (GABAY) Halgankii Sayid Maxamed Cabdille Xasan wuxuu ku dhammaaday in loo xoog sheegtay. Cadowgii wuxuu ku guulaystay in uu kala dhexgalo Darawaashtii iyo bulshadii Soomaaliyeed. Ayagii ayaa cadow isu noqday. Culimada badankoodii waxay noqdeen kuwo soo saara fatwooyin lagu wiiqayo awoodda iyo ujeeddada Daraawiishta isla markaana xoojin iyo taageero dadban u ahayd gumaysigii xaaraanta ahaa. Dagaal 20 sano socday ka bacdi waxaa Sayidka jabiyey dayaarado lagu duqeeyey oo ahaa duqayntii cirka ee ugu horraysay ee ka dhacda Afrika23. Gulufkaas Sayidka lagu jabiyey waxaa gacan weyn ka geystay ciidamo Soomaaliyeed oo adeegayaal gumayste ahaa, dhinacna ka beelaysnaa. Soomaali badan ayaa laad ugu sii dartay dilkii Ingiriiska, waa la bililiqaystay, digasho iyo farxadna waa laga dabageeyey. Daabaca ninkii kugu dhuftee, daabku kuu celiyey Iyo kii duleedshaay ku yidhi, wax isma doorshaane Sheegashada ah in dayaaradihii ugu horreeyey ee meel Afrika ah lagu duqeeyey ka dheceen dhulka Soomaalida, wax baa ka jira. Waxaa ka horraysay duqayntii dayaarado loo adeegsado ee ugu horraysay oo Talyaanigu ku weeraray ciidamadii Cismaaniyiinta ee ku sugnaa Liibiya oo dhacday 1911. Tusaaleyaal yaryar haddaan ka soo qaato digashadaas, waxaa kamid ahaa gabaygii Cali-Dhuux Aadan ee ahaa: Waa lagu digtaa ruux hadduu kuu darraan jiraye Bal dayaay wadaadkii wakaa sii dabayshadaye. Waxa kaloo jiray nin la odhan jiray Ammaan Faarax oo Ogaadeen ahaa oo ku damaashaaday: Waa tii Bah-Geri looga baxay beled Islaameede Waa tay belaayo ha gashee belel ka oogeene Waa tay ka boodeen sharciga baaniyaaladuye Bagoy baga’e maantaba ka dhimey Maxamad beentiiye Ka biskooney beladii Taleex iyo basaaskiiye – Ammaan Faarax Laakiin dhinaca kale waxaa jiray dad indheer garad ah oo jirtoo ay kasoo horjeedeen Sayidka iyo Daraawiishta, haddana aan ku farxin sidii loo galay. Salaan Carrabay24 ayaa kamid ahaa dadkii laga filayey in uu ku digto, lagana codsaday arrinkaas laakiin ku jawaabay hadal dadnimo ka muuqato. Wuxuu yidhi: Daaroodka jabay waa Isaaq, dadab ku xeerrayde Hadday aqalka daahyadu go’aan, daakhilkaa xigiye Maxaan kaga digtaa ruux la diley, saw ma dabajoogo! Gabaygan waxaa kale oo lagu sheegay inuu tiriyey Axmed Aadan Dubbe “Gabay-Xoog” oo ahaa wadaad indheer-garad ah oo xidhiidh sokeeye ka dhaxeeyey Daraawiishta. Markii Sayidku jabay ee uu Iimay gaadhay, wuxuu tiriyey gabay dardaaran ah oo uu kaga hadlayo mawqifkii uu ku dagaallamayey, dhibtii ka qabsatay iyo waxa ay gumaystaha ka mudan doonaan dadkii la fahmi waayey ujeeddadii halgankiisa. Gabaygan oo ah mid dheer waxaan kasoo qaadanayaa inta ugu mac ee halkan ku habboon, waxaana dhici karta in ay qaybo badani ka maqan yihiin gabayga. Wuxuu yidhi: Dubbayaal wixii nagu dhacee, nalagu daaduunshay Annagu diidi maynoo mar baa, Daayin noo qoraye Ninkii dunida loo deynayaa, haygu diirsado e Mar haddaan cid laga daynahayn, mowdka damaqiisa Ninka haatan soo diganhayow, dan iyo xeeshaada Dangaraaradii nagu dhacdiyo, webi dabbaashiisa Inkastoo daleel nala dhigaan, doocna nagu cayman Duuflaalladii naga hadhow, dan iyo xeeshiinna Dagaalkii Nasaarada anaa, daalib ku ahaaye Dalka ma lihid anigaa ku idhi doora weynaha e Daliilkii Rasuulkii anaa, doonaayoo helaye Anaa diiday maantuu lahaa deeqdan iga hooye Diinkayga anigaan ku gadan dabaqii naareede Anaan labada daarood tan hore darajo moodayne Markay duusho gaaladu anaan daabbadow rarine Goortay dareeraan anaan diiraddow qabane Anigaan dariiqiyo waddada dawga sii marine Anigaan dillaalkiyo ardiga duubigaw xidhane Doofaarka eyga ah anaan, daarihiis galine Sida doxorka Iidoor anaan, duud-xammaal noqone Daarood Ismaaciil ma oga, dawga loo qodaye Waa niman daboolmoo qalbiga, daabac kaga yaalle Waa wixii durbaan tumay markaan dawga sii maraye Waa wixii dabaaldegay anoo, gaal isoo dilaye Xadhka-heer u daadsanee haddana, ciidda lagu duugay Markaan dunida dhaafaa wallee, lagu dabaayaaye Dadoow maqal dabuubtaan ku odhan ama dan haw yeelan: Dawo lagama helo gaal haddaad, daawo dhigataane Dabin buu idiin qoolayaa, waydin dagayaaye Dirhamkuu idiin quba-hayaad, dib u go’aysaane Marka hore dabkuu idinka dhigi, dumar sidiisiiye Marka xiga dushuu idinka rari, sida dameeraaye Marka xiga dalkuu idinku odhan, duunyo dhaafsada e Marka xigana daabaqad ayuu, idin dareensiine Maxaad igaga digataan berruu siin25 lasoo degiye Siin: Waa qalabka war-isgaadhsiinta ama war lalinta qaarkood. Muxuu Rabay Sayidku? Sayidku wuxuu rabay inay Soomaalidu ka xorowdo gumaystaha iyo inay helaan dawlad Islaam ah. Wuxuu qabay in hadafkaas lagu gaadho jihaad oo amma la shahiido oo sidaa Alle jannadiisa lagu rajeeyo ama la guulaysto oo dawlad gob ah la helo. Gabayadiisa qaar badan oo kamid ah ayaa arrinkaas muujinaya. Waxaanan kaa xasuusin karaa afarreydan. Wuxuu yidhi: Haddaan waayey calan lay nashiro26, tan iyo Nayroobi27 Miyaan waayey naamuus janniyo, daalac iyo naasil? Haddaan waayey Ciidoo28 Naqliyo inan Nugaal daaqo Miyaan waayey neefaan xarbada, naallo ugu fuulo Haddaan waayey ruux iga naxoo, ii nasabad sheegta Miyaan waayey naxariis Alliyo, Nebiga jaahiisa? Nashiro: Waa erey af-Carabi ah oo macnihiisu yahay fidin, wadhid, kala-bixin. Nayroobi: Waa caasimadda xilligan ee dalka Keenya. Waxaa la aasaasay waagii isticmaarka, waxaana ugu badnaa dadkii lagu aasaasay Soomaali ciidan u ahayd Ingiriiska. Ciid: Mar waa ciidda oo dhulka ayaa loola jeedaa, marna waa deegaan gaar ah oo Hawd ka tirsan. Aragtida aan kor kusoo qeexay waxa dhici karta in aanay ila qabin dad badan oo xilligan nooli. Sidoo kale waxaa xaqiiqo ah in xitaa markii uu noolaa la isku maandhaafsanaa oo Soomaalida badankeedu kaba raaceen gumaysteyaashii. Laakiin si kasta oo dadkii la noolaa u diiddanaayeen ama uga soo horjeedeen, haddana waxay yaqiinsanaayeen inuu ahaa: – Nin wadaad ah oo caalim ah oo xalaasha iyo xaaraantu u kala soocan yihiin. – Nin la dagaallamayey gaalo duullaan ah oo gumaysi iyo gaalaysiinba wadday. Taas waxaa u daliil ah, in markii uu jabay iyo ilaa xorriyaddii laga helayey uu noqday halqabsiga dhammaan Soomaalidii gobannimada u halgamaysay. Faarax Cismaan Kowte wuxuu kasoo jeeday beelihii sida cad uga saftay Daraawiishta, haddana markii ay Daraawiishtu jabtay, waxaa uu qiray inay ahaayeen dad xaq ku taagnaa waxaanu yidhi: Manaamada Darwiishkii hadduu, diinta marinaayay Muslinnimada gaariyo ninkii, muuminnimo sheegtay Mansakheeda boolida ninkii, noo masala qaadey Makhrib dumey sidii looga dhigey, maqalney eelkiiye. – Abwaan Faarax Cismaan Kowte Waxaa iyaduna xasuus mudan maansadii uu tiriyey Axmed Ismaaciil Diiriye (Qaasim) markii xorriyadda loo dabbaaldegayey 1960kii, maansadaas oo ay ka muuqato qiraal ah inuu Sayidku ahaa xaq u-dirir. Wuxuu yidhi Qaasim: Allow yaa Darwiishkii farriin debecsan gaadhsiiya Allow yaa dadkaagii yidhaa dawladnimo qaaday Allow yaa dabbaaldegiyo farax kala dul geeraara Fardaha yaa dirkii dhooddi meer doona faracdiisa Allow yaa darmaan farataqaan duqa u kooreeya Allow yaa duleeddada Taleex uga dammaashaada Dhaaxuu ku daakiray xaqoo naga dahsoonaaye Ha daawado dadkow hiiliyiyoo doogga soob baxaye Allow yaa dalluuntiyo qabriga dib uga soo saara In dariiqadi nooshahooy dunida soo gaadhey Oo uu dabkuu shiday rag kale dogobbo sii saaray Allow yaa af lama daaliyee daacad ugu sheega! Haddii ay kuwaasi yihiin qiraallo cadcad oo ah inuu gobonnimo-doon u-dirir ahaa, waxaa iyaguna jira gabayo badan oo qiray in Sayidku ahaa caalin ay u kala soocnaayeen xaqa iyo baadilku. Waxaan tusaale usoo qaadanayaa saddex nin oo geelqaadyo ahaa oo la moodo inay qabeen in geela dhicistiisu xalaal tahay, ama ugu yaraan markii la waaniyey ayey isku difaaceen in aanay xaaraan ahayn geela dhicistiisu. Arrinkaas waxay u daliishadeen in Sayidku geela dhici jiray isaga oo ahaa nin aan laga filayn inuu wax xaaraan ah sameeyo. Raggaa mid ahaani waa Cali Dhuux oo Sayidka wakhtigiisii noolaa, mucaaridna ku ahaa. Midna waa Cabdi-Gahayr oo laga yaabo inuu soo gaadhay Sayidka oo xitaa ku gabyey inuu joogay goobtii Jidbaale29, ninka kalena waa Faarax Laanjeer oo isagu waxoogaa ka dambeeyey xorriyaddiina in badan kasoo gaadhay. Bal u fiirso: Jidbaale: Waa goob magaceed, goobtaas oo uu ka dhacay dagaal dhex maray Daraawiish oo dhinac ah iyo Ingiriis iyo qabaa’ishii xulafada la ahaa oo dhinac ah. Jab weyn ayaa kasoo gaadhay Daraawiishta, waxaana laga dheehan karaa gabayadii Sayidka sidii uu uga samri waayey raggii meeshaas lagaga laayey. Haddaba tixda Cabdi-Gahayr ku xusay inuu joogay goobtaasi, waxay leedahay sidan: Weligeyba meel lagu jabaan, jiqilla weynaaye Dagaalkii Jidbaaleba ninkaa, joogay baan ahaye Ilaahay i jecelaa muxuu, jirey arwaaxaygu Sayidkii wadaad oo dhan xidhay, weris xalaaleeye Xaaraan hadduu yahay maqdaca, Xila ma qaadeene Xoolaha kaleetiyo isagu, waaba kala xeere Nin kastoo xadreeyaaba wuu, u xusul-duubaaye Haddaan xaajiyadu weerareyn, xer uma duuleene30 – Cali Dhuux Sonkor uga macaan reerkayaga, soofla xoogsadaye Waxba ay sasabin awgayoow, sidigi waa aade Sayidkuba naruuree haddaad, sadar taqaanniine Haddaanad seeddigay aabbo noqon, saxar ma qaaddeene Sii soco wadaadyahow intaan, sumuc ku naafaynin. – Cabdi-Gahayr Xasan iyo Xuseen baa ogaa xeer u leeyahaye Xulafooyinkii horeba way, kala xabbaadheene Xinkii Dheeha lagu gawracaan, xiisaddii hadhine Seyidkii Xadeed iyo ku furay xarun Daraawiishta Xer: Waa culimo gaar ugu baxday barashada iyo baridda diinta. Halkan waxa loola jeedaa beesha Leelkase oo magacaas lagu naanayso maadaama ay ahaan jireen dad culimo u badan. Cali-Dhuux ayaa geel kasoo dhacay beeshaas, markii arrinkaas lagu canaantay ee laga wacdiyeyna wuxuu isku difaacay gabaygaas. Waxaa ka muuqata gabayga in Cali-Dhuux yaqiinsanaa sheekhnimada Sayid Maxamed laakiin wuxuu ku diiddanaa wax kale. Ismaaciil Mire waa tuu ku lahaa Cali-Dhuux: Markii aan Daraawiish jirneed nagu dabraynaysay Nama duufsan Shiikh Maxamedkii duubka noo xidhaye Annagaaba diintiyo sharciga daalib ku ahayne. Cabdi-Gaheyr wuxuu ahaa nin ku caan-baxay geel-qaadnimo iyo goolaaftan dirireed. Waxaa la sheegay inuu geel soo dhacay. Geelii waxaa ka daba yimid oo kasoo ergeeyey nin wadaad ahaa oo ay Cabdi aabbihiina xidid ahaayeen. Markaas ayuu gabaygan ugu jawaabay. Ee Xodayo geeyn jirey intuu, xamar u heenseeyo Xaafidal Quraan buu ahaa, soo xajiyey dhawre Isagaba xaq iyo baadil waw kala xarriiqnaaye Xaaraan hadduu yahay sengaha kuma xarraaseene. – Faarax Laanjeer Haddaba ayada oo Alle xaqiiqda ogyahay, waxaan leeyahay Sayidka iyo Daraawiishtu may ahayn qaar ka caaggan danbiyo iyo khaladaad. Weliba waxaa laga filan karaa qaladaad waaweyn, marka la tixgeliyo duruuftii ay ku sugnaayeen. Hase ahaatee ujeeddadooda iyo is-urursigoodu wuxuu ahaa Islaami, umadnimo iyo waddani. Dadka wax ka sheega Sayidka, ha taageeraan ama ha deedafeeyaane, waxaa ku badan qaar caadifad hadlaya. Waxa hubaal ah in Sayidku ahaa nin cabqari ah oo ka aragti fogaa dadkii wakhtigiisa joogay isla markaana lahaa himilo aad u sarraysa. Laakiin waxaa iyana hubaal ah in Sayidka iyo Daraawiishtu heli kari waayeen siyaasad habboon oo ay ku kasbadaan umaddoodii ka arradnayd aqoonta iyo maal-adduunyo isla markaana ay kula tartamayeen ummado hankooda, hantidooda iyo hal-aqoontoodu gaadhsiiyeen inay ummado kale raaciyad ka dhigtaan. Faarax-Laanjeer: Wuxuu ahaa gabyaa caan ah oo geel dhiciddana caad ku ahaa. Mar lagu qabtay geel uu dhacay oo la xidhay ayuu gabaygan isku difaacay. MURUGTEY LAABTIIYE Faarax Cismaan Kowte Dagaalkii reer-Bariga iyo Talyaaniga 1920naadkii. Gabaygan waxaa tiriyey abwaan lagu magacaabi jiray Faarax Cismaan Kowte oo ku noolaan jiray gobollada badhtamaha iyo bariga Soomaaliya. Taariikhda gabaygu waxay ku beegan tahay 1920naadkii. Waagaasi waa markii gumaystayaasha reer-Yurub ay si buuxda gacanta ugu dhigeen geyiga Soomaaliyeed, kadib markii ay si xun u-jabiyeen dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee dagaalka iska-caabbinta ah kala hor-tegay. Waxaa ugu dambeeyey uguna riiq dheeraa dhaqdhaqaaqii Daraawiishta. Jabkii Daraawiishta waxaa loo adeegsaday Soomaali nooc walba lahayd, qabaa’il, siyaasiyiin iyo culimo diineed. Intii dagaalku jiray oo dhan, waxay gumaystayaashu iska dhigayeen nasteexo iyo qaar aan Soomaalida duullaan ku ahayn balse la dagaallamaya “nin waalan” oo “niman waalwaalan wata,” taas oo ay ku luggo’een Soomaalida badankoodu, jirtoo looga digay. Balse markii Daraawiishtu jabtay, waxaa Soomaalida ku bilaabmay gumaysigii dhabta ahaa iyo cabiidin aan hore loo arag. Dadkii oo is-nacay intii dagaalkii Daraawiishtu socday oo aan isu gurman karin ayaa ninba meel laga helay. “Hubka dhiga,” ayaa la faray Soomaali oo dhan. Ciddii ka dhego adaygtayna madaxa ayaa la jebiyey. Haddaba dadkii isku dayey inay iska caabbiyaan gumaysiga Talyaaniga waxaa kamid ahaa beelihii uu xukumi jiray Boqor Cismaan ee Bariga Soomaaliya. Markaa gabaygani wuxuu ku saabsan yahay dagaalkaas dhex-maray reer-Bari iyo Talyaaniga. Waxaanad ka dhadhansan kartaa xaqiiqooyin mudan in lagu cibaaro qaato. Wuxuu yidhi Faarax Kowte: Cali Maxamadow gabay murtidi, waan ka maaliyaye Waan idin masuugaye beryaad, iiga muhateene Mareer-diidka waxa iigu wacan, maanta saan ahaye Maantiyo kal hore waa adduun, labadi meeloode Hadba waxa mur soo oran arliga, xaal la moog yahaye Madoobaadayay xalay miyaan, micida soo-feestey Middoor caara oo kale miyaan, meel kasta u boodey Mudkey go’aye midigtaan ka jabay, meel xun iyo seede Milicda aan fadhiyo iyo waxaan, muhasha reemaayo Miskiin iyo sidaan ahay magaan, xiirey madixiiye Mashaqooyinkee soo baxay, murugtey laabtiiye Gobannimo mid weeyee hadduu, meero xariggeedu Misbaaxiyo haddey kaa demaan, muunaddiyo nuurku Gacmo maran mugdaa kuu xigiyo, meel xilliyo hooge Dawladnimo nimaan maalahayn, laga mid roonaaye Mulki iyo awood iyo waqii, malaha maamuuse Mucsir weeye maahnaha adduun, magan haloo yaabo Masalooyinkaan oran jiraa, malagyo keeneene Dadka gabal mashxarad buu hayaa, loo malqadin xeere Maqsuud weeye maantiyo dorraad, dhaantana u mirane Weli ma oga wuxuu maagan yahay, gaalka yimid meesha Inuu aniga gaar ii mirtey moodayaan weliye Moodkiyo inuu maalka dhici, run ay maleeyaane Haddaan hadal murtiyo maamul iyo, marin cad loo yeelin Miyirkoo ku dhererinin haddaan, odayo loo miirin Ama muranka baas iyo xumaan, meesha laga saarin Masalooyin rag maamulahayey murugtay laabtiiye Mudda hoose xaajada ninkaan mara-dhiggeed heysan Wuxuu moodi meeshaan ka kacay maro in loo saari Oo waa maanka laga siib isagu, soo mir-kacay haatan Majeerteenka hoosiyo Cismaan, way mitidiyaane Boqorkii la maamuusayaa maasahaw sida eh Mid adeygga waxa looga haray mudane weeyaane Meydkiyo raqdoodii ayay murugtay laabtiiye Manaamada Darwiishkii hadduu diinta marinaayay Muslinnimada gaariyo ninkii muuminnimo sheegtay Mansakheeda boolida ninkii noo masala qaadey Makhrib dumey sidii looga dhigey maqalney eelkiiye Ogaadeenka Mowliyo Kilwa iyo, Geri la meeleeye Ley-marag magaalada Jigjiga, oo Amxaar marine Mareexaanku meeshuu fadhiyay muuro lagu maagye Mudug oo la meersadey ayay murugtay laabtiiye Suldaankii mudnaa iyo la qaad muqaddimiintiiye Nimankii marsada noo fadhiyay meesha laga waaye Maraakiib sidii loogu guray, muuqan mahayaane Goortaan magaalada dayaa, maanku ololaaye Isaaqii magaalada Berbera, Maakhirkiyo xeebta Nimankii macaash iyo dallaal, badaha miisaamey Dadku maqal madluun iyo iney, magan ku joogaane Sidii loo mashiiqsadey ayey murugtey laabtiiye. WAA DUNI LA KALA IIBSADAY Faarax Nuur, 1920naadkii Gabaygan waxaa tiriyey abwaankii halgamaaga ahaa ee Faarax Nuur oo nolol kusoo gaadhay 1930neeyadii. Wuxuu ahaa hal-abuure aad u xeeldheer, halgamaa, abaanduule iyo hoggaamiye qabiil oo caan ahaa. Dhinaca kale wuxuu ahaa indheer-garad iyo Alle-yaqaan laga dheehanayo suugaantiisa haybad iyo caddaalad. Inkasta oo gabayada qabyaaladda ku saabsan ee Soomaalidu ay yihiin wax laga xishoodo oo dulmi iyo deelqaaf buuxiyey, haddana kuwa Faarax Nuur sidaas uma dhadhamaan. Colaad iyo nabadba wuu ka gabyey. Dhinaca waddaniyadda iyo danta guudna kama uu madhnayn. Wakhtiga uu Faarax Nuur noolaa wuxuu ahaa waagii gumaystayaasha reer-Yurub ku habsadeen geyiga Soomaaliyeed. Sida lagu yaqaan dadka indheer garadka ah, wuxuu Faarax meel fog ka garanayey ujeeddooyinka gurracanaa ee gumaystaha iyo cawaaqib xumada ay ku reebi karayeen umadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale waxaa uu arkayey dad maangaab ah iyo kuwo dhuuni- qaateyaal ah oo u dan-qumminayey ma-naxeyaasha shisheeye. Markaa waxaa uu tiriyey gabaygan la magac baxay “Waa duni la kala iibsadoon, nala ogaysiin.” Wuxuu kashifayaa danaha gurracan ee gumaystaha, waxanu waano u jeedinayaa dadka dhuuni yar dartii cadowga ugu dan-qumminaya. Waxaad mooddaa in gabyaagu si gaar ah uga hadlayo markii Ingiriisku soo degayey dooxada Herer oo ahayd meeshii saldhigga u ahayd abwaanka. Wuxuu yidhi Faarax Nuur: Ingiriis Axmaariyo Talyaani, wey akeekimiye33 Arligaa la kala boobayaa, nin u itaal roone Anse ila ah aakhiru sabaan, iligyadiisiiye Orgigaa riyaha taadaxoo34, oodda faaliga35 e Waa duni hablihii loo ogaa, aqalka diideene Anse ila ah aakhiru sabaan, iligyadiisiiye Waa duni la kala iibsadoon, nala ogeysiine Waa duni akhyaartii go’dayoo, aaran soo hadhaye Waa duni ninkaad aamintaa, kuu abees yahaye Anse ila ah aakhiro sabaan, iligyadiisiiye Waa duni xaqii la arkayaa, la arjumayaaye Waa duni akhyaartii lahayd, iib ku doon tahaye Anse ila ah aakhiro sabaan, iligyadiisiiye Afka iyo adduunkaa hadloo, aasan sadarkiiye Ninka gacanta midig oodan tahay, laga ilroonaaye Anse ila ah Aakhiro Sabaan, iligyadiisiiye Nimanyahow bal daya xaajada, lala aguugaayo Odayaashan loo yeedhay ee, la anfac siinaayo Asaxaabihii bayna yidhi, gaal ha aaminine Haddaad niman Islaamiyo tihiin, Aadan faraciisa Oo aydaan Ilaahay ka go’in, hayna oodina’e Hadduu awrka dooxada ku furo, eel kalaa xigiye Inaga daaya yaynaan ku dhicin, bahal afkiisiiye Akeekamid, akeekan, akeekami: Muran Taadax: Waa ogeynta riyaha Faalig: Kala kaxeeya. HABAAR TALYAANI Guuleed Jucfe Warsame, 1920nadii Geerarkan waxaa tiriyey Guuleed Jucfe oo ku noolaan jiray gobolka haddeer loo yaqaan Gedo. Waa geeraar lagu habaarayo gumaystihii Talyaaniga oo si aan la xammili karin ula dhaqmay Soomaalidii xornimada ku dhalatay. Xilligu wuxuu ku beegan yahay 1920neeyadii. Waxaa la yidhi markii gobollada Jubbooyinka Ingiriisku ku wareejiyey Talyaaniga, ayuu Talyaanigu bilaabay inuu geelashii ka xareeyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa isaga oo kusoo rogay amarro aan la qaadan karin. Geeluna wuxuu ahaan jiray nolosha dadka Soomaaliyeed ee ay ku dhintaan. Waxaaba hore loo yidhi: Soomaalidu saddex ayey aaminsan tahay, diinta Islaamka, qabiilka iyo geela. Waxaa la isku deyey in Talyaaniga lagala xaajoodo amarradiisa la xidhiidha geela, laakiin arrinkii wuu garowsan waayey. Markaas ayey dadkii habaar miciinsadeen. Guuleed Jucfe oo gabyaa ahaa ayaa laga codsaday inuu Talyaaniga habaaro. Arrinkii ayuu yeelay Ilaahayna waa uu ka aqbalay. Horta taliyihii kadeednaa markiiba xilkii waa laga qaaday, 15 sano kadibna waxaa Talyaanigii cagta mariyey dawladdii Ingiriiska oo dalkii oo dhanba ka qabsatay. Maalintii dad la uumayoo Nebi Aadan dushiisa Loo ekaaday quraajo Ilaahii asmaceenna Ashahaado ka yeelay Abaal baan la gudayne Asxaan waan ka qabnaa Ayaantii ka dambaysayoo Ay Qorayshtu irdhowdayoo Odayaasha la laayayoo Dulqaffaar la afaystay Ilaahuu Nuurre ugdoone Umaddii naga yeelay Abaal baan la gudayne Asxaan waan ka qabnaa Ilaahii afar naasiyo Ibyar oo ka daloosha Abeer nooga caddeeyayoo Amarkiisa ku yeelay Abaal baan la gudayne Asxaan waan ka qabnaa Ilaahii sawjad islaamahoo Aadmi nooga sokaynin Aqid noogu xarriiqayoo Dabadeed ilmihii iyo Ubadkii naga siiyey Abaal baan la gudayne Asxaan waan ka qabnaa Ilaahii axad roori Ka abuuray candhuufooo Dabadeed indhihii iyo Afka noo kala qaadayoo Addin xoogle na siiyey Abaal baan la gudayne Asxaan waan ka qabnaa Ilaahii ajasheenna Indhaheenna ka duugayee Aleen koora u yeelin Iimaan nooma sugmeene Abaal baan la gudayne Asxaan waan ka qabnaa Gabayse waa afku leeble Wadaad waa akhriskiisa Gobi waa ta ergeysa Ilaahii cirka uumayoo Dhulka hoos ka aslaaxshayow Ilaahaan amarkiisa Aadmi diidi karaynoow Ilaahow nin uraayoo Nebi Aadan ka leexaan Arrinkii isu keennay Ilaahow Ingiriisiyo Amxaartii Shawa joogtiyo Suldaankuun ka adeejiyoo Udubkiisa la siibo Rag armaatiga qaatow Naxariis il ha saarin Eydii baando ahaydiyo Guglahow ka idlaada Iqiidka iyo bandaaskow Ibleys haydin dhammeeyo Afnaqa iyo bowgow Asmo beerka ku goysay Siinka meel walba aadow Idil haw dhaqdhaqaaqin Baabuurkay ordiyaanow Omos meelle la jiifso Markabkii badda aadow Irjic meel isu taag Dadkuse waa kala oode Ninka geela afsaartayoow Ayaantan aynu joogno Ayaanteeda kaleeto Amarkaagu ma gaadho oo Asma beerka ku goysay. QOONSADA HALKAA (Xad-Beenaadka) Muxummed Aw Cabdi Xaashi, 1931 Gabaygan waxaa tiriyey nin la odhan jiray Muxumed Cabdi Aw Xaashi ama Muxumed Aw Cabdi Xaashi. Taariikhdu waa xilli ku beegan 1920naadka dhexdoodii. Waxay ahayd markii la samaynayey waddada xuduudka ah ee kala qaybisa dhulka Soomaalida. Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu u arkayey samaynta waddadaas khatar weyn oo kusoo fool leh umadda Soomaaliyeed. Wuxuu dareensanaa inay tahay dhaxal-wareejin. Wuxuu u arkayey dabin loo qoolayo jiilasha dambe oo cawaaqib xumada ka dhalataa ay umadda saamayn xun ku yeelan doonto. Wuxuu aaminsanaa in joojinta xuduuddaas nafta loo huro oo lagu dagaallamo. Laakiin waxaa loo arkayey nin waalan oo ama dad diiddan ama dano gaar ah leh ama balaayo ka talis ah ama xadhig-maran ah ama aan caqli badan lahayn. Isagii ayaa daalac loo raacay. Laakiin wixii u muuqanayey waxay ahaayeen xaqiiq. Waxaa dareemi kara indheer-garadnimadiisa qofkii maanta nool. Bal ila akhriya gabaygan oo ka fekera garaadkii ku jiray ninkaas. Wuxuu yidhi Muxumed Aw Cabdi Xaashi: In dhaweydba waa taan qarsaday, qiimigii gabaye Waa laygu soo qaadayaa, waan ka qaw dhigaye Abidkayba goortaan qabtaan, qurux u yeelaaye Qaafada36 horteediyo shirkaan, qun uga sheegaaye Bal qiyaasa caawana halkaan, uga qormaynaayo Qooj37 weeye laba gaal hadday, talo qorsheeyaane Hindigay qafaasheen beryey, qaran ahaayeene Qarni malaha Yawguba38 markuu qaatay keenada e Waa tii Surveys39 uu qabsaysay, qamac dharaareede Waxa horteen sidaa loo qarribay boqol quruumoode Qoonsada halkaa waxa ku jira qabar laxaad weyne Qoto iyo Taleex baa40 la simay, qaydkan seeraha e Sidii qaalmo booliya dhulkii waa la qaybsadaye Isba qiil banaysuu u yimi qoortan dooga lehe Wuxuu kuu qabtaba daaye wuu idin qalaayaa e Sin qooreedkan lay dhigay waddadan lay qoqobadeeyay Haddii aw qushuucdeen berruu qaadan waa imane Qoonsada halkaa waxa ku jira qabar laxaad weyne Qunsulkaa41 la dhigay ceelka Herer qiil kalaa xigiye Qaafo: Guurti, waxgarad QOOF: Khoof, cabsi. Labada gaal wuxuu uga jeedaa gaaladii ku tashaday qaybqaybinta dhulka Soomaalida. YAW: Dadka cawaanka ah. Wuxuu si gaar ah u tilmaamayaa dadkii cawaanka ahaa ee ku noolaa dhulalka Afrika oo gumaystayaashu si xun u addoonsan jireen. SUWEYS: Waa marin-biyoodka Suweys ama qoorriga Suweys. QOTO IYO TALEEX: Waa laba meelood oo kamid ah dhulka Soomaalida, gaar ahaan dhulkii Ingiriisku gumaysanayey ee Soomaalilaan. Qoto waa dhinaca galbeed, Taleexna waa gudaha oo dhinaca koonfureed ah. Wuxuu abwaanku la yaabban yahay sida loo soo qaloociyey waddada markii ay ka timid dhinaca galbeed. Waxba yaanu ii kala qarradhin qoolashaan dego e Markuu geed qalloocsamaba waan, sii qandhanayaaye Qayrkay hadday toban yihiin, qodob ma riixeene Qanjo uma lahaadeen halkane, qaar ayaa wada e Qoqobaha dhexdiinaba, mar baysugu qudh beeshaane Qoonsada halkaa waxa ku jira, qabar laxaad weyne Jarmalkii qadiimiga ahaa qoon uunbaw baxaye Isaguba qasaarii la baday, quusay oo sabirye42 Waa wixii qatalay reer-Hindiya quudhsi li’idaase Idinkuna qab laydiin dhigaa, moodaysaan quruxe Markaan qawl idhaahdaba anaa, i qabsanaysaane Waa qasuumo iyo yaab afkaa, qidhim i siiseene Qoonsada halkaa waxa ku jira, qabar laxaad weyne Murtidaa qallooca u rogteen, qaradna43 loo yeelay Waa qiiro gelinoo dhulkaa, laysu qoonsadaye Aan ku baro qiyaamada ninyahaw, ninkii qaalin kaga maalay Qayrkii ka hadhe waxa tihiin qaday habeenkiiye44 Qarqarkaaga mari maysabaa, igu qardoofteene Qacdaan anigu eegaa indhaha, qarafka duulaaye Qoonsada halkaa waxa ku jira qabar laxaad weyne Qoomiyad ninkii garanayaa, ima qilaafeene Hadii gaalku uu igu qabsado, oo qoorta iga gooyo Qawl nimaan la laabmaynin, oon qoofin baan ahaye Dadkiise aan u qaysho islahaa, qaafilnimadooda Quful baa ku jabanoo ma oga, qoonta igu taalle Qasaaraha ninkii ogi haduu, qaban lahaa taase Qumuntani Allaa garan kolkay, qaadan waanada e Qodaxdaa xanuunkeedu waa, qaamud kuu maqane Ha qosleene daa waa dhawbuu, qaxar ka joogaaye. QONSULKAA LA DHIGAY CEELKA HERER: Herer waa magacii asalka ahaa ee magaalada Hargeysa. Waxa gabayga laga fahmayaa in la tiriyey intii aanu maamulkii gumaysiga Ingiriisku u soo wareegin Hargeysa laakiin markaas un la keenay wakiil ama qunsul. Halkan waxaa uu abwaanku ku xusayaa dagaalkii koowaad ee adduunka iyo sidii xumayd ee loo galay Jarmalka ee hankii iyo isla weynidii Jarmal loo wiiqay. Dabcan dhibtii gaadhay Jarmalka dagaalkii koowaad waxay reebtay gocasho mar labaad dhalisay dagaalkii labaad QARAD: Ujeeddo, dan qarsoon oo qalloocan. Halkan waxa ku jirta tusaalayn maahmaaheed iyo sheeko dhaqameed aad u qoto dheer. Waxaa la yidhi: Waxaa jiri jiray nin aad u maskax badan oo had iyo jeer dadka ka badiya xagga tabta iyo xeeladda. Markaa nin laga caqli badnaa ayaa ku yidhi, “Waar ninyahow qiyaamada i bar.” Markaas ayuu ninkii caqliga badnaa ku yidhi, “Waayahaye, horta hashaada ii soo lis.” Markii uu u lisay ayuu yidhi, “Haddaba qiyaamada i bar.” Markaas ayuu ku yidhi, “Dee waanigii ku baray, markii aan hashaada kaa maalay.” Wuxuu abwaanku ugu duurxulayaa, in dadkii waagaas noolaa lagu qiyaamay samayntii xuduudda oo aanay haba yaraatee macneheeda fahansanayn. Taas waxaa laga dareemi karaa markii 1954 la ansixiyey heshiiskii Ingiriiska iyo Xabashida, markaas ayey qaylo-dhaan ku dhufteen kuwii shalayto kasoo horjeeday indheer-garadkii uu ka midka ahaa Muxumed Aw Cabdi Xaashi. WAAGAAN DHAWAAQAAYEY Muxumed Aw Cabdi Xaashi, 1939 Gabaygan waxa tiriyey isla abwaankii tiriyey gabaygii xuduudda. Waa Muxumed Aw Cabdi Xaashi. Markan sannado badan ayaa kasoo wareegtay jeexiddii ama samayntii xuduudda. Waxa bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunka oo Talyaaniga ayaa qabsaday Itoobiya iyo Soomaalilaan labadaba. Talyaanigu wuxuu watay ciidamo Soomaali ah oo dadkii arkay ay ka tacajubeen. Waxay ahaayeen mooryaan iimaan-la’ oo aan sinaba la isaga caabbin karin. Talyaanigu wuxuu u sheegay in cuntadoodu tahay waxa ay dadkaas shicibka ahi haystaan. Dadkii waa ay gabagabeeyeen. Ingiriisna waddankii waa laga saaray. Markaa dadkii waxay yaqiinsadeen dhibta weyn ee timid. Abwaan Muxumed Cabdi Xaashi oo talo ku caddaatay ayaa gabaygan mariyey, asaga oo ku calaacalaya, haddii wax la iga maqli lahaa markii aan qaylinayey ee aan lahaa waar xuduuddaas aan iska moosno, haddii markaa wax la iga maqli lahaa maanta dhibtani ma dhaceen. Waagaan dhawaaqaayey een dhego la’ii yeelan Dharaartii hadday ila gartaan lama dhaqaajeene. Maantooy dhanaanaatay bay dhabanka haystaane. Waxa uu abwaanku faalleeyey waxa dadkii dhib gaadhay iyo xitaa Itoobiya sida dhabarka looga jabiyey. Wuxuu yidhi Maxamed Cabdi Aw Xaashi: Caliyoow adduun lagu dhintoo dheeliyaan ogaye Ma dhadhamiyo caanaha liska ah, sida dhukaameede Sidii dhagar aan qabo oo xabsiga, la iga dhawraayo Dharaar iyo habeen faalladan, dhabanka haystaaye Dhag markaad tidhaahdaan hurdada, maba dhakoolayne Ka dhabriiray haasaawahaad, dholonbiyeyseene Dhalinyaradu hadalkii naxwa ah, dheg uma qaadaane Nin dhamaaday baa garan lahaa, dhaabadaan odhane Bal dhagaysta caawaan rakibay, dhidibadiisiiye Kol haddii dhulkeenii xadkaas, dhereran loo yeelay Oo moodhikaar lagu dhibtiray, wada dhabbaynaayo Dhallaan weeye kii haybiyaa, dhaqasho xoolaade Dhuuryadan dusheenaa garnayl dhacayey saarraaye Waxa dhanibaalka lala roorayaa, dhinicii Tuureede Dhalankii Hawiye loo qabtaa, lay dhexmarayaaye Sidii dhoocil awraan ka baqan, dhaan in lay raro’e Baandadan45 dhabbada joogsatiyo, qoriga dhawr qaad ah Inaan dhaxal wareegnaa kuwani, meesha loo dhigaye Hadday dhiillo meel soo gashoo, khabarka loo dhiibo Dhan kastaba haddii ay tihiyo, dhulaan la gaadhaynin Baabuurro dheeraynayaa, lagu dhaqaajaaye Oo dheehadoodii isweer, lagu dhab siiyaaye Oo dhiidhi kii lagu tuhmana, lagu dhirbaaxaaye Dhayal hayga moodina caddaan, dhaarsan baa yimiye Waa duni ninkii dhumuc lahaa dhaatay oo kacaye Af-warqeba46 cishaa lagu dhugtamay ciidankuu dhuraye Is dhootaalintii reer Walliyo47 dhirifki beenowye Baando: Waa ciidamadii Soomaalida ahaa ee u dagaallamayey Talyaani oo ahaa niman dooxato ah oo calooshooda u shaqaysteyaal ah oo aan waxba kala soocahayn. Mooryaan iska dhe. Afwarqe: Waa madaxdii Itoobiya ama Eriteriya mid kamid ah. Wuxuu Xayle48 dhoofka ugu kacay dhuumashuu bidaye Ka dhaqaaqe daarii Shawiyo49 dheregii fiicnaaye Waatay dhalaankiyo hureen, ooryaha udhaxaye Waatii galbeed loo dhuftay, dhamal u yaaceene Dhirbaaxadii Talyaaniga ayey, dhego barjoobeene Annagana dhulkii aan lahayn, dhaafa buu yidhiye Habaryoonis50 oonbay u dhiman, dhibica dayreede Geediga Caleenweyn51 ku dhacay, dhaafi kari waaye Kuwii harada dhalandhoobin jiray, dhamacda jiilaalka Ayey gaaladii dhiifatooy, Siraw la dhaaftaaye Caynaashihii52 dhiirranaa, dhacarti loo diidye Reer Sugulle53 dhaantada Digweyn54, kagama dheelmaane Dhalooshii farcaamood55 xeryaha, uma dhameeyaane Dhiilaha karuurka ah martida, looma soo dhigo’e Dhegcaddii madheedhkiyo la waa, dhuubkii geedaha’e Reer Daahir56 beel kama dhisaan, dhinacii beereede Wallo: Waa gobol kamid ah Itoobiya oo ay degaan Amxaaradu, weliba kuwoodii boqorrada ahaa. Waxaa ka muuqda inay ahaayeen dad isla weyn. Xayle: Waa Xayle Salaase oo markii Talyaanigu dalka qabsaday u qaxay xaggaas iyo Ingiriiska. Shawa: Waa gobolka barwaaqada ah ee ay ku taal magaalada Arda- Sababa Habaryoonis: Waa qabiil guud oo macruuf ah, waxayna ugu badan yihiin dhulka Soomaali Galbeed iyo Soomaalilaan. Caleenweyn: Meel magaceed. Caynaashe: Waa reer-Caynaashe oo ah qolo ka tirsan Habaryoonis. Reer-Sugulle: Waa qolo ka tirsan reer-Caynaashe, Habaryoonis. Dig: Waa harooyin ku yaalla dhulka Soomaali Galbeed. Farcaano: Waa deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed. Reer-Daahir: Waa qolo kamid ah beelaha Habarjeco, Maxamed-Abokor. Dhudhubo57 iyo buuhoodlayaal58, laga dhawaateeye Dhulbahantii59 fallaagada ahaa, waa la dhaawacaye Halkuu nugulku dhacadiiday iyo Dhooddi60 laga qaadye Aduunyadan ninkii aan ka dhiman dhaygag baa diliye Kolka Dhool da’aa Ciidagale61 kor u dhaguugaaye Iyadoo Dhegows62 iyo Burcada dhaayin lagu foofshay Ma dhambalo Qolkii63 gaanihii dhogorta xiisnaaye Dhaameel tolkay wuxu ku furay dhabarkan Tuur weyne64 Imakay nirgihii dhaadhyi jiray badi u dhuubteene Hadba waxaan ka dheelimanayaa dhabarka raaxayse Dhegxumada ku noolow waxaa dhaanta geerida’e Waagaan dhawaaqaayey een dhego la’ii yeelan Dharaartii hadday ila gartaan lama dhaqaajeene Maantooy dhanaanaatay bay dhabanka haystaane Dhammaantiin Soomaalaay hadday, dholo’di joogtaaye In Qiyaamihii soo dhawyahoon, dhegiba noolaanin Iyo gaalka inaan dhoofinoo, dhidibka loo saaro Labadaas mid uumbay u dhici dhaaxa lala yaabye Dhudhubo: Meel kamid ah Togdheer. Buuhoodle: Meel ka mid ah Togdheer. Dhulbahante: Waa qabiil macruuf ah oo ku aroora Harti Daarood. Dhooddi: Deegaan kamid ah carro Dhulbahante. Ciidagale: Waa qabiil macruuf ah oo ku aroora Garxajis Sheekh Isaxaaq. Dhagoys: Waa meel magaceed oo ku taal Soomaali Galbeed. Qol: Qoolasha, sida qoolcaday, qoolbuulalle iyo wixi la mida. Tuur: Waa deegaan Hargeysa ka xiga koonfur bari oo galool badan. DALKAYAGA ILAAH KAA KEXEE Talyaani, 1940 Cali Faarax Jaamac “Cali-Tuur”, 65 Gabaygan soo socdaa waa habaar dusha lagaga tuuray Talyaaniga markii uu qabsaday Soomaalilaan. Waxaa tiriyey Cali Faarax Jaamac oo ku magac-dheeraa Cali-Tuur oo reer-Berbera ahaa. Cali-Tuur wuxuu khaati iska taagay tacaddigii iyo dhaqan-xumadii Talyaaniga oo baro-dheeraatay tii Ingiriiskii meesha laga qabsaday. Talyaanigu waxa uu qabsaday Soomaalilaan bishii Agosto 1940, waxanu haystay bilo gadeed, kurbo iyo karkabo xad-dhaaf ah ay shacabkii Soomaaliyeed muteen. Suugaan badan oo dhako-faar muujinaysa ayaa arrinkaas lagu cabbiray, waxaana kamid ah gabaygan habaarka ah ee uu tiriyey Cali-Tuur. Habaarkii abwaanku wuxuu u rumoobay sidii uu Alle uga beryey. Wuxuu yidhi: Talyanoow sidii duur belbelay, dab isu kaa dhaafye Degelladu ku wada naaqusoo, dugum lagaa yeelye Dekedaha wax kugu qayliyaa, kaaga soo dego ee Duufaan Ilaahay ku geli, sida dabayleede Deegaanta seeg oo gugaa, da’ay ha noolaanin Gabaygan sida ay dad looga qaateen ahi ii xaqiijiyeen waxaa tiriyey Cali-Tuur oo reer-Berbera ahaa. Waxase jirta in mudane Idaajaa ku sheegay nin uu ku magacaabay Axmed Maxamed, mar uu idaacadda Codka Mareykanka (VOA) ka hadlayey. Abwaan Axmed Aw Geeddi ayaa kamid ah dadka arrinkaas gaashaanka u daruuray. Sidii adhi wadeeco u dib jiray, Weerku dabayaacye Dawgaad martaba kaaga yimid, danab ku xooraaye Mayl soo dabbaashaa ku qabay, oo waaga soo degaye Dusha kaaga soo dhace xabbado, sheedi soo diraye Durriyaadka66 sheekhaannu67 nahay, laga ducaystaaye Raggii dunida soo wada derderay, kugu dammaashaadye Dayuuraduhu kaa joogsade, oo dawlad waa noqo ee Dalkayaga Ilaah kaa kexee, duhur dharaareede Dibna hawgu soo noqonin, waa kama dambaystiiye Durriyaad: Waa durriyad oo wadar ah, ubad, farac. Halkan ammaan ahaan ayey ugu jirtaa. Sheekha: Waa Sheekh Isaxaaq MAR KU ROGA Cabdi-Dhukane Gabaygan waxaa tiriyay Cabdi Xirsi “Cabdi-Dhukane” oo ku noolaan jiray Berbera xilligii gumeystaha Ingiriisku dalka haystay. Waxay ahayd xilli uu halganka xornimo-doonku si balaadhan uga socday Berbera, oo uu Suldaan Cali Kooshin oo ahaa Suldaankii Ciise Muuse ku baaqay in la mamnooco adeegsiga sharciyada Ingiriiska. Sababtu waxay ahayd, in markii hore dadka ay kala xukumi jireen qaaddiyo wax ku kala xukumi jiray shareecada. Markaas ayuu Ingiriisku soo rogay in sharcigiisa lagu dhaqmo. Taas ayaa keentay qaaddacaad iyo iska hor imaad. Haddaba gabaygani waa dhambaal uu Cabdi-Dhukane u dhiibayo nin la odhan jiray Cabdillaahi-Cawar oo ku socda reer-Hargeysa, oo uu hal-abuurku ku guubaabinayo inay halganka taageeraan. Wuxuu dareensiinayaa in laga macaashayo keeno-diidnimada oo aan lagu khasaaray. Wuxuu yidhi Cabdi-Dhukane: Haddii aad masaladaan ku faro, maanta iga geyso Cabdillaahiyoow kuma makalo, mawdku waayadane Masiibada gudaysiyo fakhriga, maro lagaa saarye Maqaamkii Saleebaan68 ka gaadh, maalka xoolaha’e Marka muranka xooggali dhacee, xaqiyo miisaanka La mushaax macaaneey jannada, Maxamadkeenniiye Dhulkana haatan murugaa jirtee, mahad ku nooloowe Marka aad majliskii tagtiyo, meesha lagu jaado Dhallinyaradu waxay kaa milshiyi, moosinkii gabaye Sida nimanka muurqanida loo, wada maryaamaaya Meeqaami luuqdana habluu, haw mashxaradeene Muslinnimadu qaali bay ahayd, maanta ka horoowe Niman baa mahoobiyay dhulkoo, maal ku iibsadaye Minhaajkii Kitaabkiyo sharciga, meeri qaaddiguye Muqniqiyo Bukhaariga la saar, miiska gaaladuye Makhribkiyo Cishaa’iga hadduu, maranti wiil keeno Madbacaadda dhiiseeyadaa, loogu mehershaaye Maqbuul kuma dhicine sawjadii, way maxlalanyiine Waa maytinloow caaqilkii, madaxa weynaaye Marsaday kasoo degi jireen, wiilalbaw mudhaye Masaar buu u buuxshaa ninkuu, maalintaa dagiye Ninkuu dheregga maytaamiyaba, wuu kasoo magiye Iyagaba musbaarrada la tumay, way ku maqanyiine Waa meherad uu jecelyahoo, maya kafaysaaye Haddii aan la isaga mid noqon, maylinkii durugye Mihin bixi Suldaanoow raggii, moodka hayn jiraye Marku madaxa dhoobada la galay, waa la miinsadaye Haddii Ciise Muusaha69 majnuun, lagu malaynaayo Waa muusannaw xaajadaa, nagu maqleyseene Intaan marantideenniyo hablaha, madaxa loo xiirin Mar ku roga mareeg-diidka waa, laga macaashaaye Maqaamkii Saleebaan: Derejadii ama heerkii Nebi Saleebaan – nabadgalyo korkiisa ha ahaatee. Ciise Muuse: Waa qolo macruuf ah oo ku aroorta qabiilka Habar-Awal ee reer Sheekh Isaxaaq.
MAXAA IIGA GIDHIISH AH Maxamed Nuur-Laangadhe Gabaygan waxaa la tiriyey 1943kii oo ahayd markii uu gebagebada ku dhawaa dagaalkii labaad ee dunida. Gumaystihii Ingiriiska waxaa muhiim u ahaa sumcadda iyo magac-wanaagga. Wuxuu dagaallo lagu hoobto u geli jiray si ay uga haybadeystaan umadaha uu gumaystaa. Soomaalida dhexdeeda haddii uu ka maqlo cid ka faafisay wax sumcad dil ah, wuxuu kula kici jiray xadhig, dagaal ama inuu abaabulo wax buriya ceebta laga sheegay. Tusaaleyaal badan ayaa lasoo qaadan karaa. Waxaaba ah mid ah oo aan la illoobi karin wixii Cabdi-Gahayr ka raacay gabaygii Qoorriga Suweys ee uu xaaskiisa ugu caqli-celinayey. Dhinaca kale si weyn ayuu uga faa’iidaysan jiray dadka aftahanka ah iyo kuwa magaca ama meeqaanka leh si ay u hormariyaan ujeeddooyinkiisa oo sumcad-dhisku kamid yahay. Abwaannada Soomaaliyeed wuxuu ku dhiirrigelin jiray maal iyo maamuusba si ay isaga u ammaanaan, cadowgiisana u sumcad dilaan. Taasi marar badan ayey u hirgashay. Laakiin markii ay soo gaadhay abwaanka kor ku xusan, waa ay dhicisowday kaartadii Ingiriisku. Ingiriisku wuxuu ka codsaday abwaanka iyo abwaanno kaleba inay ka gabyaan guulihii ay Ingiriiska iyo xulafadiisu kasoo hooyeen dagaalkii labaad ee adduunka, ayaga oo guulihii Ingiriiska iyo jabkii Jarmalka ku qoraya far waaweyn dabcan. Abwaannada waxaa loogu abaal-gudayey go’yaal baahi weyn loo qabay berigaas, maadaama adduunka bad xidhan ka dhacay. Abwaan Maxamed Nuur-Laangadhe oo ahaa nin waddani ah oo iimaan qaba, arrintaasi way cuntami wayday. Waxaanu go’aansaday inuu madasha ka gabyo laakiin gabaygiisu noqdo mid ku liddi ah wixii laga rabay, isla markaana ka turjumaya iimaankiisa iyo aragtidiisa dhabta ah. Idaacadda Raadiyow Hargeysa oo markaas cusbayd, wax kastana si toos ah ayaa looga sii deyn jiray. Markaas ayuu soo fadhiistay abwaanku. Wuxuu ka hadlayo lama sii ogeyn waxaase la filayey ammaantii guusha Ingiriiska. Wuxuu yidhi: Mar haddaan gurigayga gidhligaanka* gariiriyo Garnayl* loola tagayni Iglan* baa gubanaysa Maxaa iiga gidhiisha Gudaha ceelka Hargeysa* Weligay gees uma dhaafin e Bal maxaan laba gaal oo Abtirsiimo gudboon Midkood guusha u siin Midna aan u gumeyn Maxaa iiga gidhiisha? Gudaha ceelka Hargeysa Waligay gees uma dhaafin e Inta aan wax gasiintiyo Intaan gaajo ku seexday Hadii aan isu geeyo Mala waa isku gow e Maxaa iiga gidhiish ah? Mar haddaan ka gabyay Go’aygiina ka qaatay Maxaa iiga gidhiisha? *Gildhigaan: bunduq ama qori ka mid ahaa hubkii waagaas la isticmaali jiray *Garnayl: waa hub gacanta laga tuuro oo qarax weyn, qasaare badanna dhalin kara. *Iglan: dalka Ingiriiska *Hargeysa: Magaalo madaxda Somaliland, isla markaana ah magaalada labaad ee ugu weyn uguna dadka badan magaalooyinka Soomaalidu degto, qarnigan. Waxa hore loo odhan jiray Herer. RAQDII SHEEKH BASHIIR Xaaji Aadan Afqallooc, 1948 Gabaygan waxaa tiriyey Alle ha u-naxariistee Xaaji Aadan Axmed Xasan oo ku magac-dheeraa Xaaji Aadan Afqallooc. Xaajigu wuxuu ahaa halgamaa, aqoonyahan, caalin diimeed iyo gabyaa. Ilaahay waxaa uu ku mannaystay cimri dheer. Dawladdii Cismaaniyiinta ayuu xilal kasoo qabtay, gaar ahaan faraceedii Yemen. Dawladda Cismaaniyiintuna waxay burburtay 1924. Wuxuu meelo badan kula soo diriray gumaysigii Ingiriiska, gaar ahaan Falastiin iyo Suudaan. Asaga oo nin weyn ah ayuu dalka dib ugu soo laabtay. Markaa wuxuu bilaabay olole wacyi-gelin ah oo ka dhan ah gumaystayaasha ku habsaday geyiga Soomaaliyeed, gaar ahaan Ingiriiska. Haddaba xaajiga oo aan ka yarayn 80 jir wuxuu usoo taagnaa dilkii Sheekh Bashiir loo geystay iyo sidii arxan darrada ahaa ee Ingiriisku ula dhaqmay iyo sidii damiir la’aanta ahaa ee dadkii Soomaaliyeed uga dhiidhiyi waayeen. Markaa waxaa uu tiriyey gabaygan la magac-baxay Raqdii Sheekh Bashiir. Wuxuu yidhi Xaaji Aadan: Duhur baa Bashiir* lagu shannaqay*, daar agtiina ahe, Damal* la hadh galaabay jabsheen waqay* dulloobaane Dahriga iyo laabtay rasaas, kaga daloolsheene Isaga oo dem* iyo dhiig leh, oo maro ku duu-duuban, Dadkii uu nebcaa iyo kufri baa, daawasho u yimide Dacsad* iyo ihaaniyo cag baa, loogu sii daraye. Meydkiisa daahiran markii, debedda loo jiiday, Ee aaska loo diiday, waa wada dul joogteene. Ma damqane jidhkiinii markaa, waa ku digateene Nasab haddaad durriyaddii* tihiin kama dareerteene Ma duugoobin Qaybdiid* lafuhu, waanay duxayaane Duur* looma jabin geesigii, dirirta waallaaye Wax badan oo ciyaar lagu diliyo, dawgal baa jiraye, Oo aan deero deero u hirdiyin, sida digaaggiiye Isaga oo dulmiga aad qabtaan dood ka celinaaya Da’dii uu ahaa Faarax* baa jeelka loo diraye Immakuu siduu dayro yahay, debedda meeraaye Loo diid durriyadduu dhaliyo, duunyaduu dhaqaye Gobanimo duqii Cali Bahdoon*, doonisteed dhimaye Tilifoonna* waakii dawakhay, doorkii uu yimide Dacwad iyo wuxuu hadal yiqiin, idinka daw waaye Wax badan baa karbaash lagu dirqiyey, duq iyo wiilkiine Nin gadhkii camuud loo daroo, dabada loo xayday Oo ulo dubka iyo jiidhka suga, lagu dalliigaayo Oo kuman dadkiisii ahaa, daawasho ujoogo Oo aan la diidine farxaan, lagu dareeraayo Waa dabac idiin gooniyoon, duulla waafiqine Afdalleela iyo baad shubtaan, diin la iibsado’e Bahal cadarku dilayaa jiroo, digo shifaysaaye Idinkana daliilkiyo wacdigu, waydin didiyaane Dulli inaad tihiin buu hubsaday, diinta caasiyaye Dahab buu ku iibshaa dhulkaad, dir u lahaydeene Hore haddaad u dirirtaan haddaan, nin idin daareene Doqonnimadiinii horay, darafku haysaaye Dambarsada haddaa xaabadii, laysu soo degaye Ummaddaan xorriyad doonan ee, daafac noqon wayda Dadku inuu addoonsado horaa, loogu daabacaye Dabka naarta fulahaa wax gala, ugu dambaab weyne Dunjiga Aadan ubadkuu dhalaad, ugu dambaysane Wixii aad ku dacafteen, qalbigu saw iskama daayo Dib maxaa idiin celinayoo, hore idiin diiday Mar uun maad ku dayataan khalqiga, libinta doonaaya Dabka qaaday sharaqii* wax badan, daamishka* ahaaye Turki inuu Bulgaariya daguu, duunka ku hayaaye Dardaniil* ka xidhey Ruushankay, deris ahaayeene Wax badan buu dariiq inu ka helo, doonay Malatoofe* Ka duuduubey Faransiis, dhulkii Suuriyuu degaye Dergedihii Lubnaan iyo ka guur, degelkii Beyruude. Deeq kama ahaanine bir baa, daanka loo sudhaye Dejla iyo Furaat Ferenjigii, kama dekeeyaane Dahraan iyo ka kece ceelashay, wada degmaysteene Dirir iyo jihaad Maxamed Rida*, uga dambaysiiye Wuxuu Faysal* taarka ugu diray, daawo iyo jaare Ingiriis wuxuu damacsanaa reer Hindiya diidye, Daarihii Bunjaab* iyo ka kace, dahabkii hoos yiile, Daymada hadeer bay indhuhu, dib u jalleecaane Damaashaadku waa Maxamed Cali,* loo dabbaal degaye Masarna waa horaa laga diriyo, dawgii qoorriga e Iskandariya kama soo degaan, ducuflihii gaale Dakhiirad iyo saabaan wixii, dirirta loo keenay Faaruuq* u dacaree inay, dabar ka qaataane Dadoo idili soo eri ninkii, daallinka ahaaye. Dayaarado wax lagu soo guriyo, May* wax lagu doono Daad xoorta oo idil halkaanaa lala damcaayaaye Dekedaha maraakiib shixnadan, baa ka soo degiye, Waa dooyo nimankaa u kacay, Dig iyo Ceeldhaabe Dable dhagaxa uu doonayaa, waa dusmiyo xeele Danta iyo qasdigu waa horseed, laga dambeeyaaye Dabayshiyo ayaxu waa dhunkaal, laysku dagayaaye Wax daliil ah maabkuu* diruu, soo duwaay yidhiye Dawlaabta* boqol fayl ka badan, daafta waxa yaalle Inay duuddu dacar yeelatuu, doonayoo helaye Wax dawanan dariiqiyo halkay, Debec* ku fooftaaye Daliig cawsa meel aan qornayn, deelka laga waaye Dacasha* iyo xaynbooradaa*, buug ku daabacane Dabin baa sitaar looga dhigay, man* iyo doomaare* Daaqiyo biyaha waxa la xidhan, eegga dabadeede Halka daawad* xeradeedu tahay, gaaladaa degiye Dad-guuraagu goortuu madhaa, dabar-go’aysaane Nin dayuurad iyo moodhar laa, beer idiin dirane Durgufkiina soo hadhay, waxaan doonayuu garane. Wax badan baan damiin dhega la’aa, daasaddaw tumaye Amba nimay indhuhu ay damyiin, day waxaa idhiye Caammiye nin daadihinayuu, diidayaan ahaye Dab-baan mooday gaaraabidhaan*, dayrnadii hore’e Dacar iyo Unuun baan macaan, ugu dudaayaaye Doofaar ilkihii baan u filay, Dur iyo Yaaquude Dambas iyo ramaad baan intaa, naar ka deyayaaye Dawliilka waxad shaabahdaan, dad iyo iinsaane Balse waxaydun daawa u tihiin, habar dugaagiiye Hadba kii idiin soo digaa, dabin u qooshaane Dafdafiyo kulayl waxan la imid, dacastay laabtiiye Idinkiyo dinnaduhuba horaw, damac xumaateene Midna darajo kuma haysataan, labada daaroode Gobanimo dalleel lagama helo, daar adoo gala’e Haddaad doono leedahay naftaa, diiq la geliyaaye Waa mur iyo deebaaq waxaad, dib ugu aydaane Marse haddaan waxaan doonayiyo, dawladnimo waayey Dantay weeye inan aamusaa, eegga dabadeede Dulligaa ku jira noloshu waa, idinku deelqaafe. *BASHIIR: Waa Sheekh Bashiir Yuusuf. Wuxuu ahaa Sheekh geesi ah oo cilmiga diinta fahmay. Wuxuu ka dhiidhiyey gumaysigii shisheeyuhu ku hayey umadda Soomaaliyeed. Waxaase garabkiis ka baxay kuwii u hiilin lahaa. Xitaa culimadii ayaa la fahmi wayday oo u arkay in isku maqiiqaya wax aan tamar loo hayn, waxaanay u soo jeediyeen in diinka lagu akhriyo oo Alle la baryo uun. Laakiin wuxuu ku tusaaleeyey in aanay kala hadhahayn “ficilka” iyo diinta oo la akhriyaa. Aakhirkii Ingiriisku waxay dileen Sheekh Bashiir 1947, ayaga oo diiday in la aaso. Sheekh Bashiir maanta waa la wada yaqaan, waana loo duceeyaa, tafiirtiisiina waxaa lagu xushmeeyaa isaga dartii. Kuwii garabkiisa ka baxayna waa ay dhinteen sidiisa oo kale laakiin ayagu waxay ku abaadeen qashin-qubka taariikhda. Ninkii la odhan jiray Caydiid Lafcanbe oo cabbiray murugada uu ka qaaday dilka Sheekh Bashiir wuxuu yidhi: Rakiig baan noqdaa bari markuu, ruux kasoo galo’e Halkaad igu ruxaysaan qalbiga, waan kasoo raraye Nin raqdii Bashiir ogi Togdheer, uma riyaaqeene *SHANNAQAY: Shannaq waa erey af-Carabi ah oo macnihiisu yahay dil deldelaad ah. *DAMAL: Waa geedka weyn ee hadhka badan ee lagu nasto hooskiisa *WAQAY DULLOOBAANE: Ha dulloobeen, Alle ha dulleeyo ee. *DEM: Waa erey af-Carabi ah oo macnihiisu yahay dhiig. *DACSAD: Gacanta hoosteeda. *DURRIYAD: Dad wanaagsan, dadkii kasoo farcamay dadka wanaagsan, Aalu-Beyd *QAYBDIID: Waa qaybdiid Xirsi Guuleed oo kamid ahaa halgamayaashii hoggaaminayey jihaadkii Sheekh Bashiir. Ingiriiska ayaa dilay. *DUUR: Waa geed bur ah oo wada ulo ah oo ulihiisa laga sameeyo aloolka iyo wixi la mida. *FAARAX: Waa Faarax Oomaar. *CALI BAHDOON: Wuxuu ahaa halgamaa u tafo-xatay gobannimada dadka reer-Jabuuti. *TILIFOON: Waa Jaamac-Tilifoon oo ahaa nin qurbaawi ah oo u doodi jiray xuquuqda dadka Soomaaliyeed u leeyihiin inay ka xoroobaan gumaysiga. *SHARAQ: Waa reer-Bari. *DAAMISH: Degemsan, hurda. *DARDANIIL: Waa marin-biyood u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga. *MALATOOF: Malatov, waa wasiirkii arrimaha debedda Midowgii Soofiyeeti ee xilligaas. *MAXAMED RIDAA: Waa boqorkii Eeraan ee wakhtigaas. *FAYSAL: Waa boqor Faysalkii labad ee Ciraaq. *BUNJAAB: Waa gobol kamid ah dhulka Hindiya. *MAXAMED CALI: Waa Maxamed Cali Jina, aasaasihii dalka Baakistaan. *FAARUUQ: *MAYL: Waa markabka. *Maabka la duway waa xuduudda kala qoqobta dhulka Soomaalida, gaar ahaan tan kala qaybisa Soomaali Galbeed iyo Soomaalida kale. *DAWLAABTA: Khaanad, armaajo, kabadh, meesha lagu xareeyo dhukumentiga ama alaabooyinka kaleba. *DEBEC: Waa hal magaceed oo loola jeedo geel. *DACAL: Waa sumad xoolaha lagu calaamadiyo oo ah dhegta oo hoosta laga kala jeexo. *Xaynbooro: Waa summad geela lagu calaamadiyo oo lagaga dhigo cududa ama garabka. *Man: Waa ubaxa dhirtu bixiso marka roobku helo kadib. *Doomaar: Caws. *Daawad: Waa hal magaceed oo loola jeedo geela oo dhan. *Gaaraabidhaan: Waa xasharaad aan dukhsiga ka weynayn oo marka uu habeenkii duulayo, bixiya iftiin big-wac ah. SULDAD XABASHIYEED (Ma-Hadho) Xaaji Aadan Afqallooc Gabaygan waxaa tiriyey Xaaji Aadan Afqallooc oo ahaa sheekh caalim ah, gabyaa xeeldheer, halgamaa iyo waddani aan isaga oo kale la arag. Wuxuu kaga hadlayaa dhaxal-wareeggii Soomaalida kasoo gaadhay dhulkii taariikhiga ahaa ee Soomaali Galbeed. Dhaxal-wareeggaasi wuxuu ahaa marxalado kala duwan. Mar walbana waxaa gumaysiga Xabashida ku ladhnaa Soomaali. Dhaxal-wareeggaas dhulka Soomaalidu, kumuu hirgelin si ciyaar ah ee waxaa wehelinayey dhiig-bax, xasuuq iyo cadaab adduunyo oo loo geystay dadka. Xaaji Aadan wuxuu gabaygan uga danlahaa sugitaanka taariikhdaas xanuunka badan, si ciddii awood u yeelataa ugu xisaabtanto mustaqbalka. Waxyaalaha uu abwaanku xusayo waxaa kamid ah: xasuuqii culimadii Harar, xasuuqii Dhagaxbuur, xasuuqii reer-Ashica, xasuuqii Awaare Afdam iyo xasuuqii Leegada ee Jigjiga. Wuxuu yidhi: Qarnigii siddeed-iyo-tobnaad, sanac xumaantiisa Siddeetan iyo dhawr sano, waqtiga saaka laga joogo Oo uu saancaddii qarab* arliga, sabab la’aan boobay Oo idinka idin siiyay*, qaar aradka Soomaali Sodcaalka uu Jermaaniya ku tegey, saaxirkii Menelik* Afriiqiya* sidii loo dhacaad, sabab ahaydeene Midow oo dhan waxaad siisateen, sooryo maalin ehe Sirtaa naga gasheen baa aheyd, sun iyo waabay ee Sina uma qaddarin midabka iyo, soohdin iyo jaar ee Gumeystaha dadkaan ula sinneeyn, soo degoo yimide Wax saayid ah addoonsiga madoow, kugu sameeyaaye Xaqqana lagama seexdoo nin lihi waw sid tiriyaaye Kolkay soo martaa buu wuxuu, sugayay doontaaye Samir iyo Allow maleh sidaad, noola dhaqanteene Waa ma hadho saanqaadka kora, lala sugaayaaye Dhiig saafiyaa loogu qoray, saan biciid adage Duq kastaaba sabiguu dhaluu, saa ogow yidhiye Gartayadu xuduud kuma sinna iyo, soohdin iyo jaare Waa saamigaad qaadateen, sabankii Baarliine Sakarashada iyo quudha iyo dilkuba, saamaxaad malahe Isticmaarku waa kala sifee, kiinu waa suruqe Sahyuuniga iyo Suud Afrika*, iyo saaqidka Ismiidh ah Saddexdoo israacay baan faleen, waxaad samayseene Seeddi iyo abti iyo waalidiyo, sowjad iyo hooyo Kala soocde qoys keli ah oo, seeda wada yaalle Suldaan amar leh sheekh saahid ah, iyo seen caddaa odey ah Soddonku ninuu u buuxiyo, haween sida carruurtooda Sirqo habar ah inan seerateyiyo, kuwo sagaal jooga Ayagoon saxarna dhimin baad, dhammaan sibiq u leyseen Sarrafyidhi Amxaar jamac dhan, oo wada sujuudaaya Saqiirka iyo umulahaad disheen, malaha soo qaade Kun baa subax disheen aamin ah, oo seexdey oo kacay Saddex boqol ka badan culimadii, suuqa Harar tiille Iyaga oo salaad jamac galaad, seefku mariseene Saqda laylka dhaxe waxaad gasheen soolkii Dhagax-buur e Samada iyo dhulkaba ciidankii, riday sawaariiqda Kama seydhin ruux keliya oo, joogay subaxaase Sujaacdii Awaare afdam ee sida xun loo laayay Saxariiradii naagahaan, weli sasayaaye Saqiir iyo kabiir reer Ashaco, oo nabad kusoo hoyday Sardhaday galeen baad qumbulad, sun ah ku tuurteen ee Surimada Jigjiga Leegadii sida xun loo laayay Surkaad wada jarteen wiilashii, timaha soohnaaye Saqajaanka beesha iyo guryaha, socod xumaantiina Nin sidaa ku dhaqanteen ogaa, waa siqsiqiyaaye Suldad Xabashiyeed nimay heshaa, waa sac kuu taliye San ku neefle aad is shaabahdaan, baan dunida saameeyne Saxi maayo axad sheeg is yidhi, sidaad sameyseen *Qarab: Waa erey af-Carabi ah oo la macno ah reer-Galbeed. *Cidda dhulka Soomaalida la siiyey ee halkan lagu xusayaa waa Xabashida *Menelik: Waa boqorkii Xabashida u talin jiray min 1889 illaa 1913. Waxaa lagu xasuustaa qabsashadii Harar, kaniisad u rogiddii Masaajid-Jaamaca Harar iyo warqaddii uu u diray reer-Yurub ee ahayd inuu yahay jasiirad Kiristaan ah oo ku dhex jirta bad Muslin ah. Waxaa lagu ammaanaa boqorkii boqorrada Itoobiya iyo mideeyihii. *Afriiqiya: Afrika oo af-Carabi ahaan loogu dhawaaqay. *Suud Afrika: Waa Koonfur Afrika oo af-Ingiriisi ahaan loogu dhawaaqay. Waxaa berigaas ka jiri jiray xukun midabtakoora oo gumaysi ah oo dad yar oo caddaan ahi ay si xun u cabiidsan jireen dadka madow ee Afrikaanka ah ee dalka iska leh. GUUBAABADII YUUSUF XAAJI AADAN QABILLE Yuusuf Xaaji Aadan Qabille, wuxuu ahaa aqoonyahan, suugaanyahan, halgamaa iyo indheergarad. Waxaa aad loogu xasuustaa dhinaca tacliinta oo waaba shakhsiga labaad ee waxbarashada dhinaca iskuullada lagu xasuusto. Dabcan qofkii koowaad wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Cali oo macallinkiisa ahaa.* Labadoodaba dhibaato ayaa kasoo gaadhay halgankoodii ay u galeen sidii dadku wax u baran lahaa. Sidaa darteed ayaa loogu kala magacaabaa aabbihii koowaad ee waxbarashada iyo aabbihii labaad ee waxbarashada. Yacnii Yuusuf Xaaji Aadan wuxuu ahaa aabbihii labaad ee tacliinta iskuullada Soomaaliyeed. Halgankii iyo dhibaatooyinkii uu arrinkaas u maray waxaan akhristayaasha kula talinayaa inay ugu noqdaan buugga ay qortay Foosiya Yuusuf Xaaji Aadan ee ay ugu magac-dartay, “Geeddi-Nololeedkii Yusuf X. Aadam.” Laakiin waxaan halkan idinku dhadhansiinayaa halgankii dhinaca gobannimo-doonka ee uu suugaanta u adeegsaday wax kamid ah. *Qoraaga Maxamed Baashe Xaaji Xasan wuxuu igu biiriyey in Maxamuud Axmed Cali iyo Yuusuf Xaaji Aadan ay caan ka ahaayeen gobolladii Ingiriisku gumaysanayey xagga waxbarashada laakiin dhinacii Talyaaniga waxaa ka jiray aabbo tacliineed oo kale oo lagu magacaabi jiray Aw Jaamac. Dagaal Nimuu Haysto Meel Halisa Yuusuf Xaaji Aadan, 1948 Hadhuub nin sitoo, hashiisa irmaan Ha maalin la leeyahaan ahay Nin hawd degayoo, harraad ku diloo Biyaha laga heegayaan ahay Habaas nin dhex jiifa oo ku haftoo Hayaankii kasoo hadhaan ahay Dagaal nimuu haysto meel halisoo Hubkiisu hangool yahaan ahay Wixii ku habboon nin haabanayoo Bahdii ka horjoogsataan ahay Nimaan hadalkiisu hadh-qooflaalkiyo Haweenkaba dhaafin baan ahay. Hub Samayso Soomaaliyeey Yuusuf Xaaji Aadan, 1949 Ingiriis Hargeysuu degiyo, hilinnadeediiye Wax Talyaani weli haybiyaa, hoosadii Xamare Faransiis Jabuutuu hurdaa, idinku hiifaaye Wax Maraykan hawdka u maraa, waa horseed yimiye Waakaas dhulkeenii hantiyey, hooliflow Xabashe Hub samayso Soomaaliyeey, lagu hareereeye. Gobannimo Intay Laalantahay Yuusuf Xaaji AAdan, 1953 Inta uu gumaystuhu arlada, gebagabaynaayo Gaaladu intay ii fadhido, guriga coonkiisa Intay gibili weli saarantahay, aniga guudkayga Gobanimo intay laalantahay, gebi ahaanteedba Intay guushu ii muuqatee, labantay gacantu Ee goonyaha Jabuutiyo Wajeer, la iga goobaayo Inta gaadhku igu meersanyahay, gumucna lay haysto Gasiinkiyo anfaaciguba way, goha dhunkaaleede Ninkay gaajo haysoow aduu, gorofku kuu yaalle. WAAN IRDHAYS-NAHAY Gabaygii Fiinta Cali Xuseen Xirsi, 1954 Gabayada xusuusta gaarka ah leh ee Cali Xuseen Xirsi tiriyey waxaa kamid ah gabayga Fiin oo sida ka muuqata uu tiriyey sanadkii 1954kii markii la dhaxal wareejiyey dhulka Soomaali Galbeed. Gabayaagu wuxuu gabaygiisan ku waraysanayaa shimbirta loo yaqaanno fiinta oo uu arkay iyada oo aad u ooyaysa. Gabayaagu gabaygiisa wuxuu ku caddaynayaa in shimbirtani ka ooyeyso dalkeedan la dhaxal wareejiyey halka qaar kamid ah dadkiisii ay weli ku mashquulsan yihiin qabyaalad iyo qolo qolo, waxaanu yiri: Fiin yahay adaa ololayoo, oohin ciirsadaye Haddii aan laguu imanin waad, aammusi lahayde Maxaad aragtay waan kula qabaa, uur-ku-taallada’e? Waxay tidhi, “Ilaahay haddaad, aad u garanayso Oo aad Islaam tahay i daa, waan irdhaysnahaye.” Waxaan idhi “Qofkii i abhiyaa, wuu ammaan heliye Ashahaadda iyo waan aqaan, aayadii Nebiye Hayeeshee ilmada kaa dhacdiyo, umalka guudkaaga In yar iiga sheeg waxaan rabaa, inan ogaadaaye.” Waxay tidhi, “Inkaar buu ku go1ay, odagi Soomaale Awlaaddi uu dhalayna waa, sida adoogoode Hadday ul iyo diirkeed yihiin, rag iska eegaaya Afrikadan ma joogeen nimaan, aabbe ku lahayne Ayax kuma dhaleen kaymihii, ubaxa weynaaye Anna aydii aan joogi jirey, kama abraareene.” Waxaan idhi, “Irdii nalaga qaad, aad ahaan jiraye Waataa la kala iibsadaan, nala ogeysiine Ooddaaba laga goynayaa, Idhankii Laasoode Meeshaad ilmaa dhigan lahayd, uun kalaa degaye.” Waxay tidhi, “Dhulyahow eheledaa, ma laha iimaane Ilaaleeyey oo dunida waa, ugu il liitaane Iyagaa ableyda isu sida iyo eebo xoog badane Intey Ayro kala qaadayaan, aarsan mahayaane.” Waxay tidhi, “Ilaahay hadduu, duul arrin u diido Oo uu Ibleys gebi ka rido, sooma ururaane Qalbigii engegey waanaduu, orod ku dhaafaaye Goormaa inkaartani heshey ee, lagu alhuumeeyey?” Waxaan idhi, “Arbiyo laguma oga, geesi aynaba’e Iniinaha kelyaha iyo wadnaha, iini kaga taalle Aanada tolkood bawga roon, uumiyaa kale’e Maxaan ararta kaga daalayaa, edeg na loo gooye.” TAA MIYAAN LA ARKAYN? Cali Xuseen Xirsi Abwaan Cali Xuseen Xirsi oo ahaa shakhsi ka dhex muuqday gobannimo u-dirirkii umadda Soomaaliyeed, waxaa dhib weyn ku hayey dadkan uu xorriyaddooda iyo xuquuqdooda u dagaallamayo ee haddana cadowga u dhuun-daloola. Waxaa badanaa dadka gumaystaha u adeegi jiray, waxaa jiray qaar u basaasi jiray, waxaa jiray qaar u shaqayn jiray, waxaa jiray kuwo u arkayey gobonnimo-doonka qaar jar-iska-xoor ah. Haddaba waxaa lasoo wariyey in maalin ay kulmeen odayaal gumaystaha wax la cuni jiray iyo madaxdii ururkii Leegada ee gobannimo u-dirirka ahaa. Markaas ayuu shirkii ka tiriyey maansadan yar ee uu ku hoga- tusaalaynayey odayaashaas Soomaalida ah ee haddana cadowga la saaxiibka ah. Wuxuu yidhi Cali Xuseen Xirsi: Akhyaartaas i maqlaysiyo Odayaasha tan joogoow Sida awr hayinoowbay Oo alaabtii qubi waayey Umaddaa la raraayo Ee usha loogu daraayo Ma waydaan arkahaynin? Webiyaashan Asayliyo* Jannaala kan agteenna Siduu abeeso dilaayo, ragguu laayey Abeelle* ee la dhacaayey Alwaaxa ee Afka dhiiggu da’aayiyo agoontii yaryaraydee aabbihii korinaayey uu ka gooyey unuunka Miyaan taa la arkaynin? Hableheennii ugbaa iyo Ooryihii aad qabteenee Markii ay umuleen Laga tuuray ilmaayee Lagu abuur-falanaayey Taa miyaan la arkayn? *Asayle: Waa Kelli Asayle oo ah gacan-biyood biyaha webiga lagu gaadhsiinayey meelo fogfog si beeralaydii Talyaaniga iyo mashaariicdii beeraha ee Talyaaniga biyo loogu helo. Wuxuu ku yaal meel u dhow Qoryoolay. Waxaa si qasab ah loogu qodi jiray dadka Soomaalida ah, ayada oo la jidh-dili jiray, la gaajaysiin jiray oo si daran loo ciqaabi jiray. Waxaa la sheegay in muddo yar ay ku xasuuqmeen 26000 oo Soomaalidii lagu shaqaysanayey ah. Dhimashada faraha badan ee ku imanaysay dadkii lagu qodayey gacankaas ayaa sababay in loo bixiyo Asayle ama Kelli-Asayle. Maxaa yeelay dumar badan oo raggooda lagu shaqaysanayey ayaa qaaday asay. Fiiri Dktr. Saadiq Enow “Dhalashadii iyo Dhabarjabkii Soomaali Weyn 4.” *Abeelle: Waa magac nin Talyaani ahaa oo gumayste ahaa.
MAANYARIDU SOOMAALI WAA Yuusuf Cismaan Keenadiid Gabaygan waxaa tiriyey abwaankii waynaa ee Yuusuf Cismaan Keenadiid. Taariikhdu waa dabayaaqadii 1950naadkii. Geyiga Soomaaliyeed oo dhan waxaa gumaysanayey quruumo kale. Dhaqdhaqaaqyadii gobannimo u-dirirka ahaana waa la dhexgalay oo waxaa ku milmay qaar dabadhilifyo ah oo gumaystayaasha gacan-saar la lahaa. Kuwaas ayaanay markiiba gumaystayaashu kor usoo qaadeen si ay ugu sii dhiibtaan xorriyad ku meelgaadh ah oo ay lasoo noqon karaan markii ay doonaan. Haddaba cadaawaha umadda Soomaaliyeed iyo cawaantoodu waxay yaqaanniin meesha umadda Soomaaliyeed ka nugushahay ee laga wareemi karo ama laga xagal daacin karo. Dabcan waa qabyaaladda. Markaa ururkii ugu xoogga badnaa dhaqdhaqaaqyadii gobannimo-doonka ee la odhan jiray Es.Waay.El (SYL) ayaa la dhexgalay markii ay guushii soo dhawaatay. Khaakhuul qabiil ayaa laga dhex oogay. Markaa abwaanku wuxuu isku deyayaa inuu dadka waaniyo, isaga oo iftiiminaya meeqaanka liita ee Soomaalidu ka taagan tahay dareenka Somaalinimada iyo Islaamnimada labadaba. Wuxuu yidhi: Maan-yaridu Soomaali waa, meheraddeediiye Maslaxaddeeda garan-weydey iyo, marinkii toosnaaye Macnahay ku noolaan lahayd, maluhu siin waaye Maamuus la’aan lagu wadey, moodayaan nolole Miis xumida heysiyo dulligu, waw macaan yahaye Mabsuud weeye badidood waxay, mudan-hayaan ceebe Muslinnimada sida loo mud-mudi, kama maseyraane Maqaam-xumida waxa joojey waa, muran dhexdooda ahe Iyagaysu muuqanahayee, moog adduunyada ee Murtidey lahaayeen diliyo, magaca kooda ahe Muwaafaqo kolkii laga gafaa, mowtigood galaye Anigaa ku mira-dhaama baa, meleggu saarraaye Macrifo uma yeeshaan wuxuu, baran masaalkoode Macaamilada aadmigu ku jiro, laga madoobeeye Martabadaa adduunkiyo cilmigu, umaba muuqdaane Dadkey madaxdu ka xumaato way, marin habaabaane Kuwa muqaddimada looga dhigey, waa manfaco doone Mar maxaad cuntaa keliya buu, yahay muraadkoode Nin mushaharo eexeyn-hayaa, waa miskiin dhabahe Muddeec waxa ka dhigay waa inuu, maarmi-waa yahaye Muddaafacana seeg iyo inuu, maya yiraahdaaye Culimadana damac baa melgoo, mooyi sey tahaye Milladdiyo shareecada bar baa, maal ku iibsada’e Marsiin iyo fudeyd buu ku dhacay, magane diinkiiye Maan-gaabka iyo weys hayaan, kii mufti ahaaye Ardeydaa mujaadilo la geli, macallinkoodiiye Midkii dhowr masalo soo bartaan, maaro loo heline Makas-tiyo intii caamo bey, madax-wareersheene Hadba xaal muraad lagu waraa, leyna maqashiine Waase waxaan Minhaajkiyo Tuxfaha, meelna kaga oolle ISTAAGEERID LAGA WAA Cismaan Yuusuf Keenadiid Maansada soo socotaa waa masafo. Masafadu waa nooc kamid ah maansada Soomaaliyeed oo berigii hore ay caan ku ahaayeen culimadu. Waxaa tan tiriyey Cismaan Yuusuf Keenadiid oo qudhiisu ahaa nin culimo ah. Wakhtiga uu tirinayaa waa mar ay sooba dhawaatay xorriyaddii beenbeenta ahayd ee la siiyey laba gobol oo kamid ahaa dhulkii Soomaaliyeed ee gumaystayaashu bililiqaysteen. Waxa uu iftiiminayaa dhibkii jiray berigaas, dawladihii kala qaybsaday dhulka Soomaalida, dabadhilifnimadii dadka qaarkood lagu ibtileeyey iyo sida looga tegay kasoo-horjeesiga gumaysiga iyo ku-dhaqanka Islaamnimada dhabta ah. Wuxuu yidhi: Axmadow* tixdii maanso, tirinteedba daayaye Indhoweyd ka tegayoo, tooggo uuma yeelane Kolse haddaan ku tacalluqo, saan u taxo ma waayee Tuduc uun baan ka sheegaa, tororogi ma fiicnee Sida loo tebaayaa isaga-key tallaalane Taallo iyo buur iyo kama tuuro meel xune Tubta kama qalloocshiyo ta’wiilaha higgaaddee Takhtarkeed inaan ahay, waad igu tiqiinaye Meeshii aan ka taab-saaro, raga qaar ma tabayee Wow tallaaba qaadaa, an kuma turunturrooda’e Dhaaxaanse tabo jadiidiyo meelo kaaga taabtaye Tu yar oo aan kuu sheegi, bal tilmaanso caawana Afartaas tusmeeyaye ma tammimay sidaydii Ma tartiibshey maansada awal baan tacliimaye Sow xarafka kuma toosin ta’da kama habaabine Taasi weyga degataye tiraab kale waxay tahay War Soomaali tala xumo, taag looga waayaye Tabtay horey u soo baratay, marna kama tegeysee Tadbiir kale ma hayso’e iyadaysku taagane Istoleysigii gacalo, tusi waa Ilaahaye Iyadaysu tumanaysa, teeri iyo billaawe e Istaageerid laga waa, isu turinamaysee Tabaalaha adduunkiyo, taariikh eegi meysee Waxay tacadi soo aragtay, iney toosto diidaye Cilmiga loo tartamayana, u tacjiilimeysee Shisheeyaha ku tuman iyo tooda fiirin weydaye Xornimada u timid haatan, toodoobi meysee Diinta tiirinta u baahan, waxba uguma taallee Tiiraanyo kama hayso, tafarruqa la geliyaye Si kastoo ad ula talisid teedii uun weeye e Dalkoodii rag baa tebiyey iyageyska tuunsane Ingiriisku tahantiyo toogadiba ka helyaye Faransana tabkiciyoo tiisii waa ku heystaye Inta kale waxaa taabay, Talyaani iyo Xabasho e Amxaarkana tix-gelin iyo turaal lagama eego e Tol-waynihii Ogaadeen tuu ku falay la maqalyaye Gabal toogey qaarkoodna xabsiguu ku tuuraye Nimankii u talinaayey Tafarraa* dhammeeyee Tallan iyo kuwii haray tawal baa dilaayoo Waa ka tubaha soo jiiray Ina-Tarabbi* keligiye Isaaqna looga tabar sheegay, takhtigii dhulkiisee Wuxu tiriyo maal qabay, kor u tiigan waayee Arladi tooxa weyneed ku tallaabsan waayee Inkastooy tigaadowdo tuldihii, daaqsan waayee Toban mayl ma dhaafsiisna taaggii Hargeysa e Majeerteenna laga teed halkuu Toga ku dhaqayaye Kobtii lagu tammadin jiray laga wada takooryaye Taxkuumadi ma seejine tunjileecsi weeyee Toomihii Marqaan iyo tegi waayey Ceel-cade Tiiriga agtiisiyo waakan tuuran Beyra’e Afartaas tusmeeyaye ma tammimay sidaydii Ma tartiibshay maansada awal baan tacliimaye Sow xarafka kuma toosin ta’da kama habaabine Taasi weyga degataye tiraab kale waxay tahay Yuu.En-nada* taarka loo direy waxba nama taraayee Waxay taawin badidood si laynoo taxaabto e Waa la takhantakhayn jiray ninkii tiro-yar weligiye Tiirridatan gaalo ah, jinnaa inagu taagaye Waa niman takoormayoo, towxiidka diidaye Towreed iyo Injiil iyo teennaba ka beyre e Tawaani keen-isuma hayso, isku towna maahine Ninkii haatan taabacayna, tubta kheyrka seegyaye Togaggii Firdowsaad tegi-maayo weligiye Inkastuu wax sii tuurto, isagay u tuudine Risqina taharoweyniyo, tabar laguma helayee Taftar baa hor lagu dhigay, tanaadkiyo saboolkee Ninba waxaa u taal meel, tii loo xariiqaye Tafan-taaf in lagu doono, toolmooni maahee Dowladdana tukubo iyo tuugmo laguma gaaree Haddaan rag isku tacaddoobin tiginkeed ma aasmee Horaa loo tijaabshoo cayaar kuma timaaddee Taawil iyo buruud iyo tadcaar wax u ah dhiiga e Cadowse soo tabcadayoo, leh tareen iyo dayuurado Nin tusbax iyo laan qaatay, taag uma helaayee Banbada laysku tuurona, toorreey gaari maysee Haddaynaan wax tabaraysan, rag waa kii is-tiilee Aan qalabka lagu tuugsan tumasho iyo ganacsiba Ee tabaabulyada seegno, waxba taransan maynnee Tawakalidda Eebbena tiir la cuskan weeyee Taliyuhu isaga weeye, tadbiirshaha aduunka e Waxaan tabarruk ka helnaa tilaawada Quraankee Taqwa iyo cibaadiyo towbad baa danteen ahe Tukashaduna faral weeye taarik waa la caayaye Hadaynaan ka tegin diinka Rabaa inagu toosane Tuu fali lahaa iyo, isna tiis la laabanee. *Axmed: Waa will uu dhalay abwaanka Cismaan Yuusuf Keenadiid. *Tafarre: Waa Xayle Salaase, boqorkii cimriga dheeraa ee Xabashida oo waagaas talinayey. *Ina-Tarabbi: Ma helin warbixinta ninkan, wuxuuse u egyahay hoggaamiye kasoo jeeda gobolka. *Yuu.En-na: Waa Qaramada Midoobey (United Nations – U.N.) oo lasoo gaabiyey dabadeedna la Soomaaliyeeyey. HALGANKII BARKHADCAS Halkan waxaynu ku xusaynaa oo ku bilaabaynnaa buuggeena maansooyin kooban oo uu tiriyey abwaan Maxamed Ismaaciil Baasarce “Barkhadcas”. Abwaanku intii uu noolaa waxa lagu naanaysi jiray “Balaayo-Cas” laakiin markii uu dhintay ayaa loogu bedelay “Barkhad-Cas”. Abwaanku wuxuu hano-qaadkiisii hore u badnaa dhinaca magaalada Cadan ee dalka Yaman. Laakiin markii uu kusoo laabtay dalka, gaar ahaan magaalada Hargeysa wuxuu ka bilaabay dhaqdhaqaaq gobannimo-doon ah oo lagaga soo horjeedo gumaysigii Ingiriiska. Waxaa kamid ahaa ereyadii halhayska u ahaa ee bilawgiiba laga xafiday: Ayuu guullahay gargaaraayoo? Ayaa garanaaya gobanimadoo? Ayaa la gembiya gumaysiga? Wuxuu abwaanku waajib iskaga dhigay wacyi-gelinta bulshada ee dhinaca gobannimada iyo gumaysi-diidka. AAN OOYEE ALBAABKA II XIDHA Barkhadcas Haddaba sanadkii 1958kii ayaa waxaa magaalada Hargeysa soo booqday nin Ingiriis ah oo la odhan jiray “Duke of Gloucester” oo adeer u ahaa boqoraddii Ingiriiska. Ninkaas oo uu dalkiisu si wuxuushnimo ah u gumaysanayey waddamo qaaradaha Afrika iyo Aasiya ku yaal oo fara badan. Haddaba intii aanu dalkaba soo gaadhin ayaa la bilaabay u-diyaargarowga soo-dhaweyntiisa. Waxaa loo yeedhay abwaanadii wadanka ayaga oo laga codsaday in ay soo dhaweeyaan sarkaalkaa Ingiriiska ah. Dabadhilifyadii ayaa durbaannada tuntay. Dadkii aan indheergaradka ahaynina waxay iska noqdeen sida caamada lagu yaqaanno dameeri dhaan-raacday. Haddaba abwaan iyo hal-abuure Maxamed Ismaaciil Baasarce “Barkhadcas” wuxuu kamid ahaa dadkii laga codsaday inay maansooyin kusoo dhaweeyaan sarkaalka Ingiriis, laakiin isagu wuu iska diiday taas, waxanu codsigaas kaga jawaabay maansada la magac-baxday Aan Ooyee Albaabka ii Xidha oo uu ku sheegayo xumaanta gumaysiga iyo nacaybka uu u qabo gumaystaha. Wuxuu yidhi Barkhadcas: Awoowgey ninkii indhaha tiray Ninkii aabbahay adoonsaday Ninkii anigana i iibsaday Ninkii ifka igu adduun tirey Haddaan ogohoo-nan ka aarsan karayn Haddaanan Aadanoow unuunka jarayn Asaag li’i baa ishaa i baddee Ninkaa aragiisa uurkaan ka necbee Aan ooyee albaabka ii xidha Isagoo Iglan* jooga buu i diloo Ushuu soo fidshaa i iimaysoo Waa taa aramidi i oofa tirtee Haddaan ogohoonan ka aarsan karayn Haddaanan Aadanoow unuunka jarayn Asaag li’i baa ishaa i baddee Itaal darri aan la eedaadee Ninkaa araggiisa uurkaan ka necbee Aan ooyee albaabka ii xidha Arladii ka samroo aduun ma hayee Haddii la ilaashay afkaygii Haddaanan ikhtiyaar aqoontay hadlayn Haddaanan eray qudha shirkaas odhanayn Asaag li’i baa ishaa i baddee Ninkaa araggiisa uurkaan ka necbee Aan ooyee albaabka ii xidha. Wixii arrineen Ilaahay jeclayn Aayaadka Qur’aanka wada aragtoo Udgoonena yidhi, “Indhaha ka qarshee,” Asaag li’i baa ishaa i baddee Ninkaa aragiisa uurkaan ka necbee Aan ooyee albaabka ii xidha. Ugaadha ninkii dhaqee urursada Ruuxii eegayaa adduun ka baxshee Raggiinii ogaa horuu u arkee Ninkii ooridiisa geynaayoow Iimoowdaye axankaaga waynee. Bal Ogow Isticmaarku Abidkii Irriduu Marinaayo Awr Raran Irbad buu Ku Dayaa Ayaanta Horee Raggaan Arkayee U Abasaxayow* Ninowna Ha Odhan Soomaalaan Ahee Ordoo Magacana Ka iibsada. Libaaxa Annayiyo Abaarso ka ciyey Aburriin* lo’da joogta baa urisoo Ooday jabisaa intay ka dhacdoo Amsaxuu ka guraa idaylkeede Wakaa Ingiriiskii iidaayee Idina u dabaaldegoo adhiyohow Ordoo magacana ka iibsada. *Iglan: Waa gobol kamid ah dalka Ingiriiska laakiin halkan waxay ugu jirtaa isla dalkaas oo dhan. *Abasax: Waa abasaxa geela dhedig, waana marka ay haluhu u baahan yihiin awr abaahiya. Si kale haddaan u dhigno, waa hammoodka geela dhedig. *Anaya, Abaarso iyo Aburriin: Waa deegaanno aan kala fogfogayn oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Hargeysa. AFGARAN-WAAGU WAA GUMAYSIGA Abwaan Barkhadcas waxaa maalin kale soo maray gabdho ay hore isu yaqaanneen. Dadka qaarkood waxay leeyihiin gabadh keli ah ayey ahayd. Abwaanku wuxuu fadhiyey geed hoostii. Wuu xanuunsanayey oo aad ayuu raadka xanuunku uga muuqday korkiisa. Markaa gabdhihii waxay ku murmeen, “Tolow qofkani ma Maxamed baa?” Dabcan way garanayeen ee waxay cabbirayeen isbedelka ka muuqda jidhkiisa uu xanuunku dooriyey. Markaas ayuu gabdhihii ugu xog-warramay maansadan heellada ah oo uu ku muujiyey in dhibaatada haystaa aanay ahayn xanuune, ay tahay aramida iyo tiiraanyada gumaystaha. Wuxuu yidhi abwaan Barkhadcas Ilaahay ha u naxariistee: Adigaa gabadhyahay, habeen gudayee Anigoon guunyo waayin, geel dhalay Gasiinka la cuno, afkaa ma gashoo Gaajiyo cudur gaanka iima sudhnee Waxa i goday waa gumaysiga Hooyaday gacalaa afkuun garatee Sidii garanuug joogta geyi abaareed Amase geri laacay geed sare Gurucaa dheeri waa gumaysiga Sidii geesi uu tolkii gacma jaray Garawshiyo waayey oon gardarrayn Ilmadan gu’i weyday ee gobo’liyo Gama’aan diiday waa gumaysiga Waanigii gabannimo aroos ku galee Waanigii gaari helay garaaro lehee Gaasira isagaa na kala gooyee Carruur ma gargaarsadoo ma gartee Goblankaan ahay waa gumaysiga Maan gaadhin gankaad i moodaysee Gu’gaygii soddonkii labbuu ka gudbee Guudkaa i caddaaday ee i gu’iyo Gabaxdaan idhi waa gumaysiga Wax ii gooniyiyo guhaad ma qabee Somaalaa giddigeed is gaadaysoo Cadhadaan gubnahay waa gumaysiga Gambadii dumarkaa la’ii guntiyoo Gabbal baa iigu dhacay gasiirad cidloo Gabaahiiri waa gumaysiga Rag baa gacalkay na kala gooyoo Gaaliyo nacab baa u geesa ahoo Afgaran-waagu waa gumaysiga Garaadnimo iyo gobbaan u dhashoo Gibir baan ka baxshaa haddaan wax gadtoo Nin gini qaatay baa i gacan galiyoo Gartay-daan waayey waa gumaysiga Guullow adigaa gargaaro lehoo Ninkii la gumaysto u gacan-celiyee Anigoon afar gaal gabaar u ahayn Anigoo geesiyoon gaboonayn Inaan calan gaar ah guudkayga sudhiyo Lixdanka gobonnimo i gaadhsii. Geesiga Madow Cabdillaahi Suldaan Timacadde, 1961 Gabaygan waxaa tiriyey abwaankii waddaniga ahaa ee Cabdillaahi Suldaan Timacadde. Wuxuu iftiiminayaa sida quwadaha waaweyn ee reer-Galbeedku (gumaystayaashii hore) aanay u rabin guul ay helaan waddamada yaryar ee korayaa (la-gumaystayaashii hore). Waxaa loo fahmi karaa, digniin uu siinayo quruumaha curdinka ah si ay isaga ilaaliyaan shirqoollada lagu hagar-daamaynayo. Waxaa uu markhaati uga dhigtay digniintiisa, sida geesigii u kacaba boqonta loo jarayo. Tusaale wuxuu usoo qaatay dilkii Gaandi-gii reer-Hindiya, dilkii Kamaalu-Diin oo ahaa danjire Masaari ah oo Muqdisho joogi jiray waagii gumaysiga, dilkii Maxamuud Xarbigii reer-Jabuuti iyo geesigii Afrikaanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Batriis Lumuumba. Wuxuu Cabdillaahi Suldaan kala dardaarmayaa siyaasiyiintii dawladdii curdinka ahayd ee Soomaaliya, inay aaminaan oo nasteex moodaan gumaystayaashii shalay iyo xulafadooda. Haddii kale waxaa dhici doona caaqibo-xumo aan la mahadin, ayuu yidhi. Taladii Cabdillaahi Suldaan lama qaadan, waxaana lagu dhacay dabinkii uu ka digayey. Dabadeed waxaa laga dhaxlay ayaan-darradii ku habsatay umadda Soomaaliyeed intii yarayd ee xornimada heshay. Wuxuu yidhi Cabdillaahi Suldaan Timacadde: Qaramadan gadaal-kacay qarbigu, waa geddiyayaaye Gobannimada lama doonayaan, gadasho mooyaane Wiilkii garaad lagu tuhmaba way ka gurayaane Gardarriyo is-yeelyeel horaa, Gaandi* loo dilaye Kamaalu-Diinna* qaar baw gabaday, qaatay giniyaade Xarbigii* guntaday bay qunbulad, haad u geliyeene Geesiga madow uma oggola, guusha reer-Yurube Geerida Lamuumbaa* wadnuhu noo gig leeyahaye Geyigiisa goortuu qabtee, gees isugu leexshay Iga guura galabtuu yidhaa, geeddan loo xidhaye Godka waxa u qoday Haamarshool*, waa gedduu rabaye Maantaba hadday gawraceen, way gam’ahayaane Meeshuu galaba doollaarku waa, uu gembiyayaaye Ninkii dunida kala gaabiyaa, garabsanaysaane Raggan gacanta haystoow wallee, saad-dambaad gariine Qudheennani intaynaan geb odhan, yeyna kala gaadha Haddii kale se goor aan fogayn, gawda bal aan eegno. *Gaandi: Waa Mahatma Gaandi. Wuxuu ahaa garyaqaan u halgami jiray xorriyadda reer-Hindiya waagii Ingiriisku gumaysan jiray. Wuxuu aaminaa in la halgamo ayada oo aan dhiig la daadin. Hoggaamiye ruuxi ah ayuu u ahaa reer-Hindiya laakiin waxaa la dilay markii Hindiya heshay xorriyaddeeda. Waxaa dilka ku fuliyey nin xagjir ah oo Hindoos ah laakiin waxaa la rumaysan yahay in shirqool ka dameeyey dilka. *Kamaalu-Diin: Waa Kamaalu-Diin Saalax oo ahaa nin Masaari ah oo aad ugu halgamay sidii Soomaalidu uga xoroobi lahayd gumaysigii reer-Yurub. Wuxuu dalka u yimid asaga oo ahaa nin ka socda dawladda Masar laakiin muujiyey jacayl aan qiyaas lahayn oo dhinaca Soomaalida ah. Taasi werwer ayey ku abuurtay gumaysigii. Kamaalu-Diin waxaa Muqdisho lagu dilay 17 Abriil 1957. Waxaa dilka fuliyey nin Soomaali ah laakiin waxaa la rumaysan yahay in shirqool ka dambeeyey. *Xarbi: Waa Maxamuud Xarbi oo ahaa geesi Soomaaliyeed oo kasoo jeeday dhinaca Jabuuti. Waxaa si shirqool ah loo khaarajiyey isaga oo ku foogan hawlaha gobannimo-doonka. Dayaaraddii uu la socday ayaa burburtay, waxaana la yaqiinsan yahay in shirqool isaga ah loo qarxiyey diyaaradda. Geerida Maxamuud Xarbi waxay dhacday 1960kii. *Lamuumba: Waa Batriis Lumuumba oo ahaa halgamaa reer-Koongo ah. Wuxuu u halgamay in dalkiisu xorriyad ka qaato gumaystihii Biljam. Xorriyaddii kadib wuxuu noqday raysal-wasaaraha Koongo-Kinshaasa laakiin in markiiba waxaa lagu inqilaabay shirqool ay maleegeen Sii.Ay.Ee (CIA) iyo gumaysigii Biljam. 1961 ayey milateriga Biljam dileen Lumuumba isla markaana gubeen maydkiisii. Arrintaasi tiiraanyo weyn ayey ku reebtay shucuubta gumaysi la-dirirka ah. Waxaana la yaqiinsaday in aanu reer-Galbeedku rabin geesi Afrikaan ah oo dalkiisa ku maamula siyaasad ka madax-bannaan gumaystayaasha. *Haamarshool: Waa Daag Hamarshool (Dag Hammarskjold) oo ahaa nin Iswiidhish ah oo xukumayey Qaramada Midoobey (UN) min 1953 ilaa markii la khaarajiyey oo ahayd 1961. Wuxuu Timacadde qabaa inuu lug ku lahaa dilkii foosha xumaa ee Batriis Lumuumba. Nidarray Xaylow Cabdillaahi Suldaan Timacadde Gabaygan waxaa tiriyey geesigii waddaniga ahaa ee Cabdillaahi Suldaan Timacadde. Wuxuu kaga hadlayaa niman Soomaali ah oo la shaqaynayey gumaysigii Xabashida ee Xayle Salaase isla markaana si nacasnimo ah uga soo horjeeday horumar kasta oo ay umadda Soomaaliyeed xorriyad ku gaadho. Wuxuu si gaar ah u magacaabayaa nin gumayste-kalkaal ahaa oo la odhan jiray Cagoole. Cagoole wuxuu daacad u ahaa xukunkii Xabashida ee Xayle Salaase, waxanu u dadaalay sidii dhulka Soomaali Galbeed ugu hoos jiri lahaa xukunka Itoobiya. Cabdillaahi Suldaan Timacadde, wuxuu ku taamayaa in dhulka Soomaaliyeed ee ilaa Hawaas iyo ilaa Negeyle iyo ilaa Nayroobi lasoo celin doono oo aan la nasan doonin ilaa riyadaasi xaqiiqowdo. Waxaa kale oo uu nadar la gelayaa Xayle Salaase. Wuxuu leeyahay, “Naagaha midkeen lagu daraba nidarray Xayloowe.” Marka aan buuggan qorayo (2012) waxaa laga joogaa markii gabayga la tiriyey 50 sano iyo dheeraad (1960), waxaana iska cad cidda labadii qolo naagaha lagu daray iyo cidda nidarkoodii dhaboobay. Waxse dambeeya Allaa og. Wuxuu yidhi Timacadde: Naxwihiisa gabay waanigii, nimiri ku ahaaye Ma naannaabiyo ee kaygu waa, nibirraddiisiiye Nadaamkiisa anigoo yar baan, nuuradayn jiraye Bal aan nudo tixdaan Yuusufow, nuunka ka higgaadshay Nimcada kuma xamdiyo ruux haddii, naarta loo lulo’e Namruud iyo Kancaan waa kuwuu, nacay Ilaaheene Nasiib ma leh ninkii uga dudaa, gaalo naxariise Nacallaa qabsada kaadirkii, kiisa naasila e Nin nifaaqa mooyiye khalqigu, wuu ku neefsadaye Soomaalidaa naaxday baa, qaar ka naxayaane Nasaqnimo Cagoolow* Rabbaa, naaska kuu sudhaye Ogaadeenku* waa nala niyoo, nuurki wada gaadhye Nafarkiyo aday kugu hodeen noolka Xabashaade Nacabkaaga weeyaan waxaad, nugusta* haysaaye Kuwii Nebiyadii caasiyaa, naashka kuu dhigaye Naxlina kuu gal Soomaalidaad, naafi leedahaye Ninkiise dhiigga nuugaba mar buu, nudaygu qoonmaaye Naqa laaso dabadeedna waa, laydin naawiliye Naaliyadda goortaan duldhigo, tan iyo Nayroobi Nageyliyo caruusaad haddii, naafaq ku habsaamo Nasan maynno meeshiyo Hawaas, nacam Ilaahay ye Raggii nadiga kuu qaadan jiray, niibka ka adkaaye Haddii aan nadaadiga la raran, naruradaan geysto Nakh-nakhdiyo dajidu waa intaan, nowdu kuu bixine Wallee inaan nawaaxiga Shawaad lagu nagaanayne Niska dhexe habeenkaad misana, now dhe leedahaye Meeshiyo Niyuu-Yaag haddaad, noolka bixin doonto Nasaariyo Yahuud baad u noqon, nayl xun oo kale ee Naagaha midkeen lagu daraba, nidarray Xayloowe Hadday nabaddu kula naaqus tahay nooli kulanteeye. *Cagoole: Waa Cabdillaahi Faarax Cagoole oo ahaa nin Soomaali ah oo daacad u ahaa dawladda Itoobiya kuna dadaalay sidii Soomaali Galbeed ugu hoos jiri lahayd xukunka Itoobiya. Wuxuu ahaa nin aw ah oo yaraantii xer lagu daray, af-Carabiga iyo af-Amxaarigana wuu yaqaannay. Wuxuu ahaa curyaan ku socda gacmaha iyo jilbaha, sidaas ayaanu kula baxay naanaysta Cagoole. Waxaanay dadka qaar u qabeen nin amran. *Ogaadeen: Waa qolo macruuf ah oo ku aroorta qabiilka Daarood, lagana heli karo dhammaan dhulalka Soomaalidu degto laakiin ku xooggan dhulka Soomaali Galbeed iyo dhulka Soomaaliyeed ee Keenya xukunto. *Nugus: Waa af-Xabashi uu macnihiisu yahay boqor. INGIRIIS RAGGUU LAAYEY Ibraahim-Gadhle Ibraahim Sulaymaan “Ibraahim-Gadhle” wuxuu ahaa abwaan Ilaahay ku mannaystay indheergaradnimo iyo farshaxan suugaaneed oo aad u heer sarreeya. Waxaa saldhig iyo deegaan u ahaa magaalada Jabuuti. Waxaanu kamid ahaa dadkii usoo joogay gumaysigii Faransiiska ee umadda reer-Jabuuti soo silciyey. Indheergaradnimadiisa iyo farshaxannimadiisa waxaa laga dheehan karaa suugaantiisa badda ah. Bal inta aanan soo qaadan maansada gumaysi-diidka ah ee aynu buuggan ku xusi doono, ila dheeho heerka iyo martabadda uu gaadhsiisnaa suugaanta iyo samo- talisnimada. Ibraahin Gadhle waa abwaankii lahaa ereyadan waanada ah ee soo socda: Midigtaadu yey noqon, Mid tolkeed u muruq weyn, Murjinkaagu yuu noqon, Magli dila walaalkii, Magacaagu yuu noqon, Mid xumaan ka marag-kaca, Sida macawisaa qaar, Ninba maalin yuu xidhan, Hadba kii muraadle ah, Hawga dhigin maqaar-saar, Mar waxaad dhadhamisiyo, Mijin qaad ah haw dhiman, Hana talin masiibiyo, Wax makhluuqa kala dila, Maskaxdaadu yay noqon, Maqal lagula leeyahay, Yaan toban muftaax iyo, Lagu furan masaabiir, Waxaad shalayto mudatiyo, Mahadhada xusuusnoow, Halkii qorigu kaa muday, Mar labaad lugtaadiyo, Cagtu yaanay kula marin. Abwaan Ibraahin Saleebaan wuxuu soo gaadhay ayada oo ay gumaystayaashii shisheeye cabiidsanayaan bina-Aadan fara badan oo ay ku jirto umadda Soomaaliyeed. Wuxuu si gaar ah u dulsaarnaa meeshii uu joogay gumaysigii Faransiiska oo kamid ahaa kuwii ugu arxanka darnaa duul wax gumaysta. Wuxuu usoo joogay ama maqalay Soomaali badan iyo xitaa Afrikaan badan oo xasuuq loo geystay. Wuxuu hebel iyo hebel u yaqaannay culimo iyo aqoonyahanno unuunka laga jaray ama la kaxaystay oo aan dib loo arag meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. Haddana wuxuu usoo joogay ayada oo dhammaan gumaystayaashaas laga dulqaaday umaddii Soomaaliyeed, alxamdulillaah. Laakiin xorriyaddii la helay waxay noqotay mid dhicis ah maadaama taladii u gacan-gashay dad gumaystuhu beertay oo la odhan karo waxaa loo sii yara wakiishay hawshii gumaysashada. Waxay noqdeen dad aan laga filahayn in ay usoo aargudaan umaddii saxariirka la soo baday. Ayaan-darradaasi kumay koobnayn umadihii Soomaaliyeed, waxaa la qabay guud ahaan shucuubta Afrikaanka ah badankooda. Markaas ayuu abwaan Ibraahin-Gadhle tiriyey gabaygan tawaawaca ah: Allahayow adduunyada markaad, taagtay udubkeeda Ama aad abuuratay khalqiga, Aadan iyo Xaawa Maalintuu Iblayskuna kufriyey uu, diiday amarkaaga Imminkiyo ayaantaa maxaa, belo adeegeysa Imisaa ardaa fiican iyo, aqal madoobaaday Ubadkay siteen iyo maxaa, dumar agoonoobay Imisaa arwaax hoyatay oo, gaal iyo Islaan leh Axmadkii* la doortiyo maxaa, Nebiyo loo ooyey Abuubakar Siddiiq* iyo inuu, Caliba iiljiifo* Inkastoon ogsoonahay inaan, axadba waaraynin Wadka Eebe soo diro wax baa, aniga ii dheere Ifka ruuxa joogaa kol buu, ku istareexaaye Kol uun bay anfaaciga macaan, iligga saaraane Ikhtiyaar kol uun bay helaan, uumiyaa kale ee Aasiya ba waxay leeyihiin aarmi iyo xooge Annagana Orobbaa* sidii, awrta noo rarane Waagii iftiimaba kun baa, nalaga aasaaye Bal qabsoo ugaadhiyo sidii, adhiga weeyaane Eygaa ciyaayaa hadduu, dhaamo inankeenna Afrikadan Ilaahow maxaa, laga abuuraayey?* Allahayow alhuumiyo maxaad, iinta ugu yeeshay? Allahayow awood iyo maxaad, aalad ugu diidday? Ummaddaada Eebbow maxaa, loogu kala eexday? Ingiriis ragguu laayey baan, cidi illaaweyne Axmad-Guray* unuunkay jareen, ehel ha waayaane Oomaarna* waad wada ogtihiin, uubtii loo qodaye Sayidkii* addoonsiga nebcaa, aakhiro u tabiye Waa kuwii Cadhoolana* ajalay, calankan awgiiye Halyeygii Bashiir* bay dharaar, adhaxda gooyeene Maxamuud* sidii loo arjumay, aamus laga qaadye Imaam Cusmaan* baa ku maqan, ololeheeniiye Ablay bay u quudheen nin ragi, kuma ataageene Eeddii gumaystaha haddaan, in yar ka faalloodo Axaddii bishii Maaris* iyo, hore Isniintiiba Eedaanka waaberi markuu, noo addimay sheekhu Waa kuwii intay ururiyeen, edeg ka buuxsheene Waa kuwii awaaraha na tubay, aqab la’aaneede Waa kuwii uqaylkii guriyo, kii arrimin lahaaye Waa kuwii hablaha ugub diliyo, Aaminiyo Luule Waa kuwii Amaar iyo dugaag, oomman noo qubaye Immikana kuwaa talinayay, eebada u tumiye Isticmaarku ooduu dhigiyo, odaxdii waa taalle Ma ilbixin kuwii aan lahaa, way ka aargudane Iglan* baaba loo dhoofiyaa, weli addoontiiye Iib baa Amriik* loogu diray, odayo waaweyne Almaaniyana* kolay ku tahay, nala asqaysiiye Kol hadday abiid ii yihiin, oohintiyo ciilku Uurkii islaantii maxaan, uga abuurmaayay? Oofta iyo hooyaday maxay, adhaxda ii saartay? Allahayow awoowiyo muxuu, aabbe ii dhalayay?* *Axmed: Nebi Muxammed – nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Magacyadii Nebiga waxaa kamid ahaa Axmed, Muxammed, Maaxi, Xaashir iyo qaar kale. *Abuubakar Siddiiq: Cabdillaahi ibnu Abii Quxaafa. Waa Nebiga saaxiibkiisii koowaad ee xagga dacwada Islaamka. Waana khaliifkii koowaad ee Nebiga dabadii hoggaamiyey umadda Islaamka. *Cali: Waa Sayid Cali binu Abii Daalib. Waa carruurnimo ugu hor rumeeyey Nebiga, waa Nebiga ina-adeerkii rumaad, waa saygii Faadumo Rasuul iyo khaliifkii afraad ee Muslimiinta Nebiga dabadii. *Orobba: Yurub *Beydadkan waxa la moodaa inuu abwaanku eedaynayo Eebbe (xumaan ka hufnaaye). Ilaahay waxan uga baryeynaa abwaanka inuu ka cafiyo wixii gef ah ee ka dhacay. Caqiidadeenu waa in aan Alle lala xisaabtami karin laakiin uu asagu xisaabinayo addoomadiisa. Dhinaca kale dadka wuxuu Alle abuuray ayagoo siman laakiin waxaa kala reeba camalkooda aakhiro iyo adduunba. Markaa Afrika ayadaa seexatay, dabadeedna waxaa helay cadow aan arxan lahayn oo bakhtigoodana ka kici waayey. *Axmed-Gurey: Wuxuu ahaa halyey hoggaamin jiray bulshada Geeska Afrika ee Muslinka ah. Wuxuu ahaa sheekh caalin ah. *Oomaar: Waa Faarax Oomaar Ileeye, halgamaa si nabadgelyo ah ugula diriray gumaysigii Ingiriiska, isaga oo af iyo aqoon u adeegsaday dagaalkiisa. Wuxuu u qoray dawladda Ingiriiska talagaraaf ay ku qornayd saddexdan erey “Hayaay, hayaay, hayaay.” Dalka ayaa dhawr jeer laga masaafuriyey, aakhirkiina wuxuu dhintay isaga oo masaafur ku maqan, waxaa ugu dambeeyey hadal isaga oo leh, “Dalkaygu ka yar wax la kala qaybiyo, dadkayguna ka tabar yar wax la rarto.” Fiiri qormada 16aad ee Dktr. Saadiq Enow ee Dhalashadii iyo Dhabarjabkii Soomaali Weyn. *Sayid: Waa Sayid Maxamed Cabdille Xasan, hoggaamiyihii Daraawiishtii gumaysi la-dirirka ahayd. Wuxuu ahaa wadaad ay ku fogaatay caqiiqada Islaamku isla markaana ku xeeldheeraa curinta maansooyinka af-Soomaaliga iyo shicirka Carabiga. *Cadhoole: Waa Cabdiraxmaan Cadhoole oo kamid ahaa halgamayaashii aqoonyahanka ahaa ee loo unuun-jaray gobannimo-doonka, gaar ahaan dhinaca Jabuuti. Si naxariis darro ah oo cadaawad miidhan ah ayey gumaysiga Faransiisku u dileen Cabdiraxmaan Cadhoole. Arrintaasi waxay ku reebtay shacabka reer-Jabuuti uur-ku-taallo iyo halgan adag oo ay usii galaan xorriyaddooda. Fiiri qormada Cabdalla Xaaji ee Halgankii Jabuuti. *Bashiir: Waa Sheekh Bashiir, wadaad iimaanku qanjaha joogay oo ka dhiidhiyey gumaysigii Ingiriiska. Waxaa lagu deldelay gobolka Togdheer. *Maxamuud: Waa halyeygii waynaa ee geesiga ahaa ee Soomaaliyeed. Waa Maxamuud Xarbi oo ahaa geesi gobannimo u-dirir ah oo ay shirqool ku dileen Faransiisku. *Imaam Cismaan: Waa Sheekh Cismaan Wacays oo kamid ahaa culimada reer-Jabuuti ee kasoo horjeestay gumaysigii Faransiiska. Wuxuu ahaa imaamka masaajidka Cabdilqaadir ee Xaafadda Afaraad ee magaalada Jabuuti. 6dii bishii Juun 1966 ayey gumaysigu si shirqool ah u dileen, Alle ha u naxariisto. *Axaddii bishii Maaris: Waa 19kii Maaris 1967 oo laga qaaday afti dadka reer-Jabuuti oo si weyn u diidanaa gumaysiga. Laakiin Faransiiska ayaa marin-habaabiyey aftidii oo ku sheegay in shicibkii reer-Jabuuti doorteen in gumaysigu sii joogo. Dhacdadaas waxaa laga tiriyey maansooyin badan oo ilmadu kaa qubanayso. *Iglan: Waa dal kamid ah dalweynaha Ingiriiska laakiin waxaa looga jeedaa waddanka Ingiriiska oo dhan. *Amriik: Maraykan. *Almaaniya: Waa Jarmalka. *Baydadkani waa cabasho. Ma habboona in qaddar dhacay laga cawdo ama laga murugoodo. Waxaynu Alle uga baryeynaa abwaanka inuu dembigiisa dhaafo oo u naxariisto. GALANGAL Maxamed Ibraahin Warsame “Hadraawi” Gabayga soo socda ee galangal waxaa uu Hadraawi tiriyey 1970needayadii, wakhtigaas oo uu socday dagaalkii xaqdarrada ahaa ee lagu qaaday reer Fiitnaam. Madasha uu ka tiriyey waxay ahayd mid lagu soo dhaweynayey wefti ka socday jabhaddii xaq u dirirka ahayd ee reer-Fiitnaam ee la dagaallamaysay dulmiga Maraykanka. Waftigaasi waxay marti u ahaayeen dawladdii Soomaaliya oo hiil la garabtaagnayd dulmanayaashii reer-Fiitnaam. Si aad u fahanto nuxurka gabayga aan kuu soo koobo taariikhda dagaalka Fiitnaam. Dagaalku wuxuu socday min 1955 ilaa 1975. Wakhtigaas ka hor markii gumaysigii Faransiiska laga saaray dhulkii uu gumaysanayey ee loo yaqaannay Indo-Shiina oo ah Fiitnaam-ta maanta, ayaa wuxuu dhaxal ahaan uga tegay kala qaybsanaanta Fiitnaam. Dabadeed waxaa jabkii Faransiiska kadib faraha lasoo galay dalka Maraykanka oo taageero siiyey qaybtii koonfureed ee Fiitnaam oo aan haysan taageerada shacabka reer-Fiitnaam. Shacabkii reer-Fiitnaam oo uu saldhig u yahay waqooyiga Fiitnaam, ayaa arrinkaas ka dhiidhiyey. Dagaal socday labaatan sano kadib waxay guushii raacday shacabkii gobannimo u-dirirka ahaa ee reer-Fiitnaam, waxaana si foolxun u jabay Maraykan iyo xulafadiisii faraha badnayd ee xaaraanta isku bahaystay. Bal aan tirakoob yar kaa xasuusiyo musiibadii ka dhalatay dagaalkaas labada dhinacba: Ciidadamadii labada dhinac ee dagaallamayey (1968) Maraykanka iyo xulafadiisa 536100 askari oo Maraykan ah 850000 askari oo koonfurta Fiitnaam ah 50000 askari oo Koonfurta Kuuriya ah 7672 askari oo Ostaraaliya ah 10450 askari oo Filibbiin iyo Taylaan ah 552 askari oo Niyuu Siilaan ah Wadarta askarta xulafadu waxay ahayd 1830000 (hal milyan siddeed boqol iyo soddon kun oo askari) Askarta shacabka reer-Fiitnaam ee gumaysi-diidka ah 287465 askari oo reer Fiitnaam ah (laba boqol siddeetan iyo toddoba kun iyo afar boqol iyo shan iyo lixdan askari) Khasaarihii ka dhashay dagaalkaas labada dhinacba Dhinaca Maraykanka iyo xulafadiisa Mareykan: dhimasho 58220 askari, dhaawac 303635 Koonfur Fiitnaam: dhimasho 220357, dhaawac 1170000 Koonfur Kuuriya: dhimasho 5099, dhaawac 10962 Ostaraaliya: dhimasho 521, dhaawac 3000 Niyuu Siilaan: dhimasho 37, dhaawac 187 Taylaan: dhimasho 1351 Boqortooyada Laawos: dhimasho 30000 Wadarta dhimashada askarta xulafadu waa 315384 askari Khasaaraha gobannimo-doonka reer-Fiitnaamka 1176000 (hal milyan, boqol iyo lix iyo todobaatan kun oo qof). Tirooyinka qaarkood waxay sheegayaan ilaa shan milyan oo qof in ay ku naf-waayeen xasuuqii loo geystay reer-Fiitnaam. Toddoba milyan oo bam ayaa lagu bam-gareeyey reer-Fiitnaam, taas oo ku laba jibbaarmaysay wixii bambo la tuuray dagaalkii labaad ee adduunka oo dhan. Waxaa dib ka dhashay 500000 (shan boqol oo kun) oo carruur laxaadkoodu kala dhantaalan yahay ah suntii hubka dartii. Xad-gudubka intaas le’eg ee laga galay reer-Fiitnaam, kama aanu dhigin kuwo u cabiidsama gumaysigii laga rabay. Waa ay dagaallameen, adduunka taagta daran oo dhamina wuu la ooyey. Haddaba gabaygani wuxuu ahaa mid lagu dhiirrigelinayo dagaalyahannadii reer-Fiitnaam ee diiday keenadii gumaystaha. Weli ayada oo uu dagaalkii Socdo ayey Soomaaliya yimaaddeen wefti ka socday jabhaddii xarbiyeysay. Markaas ayuu Hadraawi gabaygan qiirada iyo dhiirrigelinta ah u akhriyey. Gabaygu reer-Fiitnaam uma gaar aha ee wuxu quseeyaa cid kasta oo loo soo qaato keeno gumaysi. Wuxuu yidhi Maxamed Ibraahin Warsame Hadraawi: Galbis dhacay dadweynahan gabradey, gaafka igu meersan Qurux ganac leh gole dheehaniyo, bilicdan gaasheesay Gargarraanta nuurkiyo shacniga, la isku googgooyey Shirgobeedka guurtida fadhida, garangar waaheelan Marti gacala mudan laysu guray, gulufka heensaysan Gololada mashxaradaysa iyo, sacabka guugaabo Galladda iyo raynraynta iyo, gooha dami waayey Iyadoo gorfayntiyo la taxay, doodda gudaheenna Guddi werisayaa iyo nin kale, gooni hadalyaaba Qofba kaalin goorteeda buu, gaar u leeyahaye Anna tayda ii go’an haddaan, galo abbaarteeda Ma gunaanadaayee haddaan, jaro garraarkeeda Gayaaxaa haddii aan ka furo, madida ii gaaxsan Godolqaad hadday labada law, dib u yar gaalgaasho Gaawaha hadday buuxisoo, waliba gaash daato Ganuunkeeda xoorka le haddaan, madalka gaadhsiiyo Anigiyo garaadkay haddaan, idin guddoonsiiyo Geestayda waa iga dhanyahay, galangalkaygiiye Gadaashay ninkii odhanayow, gacanta ii haadi Afartaasi waa gogaldhigiyo, maanso gedeheede Godkaan degay warkaas guud haddaan, kor uga sii guuro Xaajada gondaha laaban iyo, godanka hooseeya Gunta iyo salkeediyo haddaan, saro gunaadkeeda Gawdiyo ujeeddada ladhkiyo, caawa iyo goobtan Nimanyahow gantaalaha subkaye, gamaska dhiigeeyay Nimanyahow galkiyo seefta yidhi, gees u kala leexda Nimanyahow sidii awr gurgura, caynku gubi waayey Nimanyahow garbaha buuxsadee, raray gardaadkooda Nimanyahow gadoodiga bartiyo, galow la soojeedka Nimanyahow habeenkii gudee, guura-bahaleeyay Nimanyahow gadiidkii socdee, meel hadh gali waayey Nimanyahow sariir lagu gam’iyo, gogal ka dheeraaday Nimanyahow guryaha diiday iyo, gaari lala seexdo Nimanyahow gasiinkii ka tagey, gaws wax lagu qaato Gudcur dama cirkoo gibil xidhoo, dhibic is gaadhsiiyey Nimanyahow gudgude soo curtiyo, guuxu kari waayey Gabadannada nimanyow dugsadey, goorad laga hoyday Nimanyahow gabboodkiyo dugsiga, gelinna hayn waayey Gudguduudka waagiyo saq-dhaxe, maalin kala guurtay Mugdi gaba’ cadceed gaasa-baxa, waaga galacdiisa Nimanyahow gumaystaha ku jaray, gaadmo iyo weerar Miinada gumaadkiyo xeryaha, gaadhka lagu meershay Nimanyahow sidii aarka guda, guudka kaga booday Nimanyahow guddoonsadey inaan, godobtu duugoobin Nimanyahow ma guurtada xuska le, geliyey taariikhda Haddaydaan adduunyada gilgilin, xil i ma guuleene Laabtayda kama soo go’een, tix iyo geeraar e Gocashada dareenkiyo murtida, amase guurowga Waxad gaysateen buu ku yimi, gabayga joogaaye Taariikhda guunka ah haddaan, gelin wax weydiiyey Allaylahe Galbeed wuu ku jabay, goballadiinaase Indoo-Jayna geeraw-ga qoran, guuldarriyo hooge Biyanfuu gulcubihii dhiciyo, galalki dhiigoobay Faransiiska wiishkii la go’ay, saw la garan maayo! Maantana geddii baa dhacdiyo, tii gafkii hore e Gal dad liqa ul baa lagu dayaa, lagu gurraacaaye Garka xadhigga loo daadshey iyo, gedefka loo saaray Gaaggaabnidiiniyo malaa, gibil basaaskiinna Is gamaarintiinnii miyuu, gorodda soo dhiibtay! Iyagays gunaanada intay, qawl is geliyaane Garannuugta laacii hodaa, goodir tiigsadaye Gashigii maqnaa buu is yidhi, gooshkan soo celiye Baariis dabkii lagu gubaa, Waashintoon galaye Geyigiinna oo idil illaa, gooddi iyo gooddi Gargoor baa la moodaa timaa, ciidda guud-qubane Gallaydhyeys waaraabiina xoor, gorofki caydheede Rag baruurtu goobtiyo lagiyo, goolalbaw qalane Gudur iyo badhaadhiyo mudiyo, goonji buu cunaye Intaad gawracdeen iyo intii, goobo lagu laayey Gorgor iyo intii baylahnimo, haad ku gabasleeyey Garba-duub intaa ugu xidheen, galalka liileysan Way galabsadeen ciilka ay, golongol tiiceene Goldalooladay jecelyihiin, ciday galaaftaane Gelin qudha ma daayaan ninkay, gaatir ku arkaane Gacma hoorsi kaagama tagaan, kumana guuraane Geesaa bay yeeshaan haddaan, waranku giirrayne Dhegahay gufeystaan haddaan, geesiyaal heline Garta ay dhagaystaanba waa, gumuc rasaaseedel Gujaduu ku maalaa ninkii, geda-yaqaanaaye Gudin iyo warmuu kaga furtaa, gaadhi shaaximane Gurracnaanta iyo maagga iyo, laba-gar-daymoodka Gaffuurtaagga iyo tookha iyo, higilka gawdiidka Gabgabtiyo is-waalkiyo saskiyo, gooddigiyo faanka Galoof-ololka wey leeyihiin, qabiyo guulguule Dagaal laysu soo galay haddii, gaylanku is-dhaafo Galaayuus qaboonada horray, gabarrucleeyaane Hadhow bay sidii guunyo nugul, gebi-dhacleeyaane Marka runi-runteed gaydo way, gamashi dhiiqaane Gagsi ma le haddii loo cuskado, tabiyo gaalleefe Haddii laysu sii giijo way, galangalcoobaane Gadaal bay u laabtaan haddii, good ku soo baxa e Waligoodba guul kalama tagin, meel garaad jiro e Gubniyada la soo daadsheyee, gaatin caranaaya Gurmad raabaraabiyo coliyo, guuto iyo guuto Wixii gaasas soo degay wixii, geesh is-daba joogey Ee tirada ay gaadhayaan, ruuxna garanwaayay Laf galluuban mooyee haddaan, goosan laga haynin Maraakiibta goonyaha baddiyo, gaafka hoganaysa Diyaaraadka gawdaa hayiyo, galacda baaruudda Dabbaabadaha goobyaalayee, gurada loo buuxshey Garangarinta Naabaalka iyo, gabaxda Riigaanka Gaaraabidhaankiyo dabkiyo, gugaca yeedhaaya Galayaxa is-dhaafiyo higtiyo, guuxa iyo reenka Gudban iyo waxay tuurayeen, goosatada reebban Waxay gaaxsadeen iyo waxay, godal ku keeneenba Godanadda Kamboodiya taniyo, Laa’us gudaheeda Fiidnaam galkeediyo intii, godanka Saygoona Indoo-Jayna gees iyo ka gees, guudka iyoo hoosta Hub wixii galaabaxay haddaa, meelna lagu gaadhin Ninkiinnii gurguurtiyo intii, naafo gabargaashey Ninkii gurungurcoodkuu dhaliyo, gacaladiis waayey Nin goblamay nimaan gaban u hadhin, gaar nin keligiisa Gallad qubatay xooliyo dadiyo, garangar duugowday Gocoshiyo xanuun ma leh wixii, guud ahaan lumaye Gobanimada waa loo dhintaa, gooriyo ayaane Ummad gadata mooyee nin kale, waa ka garannuuge Ma gabloosho beertii xabiyo, dhiig ku goraraaye Damalkii la gooyaba midbaa, soo gadaal baxa e Guri laga baroortaba aroos, gaafan baa xiga e Haddaan loo garraadayninoo, waayyo lagu guulin Way gaaggaxdaa talada aad, gola-ka-fuushaaye Garab-qaadka faylkiyo dhismaha, oodda guriddeeda Gudintiyo hangoolkiyo habkiyo, gees-u-wada-jeedka Gadhwadeenka xeerbeegtidiyo, gaanka wadartiinna Gabadhiyo marwada heeganta’a, ee gambada xooray Gashaantida maryaha faydatee, gayfan diriraysa Gaashaan dhiggiiniyo qorshaha, amma go’aankiinna Guddoonkiinna hoosiyo illaa, guniyo-baarkiina Galdalloolo kama mutiqatiyo, gobor la sheegaaye Xaajadu gun bay leedihiyo, xeedho sii godan e Farriin laysu geeyiyo ka culus, guubis iyo baaqe Bulshadii gadooddaa midbay, dhiilla gelisaaye Markay gibisha xoortaa ta kale, dabarka goysaaye Gobolkii xoroobaa mid buu, gama’ ka toos-shaaye Jidkaasaa go’doonkii maraa, geeddi mariyaaye Gabbashada intii diiddanee, gaylan diriraysa Galladiinu inay nuur u tahay, galiya maankiinna Waxba arartu yey ila gudbine, waxan ku soo gooyey Gaar kuma tihiin hawsha iyo, goonidiin qudhahe Gar-naqsiga badheedhkiyo runtiyo, godolka maahmaahda Golaa baanistiisiyo intii, geed inagu raacda Gumaystaha intii diiddan baa, gacal wadaagtaane Gammaan baynu wada saarannahay, gu’ iyo jiilaale Nolosha iyo geerida dirkaba, waw gudboonahaye Dhul guduudan geediyo ugbaad, ubax ku guud yaala Xareed galac le galal buuxa iyo, webiyo guurreeya Ido gorod madow iyo fardiyo, lo’ iyo geel foofa Aar gooha gooliyo shabeel, haramcad guuxaaya Goobyaalka deerada mankiyo, gurata maanjeeta Geri jeenya dheeriyo biciid, goray-haldhaa qooqay Wiyil gees leh farow gaadda-weyn, goodirkiyo cawsha Maroodiga Ganaanee mirtee, gacanka laadlaadsha Shimbiraa galooliyo maraa, buul ka wada goostay Umad goba gabraartana u daran, gebi ahaantiisa Oo waxad gashaaniyo ogsoon, guurtinamadiina Gacmo furan salaam gaara iyo, gogal idiin taalla Iyo guusha oo dhaw haddaan, goorna laga seexan Galabtaas ninkii jooga iyo, guri-yagleelkeeda. GABADH MADOW Maxamed Ibraahin Warsame “Hadraawi” Maansadan la magac-baxday gabadh madow uma baahna in la fasiro. Waxay xambaarsan tahay guud ahaan nuxurkii ku jiray suugaantii aan xusay. Waxay kamid tahay sababaha aan abwaan Hadraawi ugu dhex daray halgamayaal beri hore noolaa. Maxaa yeelay buugga waxaan u qorsheeyey suugaantii la tiriyey xilligii gumaystaha. Waxaan u arkaa nin jaad-gooni ah oo kasoo hadhay dadkii hore. Wuxuu yidhi: Goonyahaygu waa dhagar guudkaygu waa xeel garayskaygu waa seef guntigaygu waa dil gudahaygu waa yool Weligay gu’ iyo dayr guul oomman baan ahay hantidayda gawriyo gabayooxna lagu beer dayaxay u gudubtaa anigana gelgelintiyo garab rarato kama baxo gadh wadeennadayduna giddi inan-la-yaal iyo guur-doonno weeyaan geyaankoodu waa damac utintayda lama gudo gashigayga lama bedo galladayda lama karo dibnahaa ka gaabsada guubaabadayduna kama foga guraa-baas Guuguule yeedhii. Badi waan gadoodaa Cidda aan galaaftaa guurtidayda weeyaan anigays gunaanada hadba waxan ku giirtaa guuleedka ii kaca geeddigaygu sahan ma leh geenyo hadaftey weeyaan goob-yaalka milicsiga gabar-gaalka lahashada gacan haadis bay dilay iyo laba gar-daymood gurrantayda bidixdiyo garabkayga midig baan midba gelin u jeestaa ka cabsaday god naareed jannadana ma geli karo gooddigooda ku anbaday duniduna gabaabsiday. Tiradaa gedmaysoo i galaa baxaysee maxaa goolal igu maqan? dheeshan laygu goobtee gefka lagu heshiis yahay mee gar-sooreheedii? Geeddu xeer ma leedahay? Mise waa lug iyo gacan labadaba ku garangari. Goohu yuu kasoo baxay guurowga yaa wadey, maxaa keenay gabayada? Inaan gabadh madow ahay cadrad lagu gabboodfalay malaa waad i garateen? Sheeko gaaban baa tidhi: “Nin ay gaajo haysaa guri yimi duleedkii soddoh garasho dheer uu gabadheeda qabay baa dhito godollo sheellayd ugu geysey meeshii… Isaguna guddoon yidhi, laysu guud mar toyashada caanaha gadhoodhaa inay guura-guuraha weelka gaararkiisiyo gunta badi ku ururaan waa ged lagu yaqaannee, godankii isugu tage… Isaguna ka geyn waa inuu dhiilka gororsado gacantana ma dari karo. Isagoo xil-gubashada u daruuray gaashaan Isma gabe wuxu yidhi: “Markii ay na gelayeen, waa nala gilgilayoo inta nala gun-dhebey baa afka nalaku gaacsaday…” wadnihiisu galow ma leh ku gadaangad ceebtii libintana ku geeraar xeeshiise lagu garay murti guun ah laga reeb. Jiiftada gar-dhaladka ah waxan uga gol leeyahay Allahayow gurracanaa marti goor xun socotood gobannimo ku soortoo kugu tidhi gun baad tahay! Markii aan garaaddaha taariikhda kala guray illaa gogol-dhiggiinnii galabtaad is-wacateen taladana in lay galo Baarliin ku goyseen Ilaa gooshkan maanta ah hadimada i gaadhiyo waxaad geysateen baan gocashada xasuustee maxaan reer Galbeedow godob kaa tirsanayaa? Mise gabawar mooyee tolow maba garowdaan! Maxaa gaasas duuliyo guutooyin xoogliyo gurmad leedda-fuuliyo guluf weerar tooxdiyo dabley gaatan socotiyo geba-geba i saarteen? Maxaan goor la seexdiyo habeenkoo gabbala-ridey laba gelin is-raaceen gaaf-meerka socotada iyo guura-bahallaha geesaaska fiintiyo galow foodhidiisiyo galayaxa rasaastiyo col gurguuranaayiyo gellimaad ku sara kacay. Maxaad gaade hoosiyo gurrac iyo shirqool. iyo tabo igu gantoobteen? Maxaad garan-gartaydiyo guryahayga bi’iseen Gacal iyo tol wada yaal gobol gobol u ooddeen laba aan is-gooyeen kala goonni yeesheen Maxaa laba gudboonayd midna garabka siiseen ka labaad u guusheen isku go’a tidhaahdeen Maxaa wiilal gaammurey intaad ugu guduuddeen ha galgalan tidhaahdeen Maxaa Gaanni ciidmiyo hanad aan gardaadshoon ku goblamay birayseen golxobkiinnu ku afuray Maxaa geesi aan dhalay inta gowrac mariseen gorgor baahan siiseen Maxaa inan gashaantiya gayaxaha ka siibteen milgadeeda gawsheen ka xil baxay gayaankeed Maxaad gaari weer xidhan godol-qaad ku daydeen Maxaa guul darraystiyo godadliyo hinaasiyo Gocor igu habayseen Giiba* sow nin ma ahayn? Geeskayga bari yimi Maxaad gacan ku dhiigliyo gibil kala tabooriyo garma-qaate dhegaliyo garac igu abuurteen? Maxaad good mariidliyo gungumiyo abeesiyo goodaaddo jidhifliyo garangoorri socotiyo inta bahal gurguurtiyo belo igaga guurteen. Maxaa gegi dabayliyo gocondhaley cagaagliyo galoofiyo candhooliyo geyi lama degaaniyo goonbaar habaasliyo guban lagu asqoobiyo gaajada rugteediyo gabno igu tilmaanteen? Goobtii harraadkiyo gurigii cadceeddiyo geedkii saboolkiyo gudcur maararrowliyo yaa go’doonka iga dhigay? adduunyada geddaas faray? gaasiray maxaan ahay? Maxaa gocayadiinniyo inta gaawihiinniyo gorofiga milaasheen gudhan iigu yeedheen Aaway guuyadaydii geeliyo lo’daydii faraskiyo gammaankii goolashaydi soocnaa? Aaway gaaxsantaydii dahabkii guduudnaa macdantii goshaydiyo gebiyada ku duugnayd? Warshaddiinna guuxdaa midhahay gadaysiyo miidday guntaysiyo ganacsiga abeerka ah xaggee looga soo guray? Guushkay tufaysiyo dheecaanka gabaxliyo xinjiraha galshaystiyo dhiigga gobo leh yayska leh? Immisaa gabaarrey iyo garab-cas igu koray? Maxaa gaatirtaydiyo galdaloolladaydiyo sida lay gabraartiyo garka laygu laylyiyo gedda lay salaaxiyo googgaa ku sabiddiyo gobortayda barateen? Dadku geed adaygiyo gudintay kol iyo laba lafa-geri ku dhuuxaan waxba kuma garaacdee miyaan tiinnu gaagixin? Maxaan geystay oo dhimay? Maxaan galabsadee falay? anigoo la gamashiyey gondahayga seetadu waxay haar ku gedeftiyo Gurgurkii i saarraa boqol gu’iyo taartaar anigoo gun iyo baar korku wada gunaad yahay anigoo la golongolay sida caynku ii gubay gubuxsiga tallaabada garba-beelay dhowr jeer goob-joogna ka ahaa galab noolba waxa dhacay anoo uur-guluuluca la gommoday dhibtaadii adoo gacan togaalaha gardarriyo is-yeel-yeel intaasoo gef muuqdiyo guul darrooyin igu falay maxaad weli guhaaddiyo gaadhka iiga haysaan? Maxaa gumuca boodiyo gaara-bidhaantiyo hubka iigu gibisheen? Maxaad saymo gadataa dab gamaaray hurisaa Maxaad gawsahaagiyo miciyada golxaystiyo ciddi wada garaara ah shaadh iigu gelisaa Maxaad geda-gedaysaa hadba geed is-marisaa Ummad geylameysoo gaarkooda taladii inta ay gorfeeyeen raba inay geyoodaan kuwa jira gadaashana gaadiid u celiyaan intaan gaasha-weyntiyo cawa-darantu soo gelin maxaa geeddigoodii gujis lama filaaniyo gal dad-liqa ku noqoteen? Hadba ruuxa goolmoon raba inad gunnaysaan ama guufaf timiriyo galley loogu sama-falo maxaa geeridiisiyo waran iyo gantaal iyo gaalleefu siisaan? U gurbaynta noloshiyo gacan-siinta nabaddiyo gudashada sidii roon maxaa kaa gabaanadey? Afartaas god madaleed gola-joog ku naanays Gaarriyow ka marag noqo ila gudubtay sheekadu geba gebana doontee bal aan soo gunaanado Ninka loo gol leeyahay isagaa is-garan kara sida goosan Weer belay igu gaabi tuurtuur igu gado sir iyo caad halkaad gaadho taagtaa Aniguna il-galaclaha is-gamaarintaydiyo gadh-salaaxa maahdiyo gama’aan hurdo lahayn goroddaan lalminayaa gabbashiyo ma aha quus gar-naqsaan ku jeedaa talaan gawda ku hayaa Inkastaad gamuurteen geedka aan ka beerrahay ma qallalin guntaydii ganto xidid leh baan ahay dab baan soo gadaal-celin Gebi-dhaca i haystiyo gaalgaalka dheelliga ku guddoonsan maayee waxaan goobayaa raad jidkii guusha aadmiga gelbiskiyo mashxaradaha gafi maayo hawlaan guryo-samo ku tegi karo goobannimo ku hanan karo. Guntashada xasuusaha gudashada habboonkay gabay gabaygan ciil-tira u ged-baxa falaadkay waxaan geysto magac-dheba Aan lahaanno goorteed.
*Giib: Waa Alen Giib (Allen Gibb) oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii Ingiriis ee gumaysan jiray Soomaalilaan. Wuxuu ahaa nin dhibaatooyin badan gaadhsiiyey shacabkii Soomaaliyeed. Laakiin aakhirkii waxaa dilay geeljire Soomaaliyeed oo ka dhiidhiyey cashuur Ingiriisku kusoo rogay geelashooda. YABOOHIN HALYEY IYO HIMILOOYIN FOG Waxaan kusoo gabagabeeyey xaashida tan ka horraysa, ururintii suugaantii laga tiriyey gobannimo-doonkii Soomaalida iyo suugaan dhawr ah oo xidhiidh wanaagsan taas la leh. Ujeeddadu waxay ahayd in aan akhristaha isugu xidho taariikhdaas dhow, ta maanta lagu jiro iyo timaadada mustaqbalka. Halgankii loo galay xorriyadda marna laguma gaadhin himiladii la rabay. Sidaas darteed waxaa la odhan karaa wuu dhicisoobay halgankaasi. Laakiin intii dhicisku sii noolaa rajo ayaa la qabay bal in wax uun is bedelaan oo dhiciskani iska koro laakiin kol haddii uu bakhtiyey waxaa loo baahan yahay halgameyaal cusub oo kuwa buugga ku xusan bedeli kara, isla markaana aanay natiijada halgankoodu dhicisoobin. Waxaa loo baahan yahay halgan dheer, halgankaasi ilaa uu xaqiijiyo toban hadaf waa mid qabyo ah. Tobanka hadaf ee loo baahan yahay u-hawlgalkooda waa: 1. Waxbarasho: Waa in lagu dadaalo in dadka wax la baro oo la kobciyo aqoontooda iyo wacyigooda. Lama gumaysan karo dad aqoon leh. Aqoonta loo baahan yahay waa mid maaddi ah iyo mid diini ah labadaba. “Qof muumin ah god laba mar lagama wada qaniino,” ayuu xadiis leeyahay. Waxbarashadu waxay noqon kartaa mid nadaamsan iyo mid dadban labadaba. Waa in manhajka waxbarasho iyo muqarrarada tacliineedba lagu saleeyo duruufta umadda iyo dalka. Dad dhaqan kale wax lagu baray sidee ayey horumar ugu samayn karaan kooda? Waxaan gacanta ku hayaa buug ciwaankiisu yahay Toban Hadaf Gadaashood. Waxaan ku muujin rabaa fikradda ah in guusha iyo barwaaqoobidda Soomaalida la helayo haddii la xaqiijiyo tobankaas hadaf. Alle ha ii sahlo soo-saaristiisa.
Isku fillaansho dhaqaale: Waa in wax-soo-saarka dhulka, beeraha, xoolaha nool, badaha iyo warshadahaba la tacab-geliyo si la isugu fillaado, gaar ahaan dhinaca quutal-daruuriga.
Madax-bannaani dhaqan: Waa in horumar kasta lagu saleeyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka. Lama arag umad horumartay ayada oo ay is-diidan yihiin dhaqankooda iyo horumarka ay rabaan. Looma baahna in dhaqan lasoo ergisto ee waxaa loo baahan yahay in aqoon lasoo guursado.
Madax-bannaani siyaasadeed: Waa in aayo-ka-talinta umadda Soomaaliyeed aan loo dabo fadhiisan shisheeye, cadaawena iskaba daa hadalkiisa.
Xasillooni guud iyo madax-bannaani nabadgelyo: Waa in la helo ciidan ummadeed oo tababarkiisa, qalabayntiisa iyo dhaqaalihiisuba ka madax-bannaan yihiin farogelin shisheeye. Waa in nabad-sugidda gudaha iyo debedduba noqdaan kuwo madax-bannaan oo aanay shuqul ku lahayn quwado shisheeye. Waa in la higsado heer qofku dareemo xasillooni.
Madax-bannaani distoor: Waa in xeerarka iyo sharciyada umaddu yeelanaysaa noqdaan kuwo aan laga soo waaridin meelo kale ee si buuxda looga qaato shareecada Islaamka isla markaana la waafajiyo duruufaha iyo dhaqanka umadda iyo casriga la marayo. Sidoo kale waa in sharciga iyo xeerku si siman uga sarreeyo dadweynaha.
Ka-xoroobidda iimaan-la’aanta ama musuqmaasuqa: Dadka Soomaaliyeed ee casrigan nool waxaa lagu ibtileeyey hunguri weyni, hunguri xumaan iyo iimaan-la’aan ilaa heer ay jid walba u mari karaan, dheef yar darteed. Haddii mushkiladdaa dawo loo helo goldaloolooyin badan ayaa awdmi doona.
Ka-xoroobidda qabiilka: Si qabyaaladda looga dawoobo waa in marka hore nadaamka qabiilka laga guuro. Inta ay Soomaalidu qabaa’il tahay, qabyaaladdu waa Ina-Daanweyne!
Ka-xoroobidda qaadka: Waa in maandooriyaha qaadka laga xoroobo ilaa la helayo Soomaali aan idilkeedba qayilin, qaadkuna ka caaggan yahay dhulalkooda, ganacsi ahaan iyo beerisba.
Midnimo dhinac walba ah: Waa in natiijada halganku noqdo midnimo buuxda oo shisheeyaha laga midaysan yahay loona midaysan yahay. Wakhtigan xaadirka ah midnimo siyaasadeed iyo mid dawladnimo lagama dhigan karo yool dhow. Laakiin waa in laga shaqeeyo midnimo dhaqan iyo madaxbannaanida qof kasta, koox kasta iyo deegaan kasta oo Soomaaliyeed xitaa iyagu yaanay nadaam mideeya wada lahaane.
QAYBSHEYAAL IYO MIDEEYEYAAL Sida ka muuqata hordhaca yar ee bogagga kore ku xusan, umadda Soomaaliyeed waxay leedahay meelo ama ilo quwadeed oo haddii ay ka cabto ay xoogaysan karto iskana caabbin karto cadaawe kasta. Sidoo kale waxaa jira meelo ay ka nugushahay oo laga wareemi karo ama laga burburin karo. Markaa ciddii rabta in la alkumo ummad Soomaaliyeed oo sharaf iyo xoog lagaga haybadaysto leh, waa inay ka faa’iidaystaan ilaha xoogaysiga, iskana jiraan ilaha burburka iyo nugaylka. Ciddii rabta inay u-hawlgasho ummad Soomaaliyeed oo cagaheeda ku taagan, waxaa u doorran saddex mid: 1. Qaran ku dhisan qowmiyad 2. Qaran ku dhisan qabiil 3. Qaran ku dhisan Islaamnimo Qaran ku dhisan qabiil waa mid aan weligii lagu gaadhi karin horumar, nabad iyo xorriyad midna. Sababtoo ah, qabiilku waa unug wax kala qaybiya ee ma aha mid wax mideeya. Umadna waxaa looga baahan yahay midnimo. Mar kale, qabiil in qaran lagu dhisto waxaa Soomaalida la jecel ummadaha la colka ah ee raba inay kula dhaqmaan qaybi oo xukun. Qaran ku dhisan qowmiyad, waa mid hirgeli kara haddii la heli karo caddaalad, dhaqaale iyo ammaan madax bannaan. Haddii caddaalad la waayo, suurtogal ma aha in Soomaalidu wax isla wadaagto inkasta oo loogu heeso “Soomaaliyeey toosoo, toosoo isku tiirsada eey.” Maxaa yeelay waxaa hore loo yidhi, “Rag caddaalad waayaa sidii cawsha kala yaac.” Yacnii haddii caddaalad la waayo, qabiilkii ayaa dabiici ah oo loo laabanayaa. Sidoo kale waxaa la hirgelin karaa qaran ku dhisan qowmiyad haddii dhaqaale la helo isla markaana caddaalad loo maamuli karo. Qaran ku dhisan Islaamnimo ama qaran Soomaaliyeed oo Islaami ah, waa midka keli ah ee hirgelin kara ummad Soomaaliyeed oo sharaf iyo xoog leh. Sababtoo ah, Soomaalidu aad ayey u rumaysan tahay Islaamnimada, waxaana suurtogal ah inay naftooda iyo maalkooda ku difaacdaan qarankaas. Caddaaladda Islaamka waa ay ku kalsoon yihiin oo xitaa haddii xukunku gacanta ugu jiro cid aan isku qabiil la ahayn, waa loo hoggaansamayaa badiyaaba. Laakiin Soomaali iyo qarannimo Islaam ku dhisan la isuma oggola. Yacnii beesha caalamka ee xilligan ayaan oggolayn. Waxaanan ku qanacsanahay, xitaa haddii boqolkiiba boqol Soomaalidu sidaas doortaan, in lagu soo duulayo oo aan loo oggolaan karin fursad ay u helaan qaran Islaamnimo ku salaysan. Bal haddaba akhristow adiguba xalkii soo hel. Weliba aan kuugu celiyee, Islaamku waa quwad midayn karta oo xoogayn karta Soomaalida. Qabiilkuna waa gol-jilic laga burburin karo oo kala kaxayn karta Soomaalida. Qowmiyadduna waa kolba kii ay labadaas u dhawaato. Haddii ay Islaamnimo u dhawaato rajo ayaa jirta, haddiise ay qabiilka u dhawaato quus keli ah ugu talo gal. TIXRAACYO 1. Diiwaanka Gabayadii Sayidka – Aw Jaamac Cumar Ciise 2. Hal Aan Tabayey: Baal-Taariikheedkii iyo Gabayadii Xaaji Aadan Afqallooc – Maxamed Baashe X. Xasan 3. Gabayadii Cismaan Keenadiid – Yaasiin Cismaan Keenadiid 4. Geeddi-Socodkii Yuusuf Xaaji Aadan Qabille – Saynab Yuusuf Xaaji Aadan 5. www.hoygasuugaanta.com 6. www.doollo.com 7. www.toggaherer.com 8. www.somalitalk.com 9. Cajalado maqal iyo muuqaalba leh oo ay duubeen abwaanno kala duwan. 10. Soomaali Weyn: Dhalashadeedii iyo Dhabarjabkeedii – Dktr. Saadiq Enow 11. Culuumta Maansada – Siciid Maxamuud Gaheyr 12. Xog ururin iyo ogaal toos ah. AAN OOYEE ALBAABKA II XIDHA Maxamed Xirsi Guuleed “Cabdi-Bashiir” Buuggani waa taariikh, suugaan, siyaasad iyo waddaniyad kolba sidii aad u akhrido. Wuxuu ku milicsiinayaa taariikh dhaweyd oo gumaysteyaal ku habsadeen umadda Soomaaliyeed iyo siyaabihii looga falceliyey iyo jawaabtii gumaystayaasha ee falcelintaas. Waa suugaan ay tiriyeen geesiyaal dhiidhiyey oo ay kuwani kamid ahaayeen: Rajulka kaafur ah ee rugtaan yimid Sidii rasuul Rabbi nooma soo dirin Mana rabnoo naga reed bax waa niri. – Sheekh Axmed Gabyow, 1891 Idinkaa dalkaba lehee, dawlad maad u noqotaan Illeen doqoni calaf maleh, dubaax maxaa ka baylahay. – Sayid Maxamed Cabdille Xasan, 1900-1920 Kol haddii dhulkeenii xadkaas, dhereran loo yeelay Oo moodhikaar lagu dhibtiray, wada dhabbaynaayo Dhallaan weeye kii haybiyaa, dhaqasho xoolaade. – Muxumed Aw Cabdi Xaashi, 1939 AAN OOYEE ALBAABKA II XIDHA waa jeedal weli ku laba dhacaya naannida damiirka qofka Soomaaliyeed. Nus qarni in ka badan ka hor, ayuu Maxamed Ismaaciil “Barkhadcas” shaabuuggaas isla dul taagey oo la dhacay demmanaantii maanka Soomaalidii la gumaysanayey. Karbaashkaas mid la mid ah ayuu, mar kale maantana, 54 sannadood ka dib, qoraaga buuggani inagu oogayaa. Tebinta dhacdooyinka taariikheed ka sokow, wuxuu buuggani ka kooban yahay suugaan naqwo ah oo dareenka hurda-jiifka ka kicinaysa, sahanna u ah aragti qawmi ah oo cokaniyo dhis qaran oo Alle-yaqaan ah. – Maxamed Baashe Xaaji Xasan Buuggani waa qayb ka mid ah sooyaalka ummaddan maanta kala daadsan iyo halgankii ay soo martay oo loo cuskaday suugaanta oo ah diiwaanka kaliya ee loo laabmo haddii la rabo in wax la qoro. Maanta oo kale buuggani waxa uu hiil u yahay dhallinyarada Soomaalida ee nasiib u wayday in dugsiyada ay ku bartaan sooyaalkoodii dhabta ahaa ee awowyaashood iyo dalkooduba soo mareen. – Cabdalla Xaaji Cismaan, qoraaga buugga Xeer Ciise Suugaan mug wayn oo laga dheehanayo hal-abuur cufkiisu buuxo weeyaan. Alle ha u wada naxariisto raggaas, waa fikradahoodii iyo aragtidii ay dejiyeen sababta ay Soomaali ku guuleysatey. – Dktr. Saadiq Enow ISBN: 978-91-976661-5-7
← Af-Qalaad Aqoontu Miyaa?	Af-Soomaaliga iyo Warfaafinta Maanta →